စွန်းထင်ခဲ့သော မင်စက်များ | ကောင်းမြတ်ထွန်း
ဘာသာရေးအတွက် ဖတ် ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ
KMD Institute မှ Alumni များ၏ အကြံပြုစကားများ။
KMD Institute: “Memorable Alumni’s Advice”
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ အောင်မြင်မှုကို လိုလားသောမျိူးဆက်သစ် ITကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ အနာဂတ်ခရီးလမ်း ပညာရေးနှင့် ဘ၀ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မယ့် KMD Institute မှ Alumni များ၏ အကြံပြုစကားများ။ အပိုင်းလေးရောက်လာပြီနော်။
ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး KMD Institute တွင် NCC Education (UK) မှ ပထမနှစ် International Diploma in Computer Studies (IDCS), ဒုတိယနှစ်International Advanced Diploma in Computer Studies (IADCS) နှင့် London Metropolitan University (UK) မှ Computer Science and Information Systems (B.Sc) ဘွဲ့ ကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားဘ၀ KMD Institute တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့သော စာမေးပွဲများတွင် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ပြီး Regional High Achiever, Global High Achiever ဆုများ၊ KMD Institute မှ ပေးအပ်သော ပညာသင်ဆုများလည်း ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
KMD မှာ ပညာသင်ကြား ဘွဲ့ ရပြီးတဲ့နောက်မှာ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ရန်ကုန်မြို့ တွင် တည်ထောင်ထားသော Myanmar DCR Co., Ltd တွင် Programmer တယောက်အနေနဲ့ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Myanmar DCR Co., Ltd တွင် အချိန်တိုအတွင်း Project Leader ထို့နောက် Manager စသဖြင့် ရာထူးတိုးမြှင့် တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့ ပါတယ်။ ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၄ အထိ Global Innovation Consulting Inc. (GIC) တွင် System Engineer အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ အစရှိသော နိုင်ငံများကို သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်သော ဂျပန်နိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် Consultation လုပ်ငန်းတွင် Division Manager အဖြစ် Sales/ Marketing/ Promotion / Management ပိုင်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ ပါတယ်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ရုံးခွဲ ဖြစ်သော Cebu မြို့ ရှိ Global Innovation Consulting Philippines Inc. (GICP) တွင် CEO တယောက် အနေဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ခွင့်ရသော်လည်း မိမိဝါသနာပါရာ သံလျင်စက်မှုလက်မှု ကောလိပ်မှာ EC (Electronic Engineering) ကို တက်ရောက်ခဲ့ ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း အောင်မြင်ကတည်းက နိုင်ငံခြားမှာ ပညာရှင်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ၀င်ငွေရှာဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် သံလျင်စက်မှုလက်မှု ကောလိပ်ဒုတိယနှစ် တက်ရောက်နေစဉ် မှာ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်သို့ ပညာတော်သင်တက်ရောက်မည့် ဖခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ မိသားစုလိုက် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် သွားရောက်နေထိုင်စဉ်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဂျပန်စာသင်ရင်း စားသောက်ဆိုင်များတွင် အချိန်ပိုင်း ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်စဉ်ကတည်းက ဂျပန်နိုင်ငံ အတွေ့ အကြုံများကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်သို့ပြန်လာပြီး IT ပညာရပ်ကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုဘွဲ့ရရှိနိုင်ရန်အတွက် KMD Institute မှာ International Campus ရှိတဲ့ London Metropolitan University (UK)မှ ပေးအပ်သော Computer Science and Information Systems (B.Sc) ဘွဲ့ ကိုရယူခဲ့ပါတယ်။ KMD Institute သည် တက်ရောက်စဉ်ကာလအတွင်း ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများတွင် အခက်အခဲ မရှိအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးသည်သာမက ပညာရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များတွင်လည်း အတွေ့ အကြုံကောင်းများ ရရှိအောင် ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။
ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းက “လုပ်ငန်းခွင်မှာ မိမိပညာကို ပြန်လည်အသုံးချ နိုင်ဖို့ဆိုရင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျောင်းသားဘ၀မှာ ကျောင်းမှသင်ကြားထားသော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အခြေခံ ပညာရပ်များကို ပိုင်နိုင်ရပါမယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ ကျောင်းမှ သင်ကြားပေးတာကိုသာမက မိမိကိုယ်တိုင်က ထပ်ဆောင်းပြီးလေ့လာ ဆည်းပူးဖို့ အရေးကြီးကြောင်းပြောပါတယ်။ အားလုံးကတော့ မိမိကုိုယ်တိုင် ကြိုးစားမူက အဓိက ဖြစ်တယ်” လို့ပြောပါတယ်။
ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းသည် ပထမနှစ် (International Diploma in Computer Studies, NCC (UK))၊ ဒုတိယနှစ် (Internatioinal Advance Diploma in Computer Studies, NCC (UK)) စာမေးပွဲများတွင် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ပြီး Regional High Achiever, Global High Achiever ဆုများ၊ကို ရရှိပါတယ်။ KMD Institute မှ ပညာသင်ဆုများကို လည်း ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
KMD Institute မှ London Metropolitan University (UK) မှ ပေးအပ်သော Computer Science and Information Systems (B.Sc) ဘွဲ့ ရရှိပြီးတဲ့အခါမှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ၂နှစ်ကျော်ခန့် နေထိုင်ခဲ့သဖြင့် ဂျပန်စာနှင့် ဂျပန်စကားလည်း တတ်ကျွမ်းသောကြောင့် ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းသည် Myanmar DCR Co.,Ltd မှာ လစာFEC 80 ကျော်လောက်သာ ဖြစ်ပေမယ့် ဂျပန် Software Development အတွေ့  အကြုံကို ရရှိနိုင်ဘို့အတွက် Software Developer အဖြစ် ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှ Software Engineer တွေနဲ့ ဆက်သွယ် ပြောကြား အလုပ်လုပ် ကိုင်ရတဲ့အတွက် အတွေ့ အကြုံကောင်းတွေ ရရှိခဲ့တယ်။
ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းက “ ပထမဆုံး အလုပ်အနေနဲ့ လုပ်ခလစာဆိုတာထက် အတွေ့ အကြုံကောင်းကို ပေးနိုင်မယ် အခြေခံကို တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်လို့ရတဲ့ အလုပ်ကို ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။ ပထမဆုံး အလုပ်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရာမှာ မိမိအနေနဲ့ နောင် ၃နှစ် ၅နှစ်မှာ ဖြစ်ချင်တာ ဘာလဲဆိုတာကို သိရှိပြီး၊ အဲ့ဒါကို ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ အလုပ်ကို ရွေးချယ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ မိမိဖြစ်ချင် မိမိလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နိုင်ဖို့ မိမိကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ဖို့ တာဝန်အရှိဆုံးသူကတော့ မိမိကုိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပြီး ထိုတာဝန်ကို ပြည့်ဝအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ကလည်း မိမိတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာရှင်အဖြစ် အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင် အတွေ့ အကြုံယူဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းက ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ Global Innovation Consulting Inc. (GIC) ကို အလုပ်ပြောင်းရွေ့ ခဲ့ပါတယ်။ Offshore Software Development အတွေ့ အကြုံ ၃ နှစ်ကျော်နှင့် ဂျပန်စာ စကား ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် System Engineer တယောက်အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ အလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်လို့ ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းက ပြောပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာစကားလည်း ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံတကာနဲ့  ဆက်ဆံအလုပ်လုပ်ရတဲ့ System Development လုပ်ငန်းတွေမှာ ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံသား System Engineer တွေက အင်္ဂလိပ်စာ စကား အားနည်းချက်ရှိတာကြောင့်၊ နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ “ ဂျပန်လုပ်ငန်းတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဂျပန်စာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား System Engineer များအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းက အလွန်ပေါများတယ်” လို့ ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်စဉ်က မရနိုင်တဲ့ အတွေ့ အကြုံ များစွာဖြစ်တဲ့ Software Development တခုတည်း မဟုတ်ပဲ၊ End-User Client နဲ့ စကားပြောဆို ဆက်ဆံပြီး လိုအပ်ချက်များကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးရတဲ့ အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ ဒီအခါမှာ “KMD Institute မှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ Software Development Lifecycle/Methodology တွေ ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ အသုံးချနိုင်ခဲ့တယ်။ KMD Institute မှာ သင်ကြားခဲ့တဲ့ အခြေခံတွေကို ပိုင်နိုင်နေခြင်းအားဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Software Engineer/ System Engineer တုို့နဲ့ ပြောဆို အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှာလည်း အခက်အခဲမရှိ လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ KMD Institute သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ Software Engineering နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။” လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း အခြေခံပိုင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်းကို ထပ်မံ သဘောပေါက်ခဲ့ရ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာကျောင်းသားလူငယ်အဖွဲ့  (Myanmar Youth and Students Association Japan (MYSA) မှာလည်း Volunteer Leader (Executive Comittee Member) အဖြစ် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ခုနှစ် အတွက်MYSA ရဲ့ President အဖြစ် ခေါင်းဆောင် လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်လို့ ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းကပြောပါတယ်။ “ ကုမ္ဗဏီမှာ အလုပ်လုပ်တာ တခုတည်း မဟုတ်ပဲ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး၊ အခြားသော နိုင်ငံတကာ အသင်းအဖွဲ့ တွေအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ အတွေ့ အကြုံကောင်းတွေရယူတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်” လို့ ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းက ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၄ခုနှစ်အထိ System Engineer အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ၇နှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနောက်၊ Marketing / Sales / Promotion /Management စတဲ့ အတွေ့ အကြုံကို ရရှိဖို့အတွက် GIC ကုမ္ဗဏီ Global Strategy Division မှာ ဂျပန်အခြေစိုက် Division Manager အဖြစ် ပြောင်းရွေ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် ဆိုပါတယ်။ ဒါက အနာဂတ်မှာ စီပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကြောင့် လိုအပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံကို ရယူနိုင်ဖို့ Career ပြောင်းလဲမှု ဆုံးဖြတ်ချက်တခုပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ GIC က မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွေမှာ ရုံးခွဲများရှိပြီး၊ ၄င်းနိုင်ငံတွေမှာ သွားရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ အလုပ်လုပ်မယ့် ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်များကို Consulting Services များလည်း ၀န်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Global Strategy Division ရဲ့  Division Manager အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းတွင် မြန်မာ၊ဖိလစ်ပိုင်၊ အမေရိကန် တုို့နှင့်ပတ်သက်တဲ့ Promotion / Marketing / Sales လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အဆင်ပြေစွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် GIC မှ ဂျပန်လူမျိုး Consultant များနဲ့ အတူတူ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီကစပြီး ဖိလစ်ပိုင်မှာ CEO တယောက်အနေနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးဝန်ထမ်းများကို အုပ်ချုပ်မှုတာဝန်နဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ၊ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်များကို ယူထားရပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ Company တည်ထောင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဂျပန်လုပ်ငန်းများအတွက် Consulting Services နဲ့  Back Office Services (Accounting / Payroll , etc) စတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများကို ဂျပန်ဝန်ထမ်း ၂ ဦး၊ ဖိလစ်ပိုင်ဝန်ထမ်း ၉ ဦးနှင့် အတူတူ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အများကြီးဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံတခုဖြစ်လို့၊ မြန်မာနိုင်ငံသား တယောက်အနေနဲ့ အတွေ့ အကြုံကောင်းတွေရရှိစေပါတယ်။ မတူညီတဲ့ နိုင်ငံက မတူညီတဲ့ လူမျိုးများ စုပေါင်းပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် စိန်ခေါ်မှုတွေများပေမယ့် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အတွေ့ အကြုံများကို ရရှိစေပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ လူငယ်များအတွက် အကျိူးပြုမူများ
IT Engineer လူသားအရင်းအမြစ် ရှားပါးလာတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို မိမိကဲ့သို့သော IT Engineer များ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်အတွက် ဂျပန်ITလုပ်ငန်းများကို မြန်မာ IT Engineer များအကြောင်း မိတ်ဆက် ပြောကြား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ နှစ်စဉ် မြန်မာ IT Engineer အယောက် ၁၀၀ ကျော် အလုပ်အကိုင် ရရှိရန် ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မိမိအတွက် အတွေ့ အကြုံရှာရင်း၊ မိမိကဲ့သို့သော မြန်မာလူငယ်များ အတွေ့အကြုံကောင်းများရရှိရန် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန်အတွက် “မြန်မာ IT ပညာရှင်လူငယ်များကို စောင့်မျှော်နေသော ဂျပန်နှင့် အခြားဆောင်းပါးများ ” စာအုပ်ကိုလည်း ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ GIC ကကျင်းပတဲ့ Job Fair 2017 မှာ အခမဲ့ ဝေပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထိုစာအုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း စာအုပ်ဆိုင်များမှာလည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး၊ Apple Book Store နဲ့  Amazon Kindle Book Store မှာလည်း ၀ယ်ယူအားပေးနိုင်တယ်လုို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းက KMD Institute က ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများကို နှုတ်ဆက်အကြံပေးစကားအနေနဲ့ ပြောတာကတော့ “ကိုယ်မဖြစ်ချင်တဲ့ မိမိ မဖြစ်စေဖို့နဲ့ မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ ပစ္စုပ္ဗါန်၊ အနာဂတ်ကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး တည်ဆောက်ဖို့က မိမိတာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုတွေအတွက် ရှုံးနိမ့်မှု၊ ကျဆုံးမှုကို ကြောက်လန့်မနေပဲ မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘယ်အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ယူစိတ်ရှိဖုို့နဲ့ မိမိ ပစ္စုပ္ဗါန်၊ အနာဂတ်ကို တာဝန်ယူတတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်လို့ “ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
KMD Institute မှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများလည်း အောင်မြင်နေတဲ့ KMD Institute ကျောင်းသားဟောင်း ကိုကောင်းမြတ်ထွန်း အကြောင်းကို သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းရေးသားတဲ့ Pageများကိုသွားရောက် လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ URL များကတဆင့် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Facebook Page :
https://www.facebook.com/KaungMyatTun.mm/ WordPress Blog : https://kaungmyattun.wordpress.com/ https://www.facebook.com/KaungMyatTun.Blog/ LinkedIn Page: https://www.linkedin.com/in/kaungmyattun1/
ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါး https://www.facebook.com/…/a.32814060064…/1076793945781804/… ကိုကောင်းမြတ်ထွန်းရေးသားထားတဲ့ “မြန်မာ IT ပညာရှင်လူငယ်များကို စောင့်မျှော်နေသော ဂျပန်နှင့် အခြား ဆောင်းပါးများ ” စာအုပ်ကို ebook အဖြစ် Apple iBook Storeတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ For Apple iBook Store (for iPhone) https://itunes.apple.com/…/japan-it-for-myanm…/id1317535802…
Scholarship နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၀၈၆၇၉၀၃၊၀၁-၇၀၀၈၉၅၊ ၅၃၄၁၇၀၊ ၅၀၂၂၃၃၊ ကိုဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
KMD Institute မှ Alumni မြား၏ အကွံပွုစကားမြား။
မွနျမာနိုငျငံတဈဝှမျးမှ အောငျမွငျမှုကို လိုလားသောမြိူးဆကျသဈ ITကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြား၏ အနာဂတျခရီးလမျး ပညာရေးနှငျ့ ဘဝရညျမှနျးခကျြမြားကို အကောငျးဆုံး အထောကျအပံ့ပေးနိုငျမယျ့ KMD Institute မှ Alumni မြား၏ အကွံပွုစကားမြား။ အပျိုငျးလေးရောကျလာပွီနျော။
ကိုကောငျးမွတျထှနျးဟာ ၂၀၀၅ ခုနှဈမှ စတငျပွီး KMD Institute တှငျ NCC Education (UK) မှ ပထမနှဈ International Diploma in Computer Studies (IDCS), ဒုတိယနှဈInternational Advanced Diploma in Computer Studies (IADCS) နှငျ့ London Metropolitan University (UK) မှ Computer Science and Information Systems (B.Sc) ဘှဲ့ ကို ရရှိခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ကြောငျးသားဘဝ KMD Institute တကျရောကျသငျကွားခဲ့သော စာမေးပှဲမြားတှငျ ထူးခြှနျစှာ အောငျမွငျပွီး Regional High Achiever, Global High Achiever ဆုမြား၊ KMD Institute မှ ပေးအပျသော ပညာသငျဆုမြားလညျး ရရှိခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
KMD မှာ ပညာသငျကွား ဘှဲ့ ရပွီးတဲ့နောကျမှာ ၂၀၀၈ခုနှဈတှငျ ဂပြနျနိုငျငံမှ ရနျကုနျမွို့ တှငျ တညျထောငျထားသော Myanmar DCR Co., Ltd တှငျ Programmer တယောကျအနနေဲ့ စတငျလုပျကိုငျခဲ့ပါတယျ။ Myanmar DCR Co., Ltd တှငျ အခြိနျတိုအတှငျး Project Leader ထို့နောကျ Manager စသဖွငျ့ ရာထူးတိုးမွှငျ့ တာဝနျမြား ထမျးဆောငျခဲ့ ပါတယျ။ ၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၄ အထိ Global Innovation Consulting Inc. (GIC) တှငျ System Engineer အဖွဈလညျးကောငျး၊ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှ ၂၀၁၇ ခုနှဈ အထိ မွနျမာနိုငျငံ၊ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ၊ အမရေိကနျနိုငျငံ အစရှိသော နိုငျငံမြားကို သှားရောကျ အလုပျလုပျကိုငျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံခငျြသော ဂပြနျနိုငျငံမှ လုပျငနျးရှငျမြား အတှကျ Consultation လုပျငနျးတှငျ Division Manager အဖွဈ Sales/ Marketing/ Promotion / Management ပိုငျးတှငျ တာဝနျ ထမျးဆောငျခဲ့ ပါတယျ။ ၂၀၁၈ခုနှဈမှစတငျပွီး ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ ရုံးခှဲ ဖွဈသော Cebu မွို့ ရှိ Global Innovation Consulting Philippines Inc. (GICP) တှငျ CEO တယောကျ အနဖွေငျ့ တာဝနျထမျးဆောငျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ကိုကောငျးမွတျထှနျးသညျ ၁၉၉၉ ခုနှဈတှငျ တက်ကသိုလျဝငျတနျးကို ထူးခြှနျစှာ အောငျမွငျပွီး ဆေးတက်ကသိုလျသို့တကျရောကျခှငျ့ရသျောလညျး မိမိဝါသနာပါရာ သံလငျြစကျမှုလကျမှု ကောလိပျမှာ EC (Electronic Engineering) ကို တကျရောကျခဲ့ ပါတယျ။ တက်ကသိုလျ ဝငျတနျး အောငျမွငျကတညျးက နိုငျငံခွားမှာ ပညာရှငျအနနေဲ့ အလုပျလုပျကိုငျပွီး ၀ငျငှရှောဖို့ ရညျရှယျခကျြထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၀၂ခုနှဈတှငျ သံလငျြစကျမှုလကျမှု ကောလိပျဒုတိယနှဈ တကျရောကျနစေဉျ မှာ ကြိုတိုတက်ကသိုလျသို့ ပညာတျောသငျတကျရောကျမညျ့ ဖခငျဖွဈသူနှငျ့အတူ မိသားစုလိုကျ ဂပြနျနိုငျငံတှငျ သှားရောကျနထေိုငျစဉျက ဂပြနျနိုငျငံမှာ ဂပြနျစာသငျရငျး စားသောကျဆိုငျမြားတှငျ အခြိနျပိုငျး ၀ငျရောကျလုပျကိုငျစဉျကတညျးက ဂပြနျနိုငျငံ အတှေ့ အကွုံမြားကိုလညျး ရရှိခဲ့ပါတယျ။
၂၀၀၅ခုနှဈတှငျ မွနျမာပွညျသို့ပွနျလာပွီး IT ပညာရပျကို နိုငျငံတကာ အသိအမှတျပွုဘှဲ့ရရှိနိုငျရနျအတှကျ KMD Institute မှာ International Campus ရှိတဲ့ London Metropolitan University (UK)မှ ပေးအပျသော Computer Science and Information Systems (B.Sc) ဘှဲ့ ကိုရယူခဲ့ပါတယျ။ KMD Institute သညျ တကျရောကျစဉျကာလအတှငျး ဘာသာရပျဆိုငျရာ လလေ့ာမှုမြားတှငျ အခကျအခဲ မရှိအောငျ ဖွညျ့ဆညျးပေးသညျသာမက ပညာရေး၊ လူမှုရေး ကိစ်စရပျမြားတှငျလညျး အတှေ့ အကွုံကောငျးမြား ရရှိအောငျ ပံ့ပိုးပေးပါတယျ။
ကိုကောငျးမွတျထှနျးက “လုပျငနျးခှငျမှာ မိမိပညာကို ပွနျလညျအသုံးခြ နိုငျဖို့ဆိုရငျ ပထမဆုံးအနနေဲ့ ကြောငျးသားဘဝမှာ ကြောငျးမှသငျကွားထားသော ဘာသာရပျဆိုငျရာ အခွခေံ ပညာရပျမြားကို ပိုငျနိုငျရပါမယျ။ ဒုတိယအနနေဲ့ကတော့ ကြောငျးမှ သငျကွားပေးတာကိုသာမက မိမိကိုယျတိုငျက ထပျဆောငျးပွီးလလေ့ာ ဆညျးပူးဖို့ အရေးကွီးကွောငျးပွောပါတယျ။ အားလုံးကတော့ မိမိကုိုယျတိုငျ ကွိုးစားမူက အဓိက ဖွဈတယျ” လို့ပွောပါတယျ။
ကိုကောငျးမွတျထှနျးသညျ ပထမနှဈ (International Diploma in Computer Studies, NCC (UK))၊ ဒုတိယနှဈ (Internatioinal Advance Diploma in Computer Studies, NCC (UK)) စာမေးပှဲမြားတှငျ ထူးခြှနျစှာ အောငျမွငျပွီး Regional High Achiever, Global High Achiever ဆုမြား၊ကို ရရှိပါတယျ။ KMD Institute မှ ပညာသငျဆုမြားကို လညျး ရရှိခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
KMD Institute မှ London Metropolitan University (UK) မှ ပေးအပျသော Computer Science and Information Systems (B.Sc) ဘှဲ့ ရရှိပွီးတဲ့အခါမှာ ဂပြနျနိုငျငံမှာ ၂နှဈကြျောခနျ့ နထေိုငျခဲ့သဖွငျ့ ဂပြနျစာနှငျ့ ဂပြနျစကားလညျး တတျကြှမျးသောကွောငျ့ ကိုကောငျးမွတျထှနျးသညျ Myanmar DCR Co.,Ltd မှာ လစာFEC 80 ကြျောလောကျသာ ဖွဈပမေယျ့ ဂပြနျ Software Development အတှအေ့ကွုံကို ရရှိနိုငျဘို့အတှကျ Software Developer အဖွဈ ၀ငျရောကျ လုပျကိုငျခဲ့ ပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံမှ Software Engineer တှနေဲ့ ဆကျသှယျ ပွောကွား အလုပျလုပျ ကိုငျရတဲ့အတှကျ အတှေ့ အကွုံကောငျးတှေ ရရှိခဲ့တယျ။
ကိုကောငျးမွတျထှနျးက “ ပထမဆုံး အလုပျအနနေဲ့ လုပျခလစာဆိုတာထကျ အတှေ့ အကွုံကောငျးကို ပေးနိုငျမယျ အခွခေံကို တညျဆောကျနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့လို့ရတဲ့ အလုပျကို ၀ငျရောကျလုပျကိုငျသငျ့ပါတယျ။ ပထမဆုံး အလုပျအနနေဲ့ အလုပျလုပျရာမှာ မိမိအနနေဲ့ နောငျ ၃နှဈ ၅နှဈမှာ ဖွဈခငျြတာ ဘာလဲဆိုတာကို သိရှိပွီး၊ အဲ့ဒါကို ဖွဈအောငျ လုပျနိုငျမယျ့ ပတျဝနျးကငျြရှိတဲ့ အလုပျကို ရှေးခယျြဖို့ အရေးကွီးပါတယျ” လို့ ပွောပါတယျ။ မိမိဖွဈခငျြ မိမိလုပျခငျြတဲ့ အလုပျကို လုပျနိုငျဖို့ မိမိကိုယျတိုငျ ရှေးခယျြဖို့ တာဝနျအရှိဆုံးသူကတော့ မိမိကုိုယျတိုငျပဲဖွဈပွီး ထိုတာဝနျကို ပွညျ့ဝအောငျ လုပျဆောငျဖို့ကလညျး မိမိတာဝနျပဲဖွဈပါတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
နိုငျငံရပျခွားမှာ ပညာရှငျအဖွဈ အလုပျသှားရောကျလုပျကိုငျ အတှေ့ အကွုံယူဖို့ ရညျရှယျထားတဲ့ ကိုကောငျးမွတျထှနျးက ၂၀၁၁ ခုနှဈမှာ Global Innovation Consulting Inc. (GIC) ကို အလုပျပွောငျးရှေ့ ခဲ့ပါတယျ။ Offshore Software Development အတှေ့ အကွုံ ၃ နှဈကြျောနှငျ့ ဂပြနျစာ စကား ကြှမျးကငျြမှုကွောငျ့ System Engineer တယောကျအဖွဈ ဂပြနျနိုငျငံမှာ လှယျလှယျကူကူ အလုပျလုပျနိုငျခဲ့ ပါတယျလို့ ကိုကောငျးမွတျထှနျးက ပွောပါတယျ။ အင်ျဂလိပျစာစကားလညျး ကြှမျးကငျြသူဖွဈလို့ ဂပြနျနိုငျငံတှငျး နိုငျငံတကာနဲ့ဆကျဆံအလုပျလုပျရတဲ့ System Development လုပျငနျးတှမှော ၀ငျရောကျ လုပျကိုငျနိုငျခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံသား System Engineer တှကေ အင်ျဂလိပျစာ စကား အားနညျးခကျြရှိတာကွောငျ့၊ နိုငျငံတကာလုပျငနျးတှေ လုပျကိုငျနတေဲ့ “ ဂပြနျလုပျငနျးတှအေတှကျ အင်ျဂလိပျစာ၊ ဂပြနျစာ ကြှမျးကငျြတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား System Engineer မြားအတှကျ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးက အလှနျပေါမြားတယျ” လို့ ကိုကောငျးမွတျထှနျးက ပွောပါတယျ။
ရနျကုနျမှာ အလုပျလုပျစဉျက မရနိုငျတဲ့ အတှေ့ အကွုံ မြားစှာဖွဈတဲ့ Software Development တခုတညျး မဟုတျပဲ၊ End-User Client နဲ့ စကားပွောဆို ဆကျဆံပွီး လိုအပျခကျြမြားကို သုံးသပျဆှေးနှေးရတဲ့ အလုပျကိုလညျး လုပျကိုငျရပါတယျ။ ဒီအခါမှာ “KMD Institute မှာ သငျခဲ့ရတဲ့ Software Development Lifecycle/Methodology တှေ ကို ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ အသုံးခနြိုငျခဲ့တယျ။ KMD Institute မှာ သငျကွားခဲ့တဲ့ အခွခေံတှကေို ပိုငျနိုငျနခွေငျးအားဖွငျ့ ဂပြနျနိုငျငံမှာ Software Engineer/ System Engineer တုို့နဲ့ ပွောဆို အလုပျလုပျကိုငျရာမှာလညျး အခကျအခဲမရှိ လုပျကိုငျနိုငျခဲ့တယျ။ KMD Institute သငျကွားခဲ့ရတဲ့ Software Engineering နဲ့ ပတျသကျတဲ့ အကွောငျး အရာတှကေို လကျတှေ့ အသုံးခနြိုငျခဲ့ပါတယျတဲ့။” လို့ ဆိုပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံမှာ အလုပျလုပျရငျး အခွခေံပိုငျနိုငျဖို့ အရေးကွီးကွောငျးကို ထပျမံ သဘောပေါကျခဲ့ရ တယျလို့ ပွောပါတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံမှာ အလုပျလုပျကိုငျရငျး လူမှုရေးလုပျငနျးအနနေဲ့ ဂပြနျနိုငျငံရောကျ မွနျမာကြောငျးသားလူငယျအဖှဲ့(Myanmar Youth and Students Association Japan (MYSA) မှာလညျး Volunteer Leader (Executive Comittee Member) အဖွဈ တကျကွှစှာ ပါဝငျလှုပျရှားခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၆ခုနှဈ အတှကျMYSA ရဲ့ President အဖွဈ ခေါငျးဆောငျ လှုပျရှားခဲ့ပါတယျလို့ ကိုကောငျးမွတျထှနျးကပွောပါတယျ။ “ ကုမ်ဗဏီမှာ အလုပျလုပျတာ တခုတညျး မဟုတျပဲ လူမှုရေးလုပျငနျးတှမှော ၀ငျရောကျလုပျကိုငျပွီး၊ အခွားသော နိုငျငံတကာ အသငျးအဖှဲ့ တှအေပါအဝငျ မွနျမာနိုငျငံသားအခငျြးခငျြး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျတတျတဲ့ အတှေ့ အကွုံကောငျးတှရေယူတတျဖို့ အရေးကွီးတယျ” လို့ ကိုကောငျးမွတျထှနျးက ပွောပါတယျ။
ကိုကောငျးမွတျထှနျးက ၂၀၀၈ ခုနှဈကနေ ၂၀၁၄ခုနှဈအထိ System Engineer အဖွဈ ဂပြနျနိုငျငံမှာ ရနှဈလုပျကိုငျခဲ့ပွီးနောကျ၊ Marketing / Sales / Promotion /Management စတဲ့ အတှေ့ အကွုံကို ရရှိဖို့အတှကျ GIC ကုမ်ဗဏီ Global Strategy Division မှာ ဂပြနျအခွစေိုကျ Division Manager အဖွဈ ပွောငျးရှေ့ တာဝနျ ထမျးဆောငျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တယျ ဆိုပါတယျ။ ဒါက အနာဂတျမှာ စီပှားရေးလုပျငနျး စီမံခနျ့ခှဲဖို့ရညျရှယျထားတာကွောငျ့ လိုအပျတဲ့ အတှအေ့ကွုံကို ရယူနိုငျဖို့ Career ပွောငျးလဲမှု ဆုံးဖွတျခကျြတခုပဲ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ GIC က မွနျမာနိုငျငံ၊ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ၊ အမရေိကနျနိုငျငံတှမှော ရုံးခှဲမြားရှိပွီး၊ ၄ငျးနိုငျငံတှမှော သှားရောကျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံ အလုပျလုပျမယျ့ ဂပြနျလုပျငနျးရှငျမြားကို Consulting Services မြားလညျး ၀နျဆောငျမှုပေးပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံအခွစေိုကျ Global Strategy Division ရဲ့Division Manager အဖွဈ ဂပြနျနိုငျငံတှငျးတှငျ မွနျမာ၊ဖိလဈပိုငျ၊ အမရေိကနျ တုို့နှငျ့ပတျသကျတဲ့ Promotion / Marketing / Sales လုပျငနျးမြားကို လုပျကိုငျပွီး ဂပြနျနိုငျငံသား လုပျငနျးရှငျမြား နိုငျငံရပျခွားမှာ အဆငျပွစှော အလုပျလုပျကိုငျနိုငျရနျ GIC မှ ဂပြနျလူမြိုး Consultant မြားနဲ့ အတူတူ အလုပျလုပျကိုငျခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၈ခုနှဈ ဧပွီကစပွီး ဖိလဈပိုငျမှာ CEO တယောကျအနနေဲ့ ဖိလဈပိုငျလူမြိုးဝနျထမျးမြားကို အုပျခြုပျမှုတာဝနျနဲ့ လုပျငနျးလညျပတျမှု ၊ ငှကွေေးလညျပတျမှု စီမံခနျ့ခှဲမှုတာဝနျမြားကို ယူထားရပါတယျ။ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံမှာ လာရောကျရငျးနှီးမွှုပျနှံ Company တညျထောငျအလုပျလုပျကိုငျနတေဲ့ ဂပြနျလုပျငနျးမြားအတှကျ Consulting Services နဲ့Back Office Services (Accounting / Payroll , etc) စတဲ့ ၀နျဆောငျမှုမြားကို ဂပြနျဝနျထမျး ၂ ဦး၊ ဖိလဈပိုငျဝနျထမျး ၉ ဦးနှငျ့ အတူတူ လုပျကိုငျဆောငျရှကျနတေယျ။ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံက မွနျမာနိုငျငံလိုပဲ ဖှံ့ဖွိုးဆဲ နိုငျငံဖွဈပွီး၊ ဂပြနျနိုငျငံအပါအဝငျ နိုငျငံခွားရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှေ အမြားကွီးဝငျရောကျ လုပျကိုငျနတေဲ့ နိုငျငံတခုဖွဈလို့၊ မွနျမာနိုငျငံသား တယောကျအနနေဲ့ အတှေ့ အကွုံကောငျးတှရေရှိစပေါတယျ။ မတူညီတဲ့ နိုငျငံက မတူညီတဲ့ လူမြိုးမြား စုပေါငျးပွီး အလုပျလုပျကိုငျခွငျးဖွငျ့ စိနျချေါမှုတှမြေားပမေယျ့ ကှဲပွားခွားနားတဲ့ အတှေ့ အကွုံမြားကို ရရှိစပေါတယျလို့ ပွောပါတယျ။
လကျရှိ လူငယျမြားအတှကျ အကြိူးပွုမူမြား
IT Engineer လူသားအရငျးအမွဈ ရှားပါးလာတဲ့ ဂပြနျနိုငျငံကို မိမိကဲ့သို့သော IT Engineer မြား လာရောကျ အလုပျလုပျကိုငျနိုငျစရေနျအတှကျ ဂပြနျITလုပျငနျးမြားကို မွနျမာ IT Engineer မြားအကွောငျး မိတျဆကျ ပွောကွား ဆောငျရှကျခဲ့ပွီး၊ နှဈစဉျ မွနျမာ IT Engineer အယောကျ ၁၀၀ ကြျော အလုပျအကိုငျ ရရှိရနျ ကူညီဆောငျရှကျခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။
မိမိအတှကျ အတှေ့ အကွုံရှာရငျး၊ မိမိကဲ့သို့သော မွနျမာလူငယျမြား အတှအေ့ကွုံကောငျးမြားရရှိရနျ ကူညီဆောငျရှကျ ပေးနိုငျရနျအတှကျ “မွနျမာ IT ပညာရှငျလူငယျမြားကို စောငျ့မြှျောနသေော ဂပြနျနှငျ့ အခွားဆောငျးပါးမြား ” စာအုပျကိုလညျး ရေးသားထုတျဝခေဲ့ပွီး၊ GIC ကကငျြးပတဲ့ Job Fair 2017 မှာ အခမဲ့ ဝပေေးခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ထိုစာအုပျကို မွနျမာနိုငျငံတှငျး စာအုပျဆိုငျမြားမှာလညျး ၀ယျယူနိုငျပွီး၊ Apple Book Store နဲ့Amazon Kindle Book Store မှာလညျး ၀ယျယူအားပေးနိုငျတယျလုို့ ဆိုပါတယျ။
ကိုကောငျးမွတျထှနျးက KMD Institute က ကြောငျးသူ ကြောငျးသားမြားကို နှုတျဆကျအကွံပေးစကားအနနေဲ့ ပွောတာကတော့ “ကိုယျမဖွဈခငျြတဲ့ မိမိ မဖွဈစဖေို့နဲ့ မိမိဖွဈခငျြတဲ့ ပစ်စုပ်ဗါနျ၊ အနာဂတျကို ကိုယျတိုငျဖနျတီး တညျဆောကျဖို့က မိမိတာဝနျသာဖွဈပါတယျ။ စိနျချေါမှုတှအေတှကျ ရှုံးနိမျ့မှု၊ ကဆြုံးမှုကို ကွောကျလနျ့မနပေဲ မိမိဆုံးဖွတျခကျြကို ဘယျအခွအေနမှောပဲဖွဈဖွဈ တာဝနျယူစိတျရှိဖုို့နဲ့ မိမိ ပစ်စုပ်ဗါနျ၊ အနာဂတျကို တာဝနျယူတတျတဲ့သူတှေ ဖွဈဖို့ အရေးကွီးပါတယျလို့ “ကိုကောငျးမွတျထှနျးက ပွောပါတယျ။
KMD Institute မှ ကြောငျးသူ ကြောငျးသားမြားလညျး အောငျမွငျနတေဲ့ KMD Institute ကြောငျးသားဟောငျး ကိုကောငျးမွတျထှနျး အကွောငျးကို သိရှိစနေိုငျရနျအတှကျ စီစဉျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
ကိုကောငျးမွတျထှနျးရေးသားတဲ့ Pageမြားကိုသှားရောကျ လလေ့ာခငျြတယျဆိုရငျတော့ အောကျပါ URL မြားကတဆငျ့ သှားရောကျလလေ့ာနိုငျပါတယျ။ Facebook Page :
ကွေးမုံသတငျးစာတှငျ ကိုကောငျးမွတျထှနျးရေးသားခဲ့သော ဆောငျးပါး https://www.facebook.com/…/a.32814060064…/1076793945781804/… ကိုကောငျးမွတျထှနျးရေးသားထားတဲ့ “မွနျမာ IT ပညာရှငျလူငယျမြားကို စောငျ့မြှျောနသေော ဂပြနျနှငျ့ အခွား ဆောငျးပါးမြား ” စာအုပျကို ebook အဖွဈ Apple iBook Storeတှငျ ဝယျယူနိုငျပါတယျ။ For Apple iBook Store (for iPhone) https://itunes.apple.com/…/japan-it-for-myanm…/id1317535802…
မိမိကိုယ်ကိုယ် ဆုံးမနိုင်သူ စွမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်အောင်
2018 Oct 1 @ Cebu
The reason why I can manage my conscious mind is that I know how to develop my unconscious mind.
Moreover, I am the master of my mind.
လောကကြီးထဲမှာ နေထိုင်ရင်း နေ့ဓဒူဝ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းတဲ့ အခါမှာ လူသားတွေဟာ မသိစိတ်၊ သိစိတ် နှစ်မျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလေ့ရှိကြတယ်။
မသိစိတ်အတွင်းမှာ တည်နေတဲ့ စိတ်အစဉ်က ငယ်ရွယ်စဉ်ဘယ်လို ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှင်သန်ကြီးထွားလာခဲ့ရသလဲဆိုတာနဲ့ မိမိ မသိစိတ်ကို ဘယ်လို တည်ဆောက်လာခဲ့သလဲအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ မသိစိတ်ဆိုတာ လေ့ကျင့်တည်ဆောက်ယူလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ထိုလူရဲ့  ငယ်ဘ၀က ဘယ်လို ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ထိုလူရဲ့  မသိစိတ်အတွင်း စိတ်အခြေခံက ကွာခြားသွားတတ်ပါတယ်။
ဖေဖေ ငယ်ရွယ်စဉ် ကလေးဘ၀ ပတ်ဝန်းကျင်က
+ နေ့စဉ် ဘုရားတရားတော်မြတ်များကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လေ့ရှိသောသူများ နေသောအိမ်
+ တရား အဆုံးအမ စကားများကို ပြောကြားတတ်သော ဘိုးဘွား မိဘများ နေသော အိမ်
+ ကုိုယ်တိုင်လည်း တရားတော်များကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်၊ လေ့လာခွင့်ရှိစေတဲ့ အိမ်
+ စာပေရသ စာအုပ်များသာမက တရားအဆုံးအမစာအုပ်များနဲ့ ပြည့်နေသော အိမ်
+ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခွင့် ရှိသော အိမ်
+ မင်္ဂလာ တရား၊ မေတ္တာတရားတော်ကို အလေးထားသော အိမ်
+ လွတ်လပ်စွာ ဆော့ကစား ပျော်ပါးလို့ရတဲ့ အရပ်
+ မိတ်ဆွေကောင်းများနဲ့ တွေ့ကြုံစေသော အရပ်
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက နေထိုင်လာတဲ့ အတွက် မိမိရဲ့  မသိစိတ်မှာ ဘ၀နေနည်းအချို့ က အမြစ်တွယ်နေခဲ့ပါတယ်။ မိဘဘိုးဘွားများ ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုယ် ဆုံးမနိုင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးလို့ မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး ဟောကြားခဲ့တာကို အိမ်မှာဖတ်ဖူးတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိသူ ဖြစ်လာအောင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတာက မိဘဘိုးဘွား ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေများပါပဲ။ ကိုယ့်ဘ၀လမ်းကို လျောက်ရာမှ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အဓိကဆိုပေမယ့်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေက အဲ့ဒီလမ်းကို အထောက်အကူပေးတယ်။
ဖေဖေရဲ့  မသိစိတ်ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းကျောင်းနိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ၃ မျိုးကို ပြောပါဆိုရင်..
၁၊ မင်္ဂလာ့သုတ် တရားတော်
၂၊ မေတ္တာသုတ် တရားတော်
၃။ အာနာပါန (၀င်လေထွက်လေရှုမှတ်ခြင်း)
လူ့ လောကကြီးထဲမှာ ကျင်လည်နေရင်း ဘ၀အမောတွေ အများကြီး တွေ့ကြုံရမယ် သမီးလေးရေ…ဖေဖေလည်း အဲ့ဒီလို အချိန်မျိုးတွေကို အများကြီး ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာ မင်္ဂလာ့သုတ်၊ မေတ္တာသုတ် တွေရဲ့  အနက်အဓိပ္ဗါယ်ကို လေ့လာမှတ်သားဖူးပြီး ၀င်လေထွက်လေ ရှုမှတ်မှု ရဲ့  ကောင်းကျိုးကို သိထားလို့ပါပဲ။
အခက်အခဲတွေ အများကြီးကို ကျော်ဖြတ်နိုင်လာလေ ဒီ ၃မျိုးရဲ့  ကောင်းကျိုးကျေးဇူးကို သိလာလေပဲ သမီး။ ဒီ ၃မျိုးက ဖေဖေ့ရဲ့  မသိစိတ်မှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွမ်းဝင်နေစေခဲ့တာကလည်း ကံကောင်းခြင်း တခုပဲပါပဲ။
သမီးလေးကိုလည်း မင်္ဂလာ့သုတ်၊ မေတ္တာသုတ်တော်အကြောင်းတွေ မိမိကိုယ်တိုင် သိရှိစေနိုင်ဖို့ နဲ့ ၀င်လေထွက်လေ ရှုမှတ် သိရှိခြင်းကို ငယ်စဉ်ကတည်းက သိနိုင်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် ဆုံးမနိုင်သူ စွမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်အောင် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေ တည်ဆောက်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်။
2018 Oct, 1 (Monday)
Leaveacomment	| posted in ချစ်သမီးသို့ ပေးစာ
ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်လုပ် စိတ်ပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။
ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်လုပ် စိတ်ပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ လူတွေက အလုပ်ပြီးမြောက်မှု တခုတိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားကြရတယ်။ သမီးလည်း ကစားနည်း တခုခု လုပ်နိုင်လို့ ပျော်ရွှင်ရင် လက်ခုပ်တီးသလိုပဲပေါ့။ အားပေးမှုက ပျော်ရွှင်မှုကို ဖြစ်စေတယ်။ သမီးဆိုရင် မိမိအလုပ်ပြီးမြောက်မှုအတွက် မိမိကိုယ်ကိုယ် အားပေးတဲ့ အနေနဲ့ လက်ခုပ်တီးတတ်တယ်လေ။
အချိန်နဲ့ အလုပ် ဆိုတာကို စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့ အထဲက အခြေခံကြတာလေး တခု သမီးကို ပြောပြမယ်။ အလုပ်တွေ ပြီးမြောက်ဖို့က ကိုယ်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိပြီး၊ ဦးစားပေး အဆင့်တွေကို သက်မှတ် တတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ပြီးတော့ မိမိ အလုပ်ပြီးမြောက်မှု အတွက် ၊ ပျော်ရွှင်မှု အတွက် ဦးစားပေး အဆင့် သက်မှတ်တတ်ဖို့လည်း လိုတယ်။ အရေးကြီးတာကို အရင်ဆုံး ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် အောက်ပါ အချက် ၂ ချက်ကို အခြေခံပြီး လုပ်ရင် ပျော်ရွှင်တဲ့ အလုပ် ဖြစ်လာမယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းစေမယ်။
(၁) လွယ်မြန်တဲ့ အလုပ်ကို အရင်လုပ်
လွယ်လွယ် မြန်မြန်နဲ့ ခဏလေး လုပ်တာနဲ့ ပြီးမယ့် အလုပ်ကို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အလုပ်ပြီးမြောက်မှု ပျော်ရွှင်မှု ရလဒ်ကို ခံစားရပြီး နောက်လုပ်မယ့် အလုပ်တွေ အတွက် စိတ်ခွန်အားကို ရစေတယ်။ များသောအားဖြင့် အလုပ်ရှုပ်ပြီး စိတ်ရှုပ်နေသူတွေရဲ့ တူညီတဲ့ အချက်က လွယ်ကူ မြန်စွာ ပြီးမယ့် အလုပ်တွေကို လျစ်လျူရှုထားတတ်ကြတယ်။ လွယ်လွယ် ခဏ ပြီးမယ့် အလုပ်ကို မြန်မြန် ချက်ချင်း လုပ်လိုက်ရင် အလုပ်ပြီးမြောက်မှု တခု ရရှိပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုကို ဖြစ်စေတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း လျော့ပါးစေတာပေါ့။
သေးငယ်တဲ့ အလုပ်ကို ၁၀၀% ပြီးမြောက်အောင် မလုပ်နိုင်သူက ကြီးမားတဲ့ အလုပ်ကိုလည်း လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့။
(၂) အခြားသူအတွက် အရင်လုပ်
ပြီးတော့ ကိုယ့် အလုပ်ရလဒ်ကို ရမှ အလုပ်လုပ်နိုင်မယ့် စောင့်နေတဲ့သူရှိတဲ့ အလုပ်ကို ပိုပြီး ဦးစားပေး သက်မှတ်သင့်တယ်။ ကိုယ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ အလုပ်ကြောင့် စောင့်နေသူ အလုပ်လုပ်နိုင်သွားတဲ့ အတွက် ၊ အသိအမှတ် ပြုခံရတဲ့အတွက် မိမိ စိတ်မှာ ကျေနပ်မှု စိတ်ပျော်မှု ဖြစ်စေပြီး အခြား အလုပ်တွေမှာ စိတ်ခွန်အား တိုးစေတယ်။ မိမိ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကိုလည်း စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ ပေါ့ပါး လွတ်လပ်စွာ လုပ်နိုင်တယ်။
ဒီနှစ်ချက်ကို အခြေခံထားပြီး အလုပ်တွေကို ဦးစားပေး အဆင့် သက်မှတ် ရင် မိမိရဲ့ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် အလုပ်လုပ်ရတာ ပျော်ရွှင်လာမယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းစေတဲ့ အလုပ်လုပ်နည်းတွေ အများကြီးထဲက တခုလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒါက အချိန် စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတွေထဲက နည်းလမ်း တခုပေါ့။ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းဆိုတာ တခုတည်း ရှိတာ မဟုတ်လို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံကို လေ့လာပြီး သင့်တော်သလို အသုံးချနိုင်ပါစေဗျာ။
ခေတ္တ ဖိလစ်ပိုင် စဲဘု
16th Oct, 2018.
သမီးရေ…. မကောင်းမှုဆိုတာ ဆိတ်ကွယ်ရာ မရှိဘူးတဲ့
မကောင်းမှုဆိုတာ ဆိတ်ကွယ်ရာ မရှိဘူးတဲ့
ဘယ်တုန်းကတည်းက ကြားဖူးခဲ့တဲ့ စကားလဲ မမှတ်မိတော့ပေမယ့် ဒီစကားရဲ့  အဓိပ္ဗါယ်က အတော်လေးကို လေးနက်ပါတယ်။ လောကကြီးထဲမှာ နေထိုင်လာတာ နှစ်ပေါင်း ၃၅ နှစ်ကျော်လာတော့ လောကကြီး အကြောင်းတွေလည်း အနည်းနဲ့ အများ အတွေ့ အကြုံတွေရ သိလာတာနဲ့ အမျှဒီစကားရဲ့  မှန်ကန်မှုကို ပိုသိလာတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်တဲ့ ဂျပန်လုပ်ငန်း အိုင်တီ အလုပ်မှာ ၀င်လျောက်တော့ ဂျပန်လူမျိုး ခေါင်းဆောင်က အလုပ်ဝင်သူတွေကို ပြောတဲ့ စကားတွေကို အမြဲ စိတ်ထဲထားပြီး အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီထဲက စကားတစ်မျိုးက (မြန်မာလို သင့်တော်သလို ဘာသာပြန်ထားတာပါ)
**ဘယ်တော့ မှ တယောက်တည်း ကျိတ်မှိတ် မကြေကွဲပါနဲ့ **
(၁) မိမိက အမှားလုပ်မိရင် ဘယ်တော့ မှဖုံးကွယ် ထိမ်ချန်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့၊
(၂) ချက်ခြင်း မိမိ အထက်လူကြီးကို ပြောပြပါ။ အကြောင်းကြားပါ။
(၃) တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။
(၄) အတူတကွ ဖြေရှင်းပါ။
(၅) လိုအပ်တဲ့ အကူအညီကို ယူပါ။
(၆) ပြန်လည် သုံးသပ်ပါ။
မိမိလုပ်မိတဲ့ အမှားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပြီး၊ ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရမှာက မိမိတဦးတည်း လုပ်ရမှာ မဟုတ်ပဲ၊ လိုအပ်သလို စီမံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်။ အမှားလုပ်မိပြီး ဖုံးကွယ် ထိမ်ချန်ထားပေမယ့် တချိန်ချိန်မှာ အဲ့ဒီ အမှားအကြောင်းက ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး၊ ဖုံးကွယ် ထိမ်ချန်ထားတဲ့ အကျိုးဆက်က ပိုဆိုးစေတတ်ပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် လူသားတွေရဲ့  စိတ်အခြေခံ သဘောတရား အရ မိမိက အမှားလုပ်မိရင် တတ်နိုင်သလောက် ဖုံးဖိ ထိမ်ချန်ဖို့ ကြိုးစား တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အမှားကို ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ ပြဿနာပို မကြီးထွားလာအောင် ကာကွယ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်တွေ နှောက်နှေးပြီး ဆိုးဝါးတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ တင်မဟုတ်ပါဘူး။ လောကကြီးထဲမှ နေထိုင်ရှင်သန်နေတဲ့ တလျောက်မှာ အမှားတွေ လုပ်မိတတ်ကြမှာပါပဲ။ လုပ်မိတဲ့ အမှားတွေကို ဘယ်သူမှ မသိတောင် အနည်းဆုံး မိမိကုိုယ်တိုင်သိတယ်။ မကောင်းမှု လုပ်ရင်လည်း ဘယ်သူမှ မသိလည်း အနည်းဆုံး မိမိကိုယ်တုိုင် သိတယ်။ စိတ်ကွယ်ရာ မရှိဘူးပေါ့ သမီးရယ်။
ကိုယ်က အမှား လုပ်မိရင် ဖွင့်ဟ ၀န်ခံတောင်းပန် တတ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ တောင်းပန်တာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ ဒီ အမှားကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ၊ ဘယ်လိုလူက ကိုယ့်ကို အကူအညီပေးနိုင်မလဲ၊ ဆိုတာကို စဉ်းစားပြီး တိုင်ပင် ဆွေးနွေး၊ ဖြေရှင်းရမယ်၊ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီကို ယူရမယ်၊ မိမိကုိုယ်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရမယ်။
သာမန် လူသားတစ်ဦးဖြစ်လို့ မကောင်းမှုကို လုပ်မိတာတွေလည်း ရှိနိုင်မယ်။ မကောင်းမှုလုပ်မိတာလည်း အမှား လုပ်မိတာ ဖြစ်တယ်။ မကောင်းမှုတွေ အမှားတွေ လုပ်မိရင် မိမိစိတ်မှာ အမြဲရှိနေတော့မှာ အတိတ် အရိပ်ဆိုတာ အမြဲလွှမ်းမိုးပြီး စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်အလုပ်ပဲ လုပ်လုပ် မိမိ လုပ်တဲ့ ပြုမူတဲ့ အလုပ်က ကိုယ်တုိုင် လိပ်ပြာလုံတဲ့ အလုပ် ပြုမူမှု ဖြစ်ရဲ့ လားဆိုတာကို အမြဲ သတိကပ် လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားတာ အကောင်းဆုံးပေါ့ သမီးရေ။
သမီးအတွက် ဖေဖေ နဲ့ မေမေက အမြဲ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ လူသား နှစ်ဦးအဖြစ် အသက်ရှိနေသလောက် ရပ်တည်ပေးပါမယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တုိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။ ဘယ်လို ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ် အတူတူ ဖြေရှင်းကြမယ်။ အခြား လုိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေလည်း ရယူကြမယ်။ ပြီးတော့ အတူတူ ပြန်လည် သုံးသပ်ကြမယ်။
ဘယ်လို အမှားမျိုးကိုပဲ လုပ်မိခဲ့ လုပ်မိခဲ့ ဘယ်တော့မှ တစ်ယောက်တည်း မဖြေရှင်းပါနဲ့ သမီးရေ..သမီး ဖေဖေ နဲ့ မေမေက သမီး အတွက် တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက်အဖြစ် ရှိနေပေးပါမယ်။
ချစ်တဲ့ ဖေဖေ ( your life partner)
Kaung Myat Tun
Nov 7, 2018 @ Cebu
သမီးလေးကိုပြောဖြစ်တဲ့ PREP အကြောင်း
သမီးလေးလည်း တချိန်မှာ လူတွေနဲ့ စကားတွေ ပြောရမယ်။ စကားတွေ နားထောင်ရမယ့် အရွယ်ကို ရောက်လာမယ်။ အဲ့ဒီ အခါကြရင် အသုံးဝင်နိုင်ဖို့ ဖေ့ဖေ့အတွေ့အကြံလေးတွေ ပြောပြမယ်။
ဖေဖေက အခုဆိုရင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Cebuမြို့ မှာ အလုပ်လုပ်နေရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လပိုင်းအထိ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေရာကနေ သမီးလေးတို့နဲ့ ခွဲပြီး ဒီမှာ အလုပ်လာလုပ်နေရတယ်။
သမီးရေ ဖေဖေက ဒီကျွန်းမြို့ လေးမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ တွေးမိတာလေးတွေ ပြောပြမယ်။ ဖေဖေ့အလုပ်က စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုတော့ စကားတွေ အများကြီး နားထောင်ရတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေ ပြောတဲ့ စကား၊ လုပ်ငန်းအပ်ထားတဲ့ဂျပန်တွေ ပြောတဲ့စကား အားလုံးက ပြောပြတာတွေကို နားထောင်ပေးရတဲ့ အလုပ်က ဖေဖေ့ရဲ့ အလုပ်တခုပါ။
၀န်ထမ်းတွေရဲ့ စကားတွေကို နားထောင်တဲ့အခါမှာ များသောအားဖြင့် အစီအစဉ်မကြပဲ ဟိုဟာကြောင့် ဟိုဒင်းကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ပြီး မရတာ ရတာ စသဖြင့် ပြောကြတယ်။ များသော အားဖြင့် လူတွေက မိမိသိထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို အကြောင်းပြချက်တွေက စပြောပြီး ကောက်ချက် (Conclusion) ကို နောက်ဆုံးမှ ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒီနေရာမှာ တဖက်လူရဲ့  ပြောစကားကို မှန်မှန်ကန်ကန် သိရှိနားလည်ဖို့က အရေးကြီးတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားကို တဖက်လူက မှန်မှန်ကန်ကန် သိရှိနားလည်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။
ပြောဆို ဆက်ဆံ Communication လုပ်ကြတဲ့ အခါမှာ အရေးကြီးဆုံး အချက်က ကောက်ချက် Conclusion ပါ။ အကြောင်းပြချက်တွေက အရေးအကြီးဆုံး မဟုတ်ပဲ ကောက်ချက် Conclusion ကို အရင်ဆုံး ပြောတာက နားလည်လွယ်တဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှု Communication တခုဖြစ်စေတယ်။ ဒီလို စကားပြောဖို့ ဘယ်လို ပြောကြမလဲဆိုရင် PREP ဆိုတဲ့ နည်းစနစ်တခုရှိတယ်။ P ဆိုတာ Point ကောက်ချက် Conclusion ကိုပြောမယ်, R ဆိုတာ Reason အကြောင်းပြချက်တွေကို ပြောမယ်, EဆိုတာExample ဥပမာအနည်းဆုံး တခုပေးမယ် , PဆိုတာPoint ကောက်ချက် Conslusionကိုသေချာအောင် ထပ်ပြောမယ်.. ဖြစ်ပြီး အတိုချုပ်အနေနဲ့ PREP Methodology လို့ခေါ်တယ်။
Point : ဂျပန်နိုင်ငံကို သွားပြီး ဂျပန်အိုင်တီလုပ်ငန်းမှာ အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။
Reason : ခေတ်မှီ တိုးတက်နေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက လုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် မိမိနိုင်ငံမှာ မရနိုင်တဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေရပြီး၊ မိမိအတွက် တိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေတယ် ငွေကြေး ၀င်ငွေများစေတယ် ဂျပန်စာတတ် အင်ဂျင်နီယာဆိုအလုပ်ရလွယ်တယ်။
Example : မိမိပတ်ဝန်းကျင်က အသိမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ၊ မိမိထက်ကြီးသူတွေ ဂျပန်နိုင်ငံကို သွားပြီး ဂျပန်လုပ်ငန်းတွေမှာ အိုင်တီ အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ပြီး အတွေ့ အကြုံကောင်းတွေရ အောင်မြင်တိုးတက်နေတာ တွေ့ရတယ်။
Point : ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ ဂျပန်နိုင်ငံကို သွားပြီး ဂျပန်အိုင်တီလုပ်ငန်းမှာ အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။
ပုံမှန် စကားပြောတဲ့ အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားတဲ့ အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ PREP နည်းစနစ်ကို စိတ်ထဲစွဲပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံ Communicate လုပ်မယ်ဆိုရင် မိမိပြောဆိုလိုတာကို တဖက်လူက နားလည်လွယ်ပါလိမ့်မယ်။ အလားတူပဲ မိမိက နားထောင်ပေးရတဲ့ အခါမှာလည်း တဖက်လူကို PREP နည်းစနစ်နဲ့ ပြောဆိုနိုင်အောင် လမ်းကြောင်းပေးတတ်ရမယ်။ ဒါမှ တဖက်လူ ပြောဆိုချင်တာကို ပြည့်ပြည့်၀၀ နားလည်ပေးနိုင်မှာပါ။ လူတွေနဲ့ Communication လုပ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းလာမယ်။
သမီးရေ..သမီးက စကားပြောဖို့စပြီး အားယူနေပြီဆိုတော့ မေးခွန်းတွေ မေးတတ်လာတော့မယ်။ အဲ့ဒီအခါကြရင် ဖေဖေ မေမေတို့က PREP နည်းစနစ်ကိုသုံးပြီး သမီးလေး ပြည့်ပြည့်၀၀ နားလည်အောင် ဖြေပေးမယ်။ ဒါဆိုရင် သမီးလေးလည်း PREP နည်းစနစ် ကို အလိုလို သုံးတတ်သွားမယ်။ လူတွေနဲ့ Communication လုပ်ရတာ ပျော်လာမယ်။
Kaung Myat Tun @ Cebu
Cebu Note (Sun Apr 15, 2018)
About GIC Philippines Inc.
GIC Japan ရဲ့  Global Strategy Division မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က စတင် ကြည့်ရှုပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Division က ဂျပန်နိုင်ငံက လုပ်ငန်းများ နိုင်ငံရပ်ခြားကို သွားရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ တဲ့ အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ Consulting လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ GIC Group Company တွေက Myanmar, Philippines နဲ့ USA တို့မှာ ရှိတာဖြစ်တော့ အဓိကအားဖြင့် ၄င်းနိုင်ငံများကို သွားရောက် ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ကြမယ့် ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်များကို အကူအညီ Consulting Services ပေးရပါတယ်။ Consulting Services ဆိုရာမှာ Oversea expansion consulting, Local Market Research, Local Company establishment, Local Company Accounting Outsourcing (BPO) after establishment, Post-expansion consulting, Lawyer Support, and etc. စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ GIC Japan ဘက်ခြမ်းအနေနဲ့က နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ရှိနေတဲ့ GIC Myanmar, GIC Philippines, GIC USA စတဲ့ GIC Group Companies တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးပါတယ်။ Japan ဘက်အနေနဲ့ကတော့ Marketing & Sales ကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံဘက်အခြမ်းမှာ Global Strategy Divisionကို ၃နှစ်လောက် ကြည့်ပေးခဲ့ပြီးတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၄လပိုင်းကစပြီး GIC Philippines Inc (GICP) ကို ကြည့်ပေးဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ GIC Philippines Inc က Cebu Business Park က Keppel Tower 10F မှာ ရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း ၁၃ ယောက် ရှိပါတယ်။ အဓိက လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းက ဂျပန် ကုမ္ပဏီတွေ ဖိလစ်ပိုင်ကို လာရောက် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်တာကို အတိုင်ပင်ခံ အကူအညီပေးတဲ့ Consulting လုပ်ငန်းကို လုပ်ပါတယ်။ Accounting လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ပြီး CPAရ ဝန်ထမ်းများလည်း ရှိပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင် အခြေစိုက် ဂျပန်လုပ်ငန်းတွေအတွက် Accounting Services ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိူး ဝန်ထမ်း ၂ ဦး၊ ဖိလစ်ပိုင်ဝန်ထမ်း ၁၀ ဦးရှိပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင် ရှေ့ နေရုံးတခုနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထားပြီး ရှေ့ နေ ၆ ဦးက တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။
GICPရဲ့  clients တွေက ဂျပန်ကုမ္ဗဏီများသာဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများက အိုင်တီလုပ်ငန်းများ၊ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်းများ၊ BPO Call Center လုပ်ငန်းများ၊ Diving Shopsလုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ Spa လုပ်ငန်း၊ Services လုပ်ငန်းများ စတဲ့ လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ လုပ်ကြပါတယ်။ ထုိုလုပ်ငန်းများ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို စတင်ဝင်ရောက်ဖို့ လုပ်ကိုင်စဉ်ကတည်းက အတိုင်ပင်ခံ အကူအညီပေးပြီး၊ ယခု လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့အခါမှာလည်း လိုအပ်တဲ့ Back Office Support (Accounting) ကိုဆက်လက် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ အခုကနေစပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းများကိုလည်း Research, Company တည်ထောင်မှု ၀န်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ GICP ဖြစ်ပါတယ်။
Sun Apr 15, 2018 @ Cebu
နှစ်သစ်ကူးလို့ လန်းစမ်းသော ရွက်သစ်တွေ
နှစ်ကူးနဲ့အတူ ရောက်ရှိလာတဲ့ မွေးနေ့မင်္ဂလာ
တူညီတဲ့ နှစ်တွေ အလီလီပြောင်းခဲ့ပေမယ့်
ကျွန်တော့်၏ မေမေနှင့် ဖေဖေ။
မှန်ကန်သော အသိ မှန်ကန်သော အမြင်
လောက သမုဒ္ဒရာ ရွက်လွှင့်သွားနိုင်ဖို့
ကျွန်တော်၏ မေမေနှင့် ဖေဖေ။
အစားထိုးရန် မဖြစ်သော ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့်
မိဘ မေတ္တာဆိုတာကို အပြည့်အ၀
ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်း တရားများနဲ့ အတူ
ခန္ဓာကိုယ်၏ နုနယ်ပျိုမြစ်ခြင်းတွေ ကုန်လွန်လို့
လူ့ဘ၀ရဲ့ အိုမင်းခြင်း လမ်းစကို လျောက်လှမ်းရန်
ဟန်ပြင်နေပါသော်လည်း စိတ်အစဉ် နုနယ်ပျိုမြစ်မြဲ
စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မိသားစုဘ၀ကို
အတူတကွ ရယ်မောခဲ့သော အချိန်များရှိခဲ့သလို
အတူတကွ ငိုကြွေးခဲ့သော အချိန်များလည်း ရှိခဲ့ပါသော
ယခုလတွင် ကြရောက်ပါသော မွေးနေ့ မင်္ဂလာမှသည်
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အထိ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေ့ရက်များ
ချစ်လှစွာသော မေမေနှင့် ဖေဖေ၏ သားမှသည်
နှစ်သစ် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းဆုခြွေရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါသည်။
၂၀၁၄ ဧပြီ ၁၉
入国管理局(BI : Bureau of Immigration)に特別就労許可(SWP : Special Work Permit)を申請して取得します。SWPの有効期間は6ヶ月間です。SWPの更新は出来ません。
労働局(DOLE : Department of Labour and Employment) に外国人就労許可(AEP : Alien Employment Permit)を申請して取得します。AEPの申請は1~2週間ほどかかります。AEPの有効期間は1年です。AEPの更新は出来ます。
AEP取得後に入国管理局(BI : Bureau of Immigration)に就労ビザ(9(G) visa : Pre-arranged Employment Visa)を申請します。就労ビザ申請中の人は暫定労働許可(PWP : Provisionary Work Permit)を申請して取得します。PWPの有効期間は6ヶ月間ですので、この期間中に就労ビザを申請して取得しましょう。就労ビザの期間は1年・2年・3年と労働契約期間によって許可されます。就労ビザは更新出来ますので、有効期間過ぎる前に更新しましょう。
Kaung Myat Tun (カゥンミャットトゥン)
CEO of Global Innovation Consulting Philippines.
Working in Philippines
Foreign nationals can come to Philippines without visa. However they have to apply appropriate working permit and visa if they want to work in Philippines.
1. Working up to six months
Foreign nationals who want to work in Philippines foraperiod not exceeding six months have to apply SWP(Special Work Permit).
In the case of short term work contracts that are of six months or less, expatriates are only required to apply foraSpecial Work Permit (SWP) with the BI (Bureau of Immigration) . Applicants may include musical artists, performers, professional athletes, or other non-citizens provide temporary services in the country. The SWP shall be non-extendible, thus, if there is extension of employment, the foreign national shall apply for an AEP with DOLE not later than 21 working days before expiration of SWP.
Tourist Visa (9A)
2. Working more than six months
Foreign nationals planning to work in the Philippines more than six months are required to secure an Alien Employment Permit (AEP) issued by the Department of Labor and Employment (DOLE), as well asawork visa, which can be obtained from the Philippines’ Bureau of Immigration (BI).
AEP is required to applyawork visa. You have to apply it in DOLE first before applyingawork visa in BI. It takes 1 or2weeks to get AEP.
The Philippines offers expatriates an option to work in the country even if their work visa (9G) has not yet been issued throughaProvisionary Work Permit (PWP). A PWP is issued to foreigners who already have their Alien Employment Permit (AEP) and whose work visa application is pending approval.
One usually gives you something everyday.
If you don’t take what one gives,
But you will get, if you take it.
Don’t take what you don’t want.
If you take what you don’t want,
you will get what you don’t want.
Then your mind will be un peaceful and feel bad.
When one gives you what you don’t want,
try to realize why one is giving it and understand it.
Then your mind will be peaceful and feel relief.
Don’t give what one doesn’t want, too.
YBS ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနှင့် JICA Transport Master Plan
အခု လူပြောများနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့  ဘတ်စ်ကား စနစ် #YBS Yangon Bus Service နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်၊ ရှေ့ ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်မယ့် အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချင်သောသူများ လေ့လာနိုင်ရန် သိရှိထားသည်များကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ အဖွဲ့့အစည်း JICA မှ မြန်မာနိုင်ငံ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများအကူအညီဖြင့် လေ့လာတွေ့ ရှိ သုံးသပ်ချက်များကို စုစည်းကာ မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးအတွက် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ပင်မ စီမံကိန်းကို ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၂ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး ၂နှစ်တာ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောင် ၁၀ နှစ် ၂၀ နှစ် စတဲ့ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ ချမှတ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပင်မစီမံကိန်းက ၂၀၃၅ ခုနှစ်အထိရည်ရွယ်ချက်ထားကာ ရေးဆွဲ ထားပါတယ်။ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ၇.၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကာ နောင် ၂၀၃၅ ခုနှစ်တွင် လက်ရှိ စီးပွားရေးထက် ၅.၄ စ တိုးတက်လာမယ်လို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။ ဒီရည်မှန်းချက် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ အတွက် ၂၀၃၀ အထိ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အခြေခံအဆေက်အဦးများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဒေါ်လာဖြင့် ၁၃ ဘီလီယံခန့် လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်အတွက် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်းကတော့ ဒီတပတ် စတင်အကောင်အထည်ဖော်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ပေါ်နေ လူဦးရေ က ၂၀၁၄ လက်ရှိ အခြေအနေတွင် ၅၇ သန်းရှိပြီး ၂၀၃၅ခုနှစ်မှာ ၉ ၇သန်းရှိလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ လူစီး မော်တော်ကား ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်း ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပြီး လက်ရှိ ကားလမ်းပိတ်ခြင်းက ယခုထက် ၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့  ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်းကို အပိုင်း ၃ ပိုင်းနဲ့ ရေးဆွဲ ထားပါတယ်။
(၁) ရေတိုစီမံကိန်းအနေနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိ ဘတ်စ်ကား ကွန်ယက် ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ မော်တော်ကား ရပ်နားရန်နေရာများ တည်ဆောက်ရန်၊ လက်ရှိ မြို့ ပတ်ရထားလမ်းကို ပြုပြင်ရန်
(၂) ၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ် အတွင်း မြို့ တွင်း မြို့ ပြင် ဆက်စပ် အမြန်ရထားနှင့် မြို့ ပတ်အမြန်ကားလမ်း၊ မြို့ သစ်ဆက်သွယ် ရထားလမ်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန်
(၃) ၂၀၂၅ မှ ၂၀၃၅ ခုနှစ် အတွင်း မြို့ တွင်း၊ မြို့ ပြင် ရထားလမ်းများ ကို တိုးချဲ့ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရထားသို့ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရထားလမ်း အသစ်များ ဖောက်လုပ်ခြင်း များ အကောင်အထည်ဖော်ရန်
JICAအနေနဲ့ အထက်ပါ စီမံကိန်းများ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အသေးစိတ် ဖတ်ရှု လေ့လာချင်သူများ လေ့လာနိုင်ရန် JICA မှ URL များကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ ထုတ်ပြန်ထားတာက report ပုံစံအချက်အလက်အချို့ သာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ် ဒေတာ အချက်အလက်များက သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများမှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ JICA Report များကဂျပန်လို ရေးထားတာဖြစ်လို့ ဂျပန်စာ နားလည်သူတွေပဲ သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းကတော့ အင်္ဂလိပ်လို ရှိပါတယ်။ အချိန်ရရင်တော့ မြန်မာလို့ အနှစ်ချုပ် ဘာသာပြန်ပြီး ပြောပြ မျှဝေချင်ပါတယ်။
■Myanmar’s National Transport Master Plan in English
■Yangon City Transport Master Plan (in Japanese)
၂၀၁၇ ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ ရက်
JICA ODA အကြောင်း(၁)
ဒီနေ့ကတော့ တိုကျို ရှင်းဘရှိ မှာရှိတဲ့ လုပ်ငန်း တခုကို သွားတွေ့ဖို့ရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရ ပေါ်လစီ အရ ဂျပန် လုပ်ငန်းတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ထွက် ပြီး လုပ်ငန်းတိုးချဲ့နိုင်ဖို့ များစွာ အကူအညီပေးပါတယ်။ JICA မှ ထောက်ပံ့မှုများကတော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ထူးခြားမှုရှိပြီး ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူးရှိမယ့် လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်လျင် ODA ပုံစံ နိုင်ငံရပ်ခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ငွေကြေးအကူ အညီလျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
JICA မှ ထောက်ပံ့ပုံစံက JETRO နှင့် မတူညီပေ။ အခြေခံအားဖြင့် သွားရောက်မည့် နိုင်ငံ (သို့) လုပ်ငန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်တဲ့ ပြင်ပ ပညာရှင် အတိုင်ပင်ခံ ကို ငှားရမ်းခအတွက် ကုန်ကျငွေကို ထောက်ပံ့လေ့ရှိပါတယ်။
အလယ်အလတ် လုပ်ငန်းများအတွက် JICA ODA ပုံစံက ၃ မျိုး ၃ ဆင့် ရှိပါတယ်။
၁) လုပ်ငန်းမတိုင်မှီ အခြေခံ အချက်များစုံစမ်းရှာဖွေလေ့လာခြင်း
၂) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အသေးစိတ် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၃) လက်တွေ့ လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင် အကောင် အထည်ဖော်ခြင်း
အဆင့်တိုင်းအတွက် ရရှိမယ့် ထောက်ပံ့ငွေ မတူညီပါ။
၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ ၁၂
မြန်မာ IT ပညာရှင်လူငယ်များကို စောင့်မျှော်နေသော ဂျပန်
မြန်မာ IT ပညာရှင်လူငယ်များကို စောင့်မျှော်နေသော ဂျပန်▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် ဂျပန်သို့လာပြီး အလုပ်လုပ်ရန် အလွန်ကိုလွယ်ကူနေပါပြီ။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် နည်းပါးလာသည့် လူဦးရေနှင့် အတူ လုပ်သားလိုအပ်ချက်အတွက် ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မှုဟာလည်း ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်များ နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေဖြင့် လိုအပ်နေသော လုပ်သားလိုအပ်ချက်များအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ မိမိတို့နိုင်ငံကို လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင် ပေးမည့်သူများကို မျှော်လင့်နေရသော အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။ လုပ်သားလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရာမှာ အခြေခံအလုပ်သမားများမှသည် အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များအထိ အလွှာအသီးသီးတွင် လိုအပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့်လည်း လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ရန်အတွက်၊ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လာရောက်နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ဖြည့်တင်းမှုများ ပြုလုပ်နေပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသား လူဦးရေနည်းပါးလာမှုနှင့်အတူ နိုင်ငံစီးပွားရေး ကျဆင်းလာမှုကို ပြန်လည်မြှင့်တင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ၏ အင်အားကိုရယူပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဂျပန် အစိုးရပိုင်းအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်နေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံမှမဆို တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ရရှိထားသူသည် ထိုပညာရပ်ဖြင့် သက်ဆိုင်သော ဂျပန်လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင် ခွင့်ရှိပါသည်။ ထိုအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် အလုပ်ခန့်ထားပေးသော ၎င်းဂျပန်လုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသို့ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်နေထိုင်ခွင့်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ လျှောက်ထားရယူနိုင်ပါသည်။ နေထိုင်ခွင့်အနေဖြင့် ဦးစွာပထမ တစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်၊ ငါးနှစ် စသည်ဖြင့် ပေးအပ်လေ့ရှိပြီး သက်တမ်းကုန်ပါက သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းကိုလည်း လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ယခုနှစ်များတွင် IT အတတ်ပညာရှင်များအဖြစ် လာရောက်လုပ်ကိုင်သော နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ပထမဦးဆုံးနေထိုင်ခွင့်ကို ငါးနှစ်အထိ သတ်မှတ်ပေးအပ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ IT ပညာရှင်အနေဖြင့် ရရှိမည့် VISA Type သည် [Engineer/ Specialist in Humanities/ Int’l Services] ဖြစ်ပြီး နည်းပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မည်သည့် လုပ်ငန်းတွင်မဆို အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထူးချွန်သော အလုပ်လျှောက်သူ နည်းပါးလာသော ဂျပန်ITလုပ်ငန်းများ
ဂျပန် IT လုပ်ငန်းများသည်လည်း နှစ်စဉ် ဝန်ထမ်း သစ်ခေါ်ယူရာတွင် လာရောက်လျှောက်ထားသူ နည်းပါး ခြင်း၊ လျှောက်ထားလာသူများ၏ အရည်အချင်းမပြည့် ဝခြင်း စသည်တို့ကြောင့် လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းအရေ အတွက်ကို ခန့်ထားနိုင်ခြင်းမရှိ ဖြစ်နေကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် အလယ်အလတ်တန်းစား ဂျပန် IT လုပ်ငန်းများ၊ တိုကျိုမဟုတ်သော နယ်ဒေသများတွင် ပင်မလုပ်ငန်းတည်ရှိပြီး တိုကျိုမြို့တွင် လုပ်ငန်းခွဲတည်ထောင်ထားသော IT လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လျှောက်ထားသူ ရှားပါးနေပါသည်။ အလုပ်လျှောက်ထားသူ ဂျပန်လူမျိုး များကလည်း မျှော်မှန်းထားသလောက် အရည်အသွေး ပြည့်ဝသူများ မဟုတ်ကြဟုသိရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထူးချွန်သောသူများက အလယ်အလတ် လုပ်ငန်းများသို့ အလုပ်မလျှောက်ကြဘဲ လုပ်ငန်းကြီးများ သို့သာ အလုပ်လျှောက်ကာ အလုပ်ဝင်ကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းအလယ်အလတ် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တို့သည် မိမိတို့လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လည်ပတ် နိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံသားမဟုတ်သူ နိုင်ငံခြားသား ထူးချွန် IT ပညာရှင်များကို မိမိတို့လုပ်ငန်းတွင် ဝန်ထမ်းအနေဖြင့် လာရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် ပြင်ဆင်ကြရပါတော့သည်။
ရှေးယခင်က ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာပြီး အလုပ်လုပ်မည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် သိန်း ၅ဝ၊ သိန်း ၁ဝဝ ကုန်ကျခံပြီး လာရောက်လုပ်ကိုင်ရ သည်ဟု ကြားဖူးပါသည်။ ယခုအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား IT ပညာရှင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံကို လာရောက်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် မိမိကိုယ်တိုင်မှ ငွေကြေး စိုက်ထုတ်ရန်မလိုတော့ပါ။ အခြေခံအားဖြင့် မိမိကို အလုပ်ခန့်အပ်ချင်သောလုပ်ငန်းမှ အလုံးစုံတာဝန်ယူပြီး ဂျပန် နိုင်ငံရောက်သည်အထိ ခေါ်ယူကြပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှ IT လုပ်ငန်းရှင်များသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျလာရောက်ပြီး မြန်မာ IT ပညာရှင်လူငယ်များကို တွေ့ဆုံ၍ မိမိတို့လုပ်ငန်းများကို မိတ်ဆက်ကာ လူတွေ့ အင်တာဗျူးပြီး အရည်အသွေး အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော လူငယ်များကို အလုပ်ခန့်အပ်ကြပါသည်။
ယခုနောက်ပိုင်းနှစ်များ (၂ဝ၁၂ ခုနှစ်လောက်မှ စပြီး)တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ IT လုပ်ငန်းများမှ စုပေါင်းပြီး Job & Career Fair များပြုလုပ်ကာ မြန်မာ IT ပညာရှင် လူငယ်များကို လုပ်ငန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ အလုပ်ခေါ်ယူခြင်းများကို နှစ်စဉ် ပြုလုပ်လာကြပါသည်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်လောက်အထိ ရန်ကုန်မြို့ကို အခြေပြုပြီး Job & Career Fair များ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှစကာ မန္တလေးမြို့ တွင်နေထိုင်သော လူငယ်များအတွက်ပါ Job & Career Fair ပြုလုပ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်မည့် မြန်မာ IT ပညာရှင်လူငယ်များကို လာရောက်ရှာဖွေသော ဂျပန် IT လုပ်ငန်းများ များပြားလာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့လျှောက်လည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံမှ IT လုပ်ငန်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး မြန်မာ IT ပညာရှင်လူငယ်များကို အလုပ်ခန့်အပ်နိုင်ရန် လာရောက်ကြဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်ခန့်ထားရာတွင် ဂျပန် IT လုပ်ငန်းများသည် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကို စစ်ဆေးလေ့ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် သင်္ချာဘာသာရပ် ကျွမ်းကျင်မှုရှိ၊ မရှိကို စစ်ဆေးသော IQ စာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုရလေ့ရှိပါသည်။ IT လုပ်ငန်းများသည် စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး အစီအစဉ်ကျကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတွက် IQ စွမ်းရည်သည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အထူးပင် အလေးထားရသောအရာဖြစ်ပါသည်။ IQ စာမေးပွဲတွင် လုပ်ငန်းများမှ သတ်မှတ်ထားသော အောင်မှတ်ရရှိသူများကို လုပ်ငန်းရှင်များက အင်တာဗျူး တွေ့ဆုံကာ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် လူမှုရေး (ပြောဆို ဆက်ဆံနိုင်မှု၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု၊ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက် ရှိမှု စသည့်) စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကြည့်ရှုရွေးချယ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက် ငွေကြေးထက် ပညာသာ အဓိကလိုအပ်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာ၊ ဂျပန်စကား တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်မှုသည်လည်း မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။ အချို့ နိုင်ငံတကာ IT လုပ်ငန်းများက အင်္ဂလိပ်စာကိုသာ အဓိကထားလေ့ရှိသော်လည်း ဂျပန် IT လုပ်ငန်းအများစုကတော့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဂျပန်စာ၊ ဂျပန်စကား အရည်အသွေး ကို အဓိကထားကြည့်တတ်ကြပါသည်။ မြန်မာလူငယ် IT ပညာရှင်များ၊ ဘွဲ့ရကျောင်းသား ကျောင်းသူများအနေဖြင့် အစပထမတွင် ဂျပန်စာ၊ ဂျပန်စကား မပြောတတ်၊ မရေး တတ်၊ မဖတ်တတ်သည်မှာ အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါ။ လူသားအရင်းအမြစ် အရေးပေါ်လိုအပ်နေသော ဂျပန် IT လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ထူးချွန်သော မြန်မာ IT ပညာရှင်လူငယ်များကို ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ကာ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါသည်။ ပထမဦးစွာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်ခန့်ပြီး လစာပေးထားကာ ဂျပန်စာ၊ ဂျပန်စကားနှင့် ၎င်းတို့လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော IT ပညာရပ်များကို အခမဲ့သင်ကြားပေးပါသည်။ တစ်နှစ် (သို့) တစ်နှစ်ခွဲခန့် အချိန်ယူပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ကာ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ၎င်းတို့ လုပ်ငန်းများသို့ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။
မြန်မာလူငယ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ဂျပန်စာ၊ ဂျပန် စကားကို တစ်နှစ်(သို့)တစ်နှစ်ခွဲခန့် အချိန်ယူသင်ယူပါက ဂျပန်စာအရည်အချင်း (JLPT) အဆင့် ၂2(N2)ကို ရရှိ အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းများ တွင် ဂျပန်လူမျိုးများဖြင့် ရင်ပေါင်တန်းပြီး အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်စာ အရည်အချင်း (JLPT) အဆင့် ၂ (N2) အနည်းဆုံး ရှိထားသင့်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက လုပ်ငန်းခွင်တွင် စကားပြောဆိုရာတွင် လည်းကောင်း၊ စာရေးသားဆက်သွယ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ ဖတ်ရှုရာတွင်လည်းကောင်း အခက် အခဲများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဂျပန် IT လုပ်ငန်း အများအားဖြင့်က ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ၎င်းတို့ လုပ်ငန်းများတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်ရန် သတ်မှတ်ချက်ကို N2 အဆင့် သတ်မှတ်လေ့ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် လုပ်ငန်းအခြေ အနေအပေါ်တွင် မူတည်ပြီး N3 အဆင့်ဖြင့်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်လုပ်ကိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်သော လုပ်ငန်း များလည်းရှိပါသည်။ ထိုသို့သော လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူများအနေဖြင့်လည်း မိမိကိုယ်ပိုင် အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပျော်ရွှင် လွတ်လပ်စွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဂျပန်စာကို စဉ်ဆက် မပြတ် လေ့လာသင်ယူသင့်ပါသည်။
တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အသုံးပြုနေသော ITပညာရပ်များသည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအဆင့်တွင် ရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါများသော Software Development လုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအသုံးပြုသော Programming Language သည် Java programming ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် Software Development လုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ခန့်ထားခံရသူ သည် ဦးစွာပထမ Programmer တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် Java programming ကို သိရှိကျွမ်းကျင်ထားလျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသဘာဝအပေါ်မူတည်ပြီး Java မဟုတ်သော programming language ကို အသုံးပြုရခြင်းများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ Infra ပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်မည့်သူများကလည်း ဂျပန်နိုင်ငံတွင် Data Center အများအပြားရှိပြီး Global အဆင့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါသည်။ Window Server တင်မက Linux Server ပိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုများကိုပါ သိရှိလေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ Network အခြေခံများကိုလည်း သိရှိထားသင့်ပါသည်။ Big Data, Cloud Computing, IoT, Robot စသည့် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော နည်းပညာများကိုလည်း စဉ်ဆက်မပျက်လေ့လာနေရန် လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးစနစ်ဖြင့် ပြုစုပျိုးထောင်မှုဖြင့် ပညာရှင်၊ ပညာတတ်လူငယ်များအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ လုပ်ငန်းရှင်များဘက်မှ ကြည့်ပါက အားနည်းချက် လိုအပ် ချက်များရှိကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် လိုအပ်သည်မှာ လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးနည်းပညာဖြစ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံသားများသည် ရှက်တတ်ခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် တွန့်ဆုတ်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့် လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရာတွင် အားနည်းတတ်ပါသည်။ ဂျပန်လူမျိုးများလည်း အတူတူပင်ဖြစ်ပါသော်လည်း IT လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် IT ပညာရပ်တစ်ခုတည်းသာမက အတူတူ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောသူများဖြင့် လူအချင်းချင်း ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံနိုင်ရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ လိုအပ်သောအချိန်တွင် သတင်း ပို့ခြင်း၊ အကြောင်းကြားခြင်း၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း စသည်တို့သည် အထူးပင် အရေးကြီးလှပါသည်။ မည်သည့်နေရာတွင် တာဝန်ကျသည်ဖြစ်ပါစေ ကျရာနေရာတွင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ဖြင့် လူအချင်းချင်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံပြီး လုပ်ငန်းကိစ္စများကို အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရန် အလွန်ပင်အရေးကြီးပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျ ကျန်ခဲ့သော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများသည် IT နည်းပညာကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးစွဲမှုမရှိသေးပေ။ ထို့အပြင် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံအတွင်းတွင်သာ ရပ်တည်နေပြီး စည်းစနစ် ကျသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်ကို သေသေချာချာ သုံးစွဲနိုင်စွမ်းမရှိသေးပေ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်အတူ လူငယ်များအတွင်းတွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတများ၊ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာများနှင့် ထိတွေ့သိရှိနိုင်မှု အလွန်ပင်နည်းပါးလှပေသည်။ အခြားနိုင်ငံများရှိ လူငယ်များ မည်သူမဆို သိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ယေဘုယျ ဗဟုသုတများကို မြန်မာလူငယ်များသိရှိမှု အလွန်ပင်နည်းပါးလှသေးသည်။ ITလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ အမျိုးမျိုးသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များအတွက် ICT နည်းပညာကို အသုံးပြုကာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အကျိုးပြုရသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နည်း ပညာသာမက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အခြေခံယေဘုယျ ဗဟုသုတများကိုလည်း သိရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ မြန်မာ IT လူငယ်ပညာရှင်များအနေဖြင့် IT လုပ်ငန်းများထဲတွင် ရေရှည်ရပ်တည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခြေခံယေဘုယျ ဗဟုသုတများနှင့် နေ့စဉ် ပြောင်းလဲနေသော နည်းပညာများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူနေရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဂျပန် IT လုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများကို ဂျပန်လူမျိုးများနည်းတူ တူညီသောခံစားခွင့်များနှင့် လုပ်ခလစာများကို ပေးပါသည်။ ဂျပန် IT လုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ထမ်းသစ်အနေဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် လုပ်ခလစာအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်ပြီး ယန်း ၂ သိန်း (မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၂ဝ)ခန့်မှ စတင်ရရှိကြပါသည်။ လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်ပြီး နေထိုင်သောအဆောင်ကို အခမဲ့စီစဉ်ပေးခြင်းများရှိသလို နေထိုင်ရန် အိမ်လခ အတွက် အပိုဆောင်းလစာ(ယန်း၂သောင်းမှ ၅ သောင်း ခန့်အထိ)ပေးသော လုပ်ငန်းများလည်းရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ တစ်နှစ်ကို တစ်ကြိမ်ခွင့်ဖြင့် (၁ဝ ရက်မှ ၁၂ ရက်ခန့်) ပြန်ခွင့်ရှိပြီး လုပ်ငန်းအပေါ် မူတည်ပြီး လေယာဉ်စရိတ် (ယန်း ၈သောင်းခန့်) ကို အပိုဆောင်းလစာအဖြစ် ထုတ်ပေးသော လုပ်ငန်းများ လည်းရှိပါသည်။ လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ငွေအဖြစ် မင်္ဂလာ ဆောင်ထောက်ပံ့ငွေ၊ ကလေးမွေးထောက်ပံ့ငွေ၊ မိဘ ဆွေမျိုးဆုံးပါးမှု ထောက်ပံ့ငွေ အစရှိသော ထောက်ပံ့ငွေများကိုလည်း ပေးအပ်လေ့ရှိပါသည်။ လုပ်ခလစာ၊ အပို ဆောင်းလစာနှင့် ထောက်ပံ့ငွေတို့သည် လုပ်ငန်းအပေါ် မူတည်ပြီး ကွာခြားလေ့ရှိပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်သော နိုင်ငံခြားသား တစ်ဦးသည် ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ အလုပ်သမားအာမခံ အစရှိသော အာမခံများလည်း ဝင်ရောက်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံက သတ်မှတ်ထားသော ဝင်ငွေခွန်၊ နေထိုင်ခွန် အစရှိသော အခွန်အခများကိုလည်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအာမခံများ အခွန်အခများကို လုပ်ငန်းရှင်များမှ ဝန်ထမ်းများကိုယ်စား လုပ်ခလစာမှ ခုနှိမ်ပြီး ပေးဆောင်ပေးလေ့ရှိပါသည်။ အာမခံများ အခွန်အခများကို ဝန်ထမ်းနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များက တစ်ဝက်စီကျခံရလေ့ရှိပါသည်။ ထိုအာမခံများ အခွန်အခများသည် မိမိရရှိသော ဝင်ငွေ အပေါ်တွင်မူတည်ပြီး တွက်ချက်ပေးဆောင်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး တူညီမည်မဟုတ်ပါ။ လစာအပေါ်မူတည်ပြီး တစ်လလျှင် ယန်း သုံးထောင်ခန့်မှ သုံးသောင်းခန့်အထိ ကျသင့်လေ့ရှိပါသည်။ နေထိုင်ရန်အတွက် တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိကာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အိမ်လခသည် တစ်လကို ယန်းသုံးသောင်း ခန့်မှ တစ်သိန်းခန့်အထိ ရှိပါသည်။ မိမိသည် မည်သို့ နေထိုင်လိုသည့်အပေါ်တွင် မူတည်ပြီး အိမ်လခသည်လည်း ကွာခြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေဖိုး၊ မီးဖိုး အစရှိသည့် စားသောက်စရိတ်သည်လည်း အခြေခံအားဖြင့် တစ်လလျှင် ယန်း သုံးသောင်းခန့်မှ ငါးသောင်းခန့်အထိ မိမိ၏စားသောက်မှုပုံစံ
အပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ကုန်ကျနိုင်ပါသည်။ မိမိလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းနှင့် မိမိအသုံးစရိတ်အပေါ်တွင် မူတည်သော်လည်း များသောအားဖြင့် အပိုစုဆောင်းငွေ အဖြစ် ယန်းတစ်သိန်း (မြန်မာငွေ ၁ဝသိန်း) ခန့် စုဆောင်း မိသောသူများပါသည်။ ထိုစုဆောင်းရရှိငွေများကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ကြသူများပြီး ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲခြင်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ မြန်မာ နိုင်ငံတွင်ရှိသော မိဘများကို ငွေကြေးပို့ဆောင်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်း အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
မြန်မာ IT လူငယ်ပညာရှင်များကို စောင့်မျှော်နေသော ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံများကိုရယူကာ နောင်အနာဂတ် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်ကူညီနိုင်သော နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံ ရှိ နည်းပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များဖြစ်နိုင်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်မှာ လူငယ်များကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်အခါသည် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများပြီး ထိုအခွင့်အလမ်းများကို လက်ဝယ်ရယူနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမည်မှာ မိမိကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
(စာရေးသူသည် ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ IT လုပ်ငန်းများ တွင် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှစတင်ကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ IT & Consulting Company လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော Global Innovation Consulting Inc. တွင် General Manager အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ Global Innovation Consulting Inc. လုပ်ငန်းသည် စင်ကာပူ၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဂျပန်တွင် လုပ်ငန်းခွဲများ ရှိပြီး ဝန်ထမ်းဦးရေ ၁၇ဝ ခန့်ရှိပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား IT ပညာရှင် ၈၇ ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား IT ပညာရှင်လူငယ်များကို အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် အများဆုံး အလုပ်ခန့်အပ်ထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူသည် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Offshore Software Development လုပ်ငန်းများကို Programmer အဆင့်မှစတင်ကာ Manager အဆင့် အထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ Offshore လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားITပညာရှင် ဝန်ထမ်းဦးရေ ၂ဝဝ ခန့်ဖြင့် အတူတူ ဂျပန်လူမျိုး IT ပညာရှင်များဖြင့်အတူတူ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်များ၊ အရောင်းအဝယ်စနစ်များ၊ အင်တာ
နက် လူမှုကွန်ရက်စနစ်များ စသည်တို့ကို တည်ဆောက်ပြုပြင်ရာတွင် အဓိက တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် တွင် လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် Business Intelligence စနစ်ကို လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ၃နှစ်ခန့် System Engineer/Manager တစ်ယောက်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်မှစတင်ကာ General Manager တစ်ဦးအဖြစ် Oversea Strategy Division ကို တာဝန်ယူကာ လုပ်ငန်းခွဲများရှိသော မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ တရုတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စသောနိုင်ငံများသို့ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်လိုသော ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်များကို အကူအညီပေးသောအလုပ်ကို တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဂျပန်ITလုပ်ငန်းရှင်များအား မြန်မာ IT လူငယ်ပညာရှင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပိုမိုသွားရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရန်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သော မြန်မာ IT လူငယ် ပညာရှင်များ ပိုမိုများပြားလာစေရန်လည်း လုပ်ဆောင်နေပါသည်။)
နည်းဗျူဟာများ လေ့လာရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ခရီး အကြောင်း
မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့ ကျနော် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းမှ အနာဂတ်နည်းဗျူဟာများ လေ့လာမှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို တညအိပ် နှစ်ရက် ခရီးစဉ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့  နောင်အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းဗျူဟာများကို ချမှတ် နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ် သည် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီး၊ နောင်တွင်လည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၀န်ထမ်းပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးခန့် ရှိပြီး၊ မြန်မာ ၀န်ထမ်း ၈၈ဦးရှိပါတယ်။ မနှစ်က အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် စီမံခန့်ခွဲရေး ၀န်ထမ်းများနှင့် မြန်မာခေါင်းဆောင်ပိုင်းဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း ၃၀ နီးပါးဖြင့်သာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ မြန်မာခေါင်းဆောင်ပိုင်းဝန်ထမ်းများသာမက လုပ်ငန်းခွင်အမျိုးမျိုးမှ ၀န်ထမ်းများ၊ အနာဂတ်တွင် ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိမည့်သူများထဲမှ ၀န်ထမ်းအနည်းငယ်ကို ရွေးချယ် ဖိတ်ကြားကာ စုစုပေါင်း ၅၀ဦးခန့် ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဖိတ်ကြားခံရပေမယ့် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များရှိလို့ မလိုက်ပါနိုင်သူများလည်း ရှိပါတယ်။
အနာဂတ် နည်းဗျုဟာများ ချမှတ်တယ်ဆိုတာ လူတဦးချင်းမှစပြီး နိုင်ငံတနိုင်ငံအထိ အဆင့်ဆင့်တိုင်းတွင် လိုအပ်ပါတယ်။ အနာဂတ်နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသည်မှာ လက်ရှိ အခြေအနေကို အသေးစိတ် သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေကို သုံးသပ်ရာတွင် အချက် ၄ချက်ဖြင့် သုံးသပ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံများက စခဲ့တဲ့ SWOT Analysis လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ခွဲခြမ်းသုံးသပ်တဲ့ စနစ်ပါပဲ။
<image copy from http://www.pkidd.com/images/swot.jpg>
လက်ရှိ အားသာချက်ကဘာတွေလဲ၊ အားနည်းချက်ကဘာတွေလဲ၊ အခွင့် အလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ၊ အခက်အခဲတွေက ဘာတွေလဲ စသဖြင့် အခြေအနေ ၄ခုမှ ကြည့်ပြီး ဖော်ထုတ် သုံးသပ်ကြပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေကို အသေအခြာ သိပြီးမှသာ မှန်ကန်တဲ့ အနာဂတ် နည်းဗျူဟာကို ချမှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်နည်းဗျူဟာ ချမှတ်ရာမှာလည်း အချိန်တိုအတွင်း ချက်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရမယ့် အကြောင်းအရာများလည်း ရှိသလို၊ ရေရှည် အစီအစဉ် အသေးစိတ်ကို ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ရမည်များလည်း ရှိပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းများ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့ အစည်းအတွင်းမှ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သောသူများက အဖွဲ့ အစည်း ရည်မှန်းချက်များ၊ နည်းဗျူဟာများကို သိရှိနားလည်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။ ထို့အတူ အဖွဲ့ အစည်းတွင်းမှ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသူများရဲ့  လိုအပ်ချက်များ၊ တောင်းဆိုမှုများကို လည်း အဖွဲ့ အစည်းကို ဦးဆောင် စီမံနေသူများအနေဖြင့် သိရှိနားလည်ထားရန်မှာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းကြီးလာတာနဲ့ အမျှ အဖွဲ့အစည်းတွင်းတွင် အဖွဲ့ ငယ်များဖွဲ့ပြီး၊ ထိုအဖွဲ့ ငယ်များကို ဦးဆောင် စီမံနုိုင်သူများကို မွေးထုတ်ရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုက အရေးပါလာပါတယ်။ လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အများလက်ခံထားကြတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းများရဲ့  သိပံ္ဗနည်းကျ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရဲ့  အစ ပထမက စစ်တပ်တွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်တွင်း အဖွဲ့ အစည်း စီမံခန့်ခွဲမှုမှ အောင်မြင်ခဲ့မှုများကို အတုယူကာ့အရပ်သား အဖွဲ့ အစည်း စီမံခန့်ခွဲမှုပညာများကို သက်မှတ်ထားသည်ဟု ဖတ်ရှုမှတ်သားဖူးပါတယ်။
မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ ကိစ္စရပ်များ အသေးစိတ်ကို အဖွဲ့ အစည်းတွင်းမှ ၀န်ထမ်းများ အားလုံးကို မနှစ်တုန်းကလိုပဲ ပြန်လည် တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရေးပြဖို့ကတော့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့  လျှို့ ဝှက်ချက်ဖြစ်လို့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အကြမ်းဖျဉ်း ကိစ္စများကို တော့ ရေးပြချင်ပါတယ်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို တိုကျိုမြို့နဲ့ မနီးမဝေးမှာ ရှိတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မြို့ လေးရဲ့  ဟိုတယ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမနေ့မှာတော့ ဘတ်စ်ကား တစီး စီးလုံးငှားပြီး သွားကြပါတယ်။ မနက်၉ နာရီခန့် တိုကျိုမြို့ မှ ထွက်ပြီး၊ ၁၁နာရီခန့်တွင်ဟုိုတယ်ကိုရောက်ပြီး နေ့လည်စာ စားကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြိုတင်ခွဲထားတဲ့ အဖွဲ့ အလိုက် ဆွေးနွေးခန်းများတွင် သက်ဆိုင်သူများက အချိန် ၅နာရီခန့်ကြာအောင် အလုပ်ရုံသဘောဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး အဖွဲ့အစည်း၏ အားသာချက်များ၊ အားနည်းချက်များ၊ အခွင့်အရေးများ၊ အခက်အခဲများကို ထုတ်နှုတ်ပါတယ်။ ထို့နောက် နောင် အနာဂတ်တွင် ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်မည်၊ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သင့်သည်တို့ကို ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ နည်းဗျူဟာ အဟောင်းများ၊ အသစ်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရန် ရှေ့ ဆက်လုပ်ဆောင် သင့်သည်များကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါတယ်။
အားလုံးက မိမိ အဖွဲ့ အလိုက် သက်မှတ်ထားသော အကြောင်းအရာပေါ်တွင် တက်တက်ကြွကြွ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ အချိန်ကန့်သက်ချက်လည်းရှိတော့ ဆွေးနွေးချက်များကို စုစည်းပြီး ဒုတိယနေ့ မှာ တက်ရောက်လာသူ အားလုံးကို ပြန်လည် တင်ပြနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ အချို့  အဖွဲ့ များက ညနေစာ ထမင်းစားပြီး ချိန် နောက်ပိုင်း ညနက်တဲ့အထိ စုစည်းတင်ပြတဲ့ စာကို ရေးသားကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထမင်းစားပြီး တော့ ဂျပန် ဟိုတယ်များ ထုံးစံအတိုင်း ရေပူကန်ရှိတာကြောင့် ရေပူကန်သွားစိမ်ကြပါတယ်။
ဒုတိယနေ့ မနက်ကတော့ မနက်စာ စားပြီး ၈နာရီကနေစပြီး နေ့လည် ၁၂ နာရီ အထိ ပထမနေ့က အဖွဲ့ငယ်အလိုက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့မှုများကို အားလုံးကို ပြန်လည်တင်ပြ စုစည်းတဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို လုပ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ ငယ် အသီးသီးက သက်မှတ်ထားတဲ့ တင်ပြသူက အားလုံး ရှေ့ တွင်ထွက်ပြီး အဖွဲ့ ကို ကိုယ်စားပြုကာ ၁၅ မိနစ်ခန့် စကားပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ တင်ပြမှုအပေါ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ခေါင်းဆောင်မှ ပြန်လည်ပြီး မေးခွန်းမေးတာ သုံးသပ်ချက် ဖြည့်တင်းပြောပြချက်များကို ပြောပါတယ်။ အားလုံးရှေ့ မှာပဲ နောင်အနာဂတ်တွင် ဖြစ်သင့်သော အချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
ယခုလိုမျိုး အဖွဲ့ အစည်းတွင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခြင်းဖြင့် ၀န်ထမ်းများရဲ့  လိုအပ်ချက်များ၊ မကျေနပ်မှုများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊ ပြောင်းလဲနေသော ဈေးကွက် အနေအထားများကို ပြန်လည် သုံးသပ်နိုင်တဲ့ အခွင့် အရေးကို ရရှိစေပါတယ်။ အဖွဲ ပအစည်း ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ အဖွဲ့ အစည်း ရည်မှန်းချက်ကို ၀န်ထမ်းအားလုံးသိရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရသည်မှာ ခက်ခဲလာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အဖွဲ့ အစည်းတွင်းက ပထမနေရာ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများ (First Line) ရဲ့  ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းက အရေးပါလာပါတယ်။ အဖွဲ့ အစည်းအနေနဲ့လည်း လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက် ရည်ရွယ်ချက်များကို ၀န်ထမ်းအားလုံးသိရှိနိုင်ရန် ပြန်ကြားရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ပိုမို အားစိုက်ရန် လိုအပ်လာပါတယ်။ အဖွဲ့ အစည်း အင်အားကြီးမားလာတာနဲ့အမျှ အဆင့်ဆင့်သော ခေါင်းဆောင်များမှ တဆင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ပြန်ကြားခြင်းများလည်း ရှိလာတဲ့အတွက် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ပြုစုပျိုးထောင် မွေးထုတ်ဖို့ အရေးကြီးလာပါတယ်။
(image copy from http://image.slidesharecdn.com/managementataglance-100305042119-phpapp02/95/management-at-a-glance-9-728.jpg?cb=1267762914)
အဖွဲ့ အစည်းများတွင် ပထမနေရာ ခေါင်းဆောင်သူ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများ ပြုစုပျိုးထောင် မွေးထုတ်နိုင်မှု မရှိပါက ထိုအဖွဲ့ အစည်းသည် ဆက်လက် ရပ်တည် အောင်မြင် တိုးတက်ရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ပေ။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများတွင် ထိုကဲ့သို့ အရေးပါသော ပထမနေရာ ခေါင်းဆောင်သူ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများ ပြုစု ပျိုးထောင်ထားခဲ့နိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းများတွင် များစွာသော အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ နေရတယ်လို့ သိရှိ ဖတ်ရှုဖူးပါတယ်။
ကျနော်တို့ အဖွဲ့ အစည်းမှ ၀န်ထမ်းများသည် လက်ရှိ အိုင်တီနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ မြန်မာလူငယ်များ ၈၈ ယောက်ဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထားပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းများတွင် ၀င်ရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပါတယ်။ အဖွဲ့ အစည်း၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်များထဲတွင် ထိုဝန်ထမ်း လူငယ်များရဲ့  ခေါင်းဆောင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းအားမြှင့်တင်ရေးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ နောင် အနာဂတ်တွင် မိမိတို့ အဖွဲ့ အစည်းမှ ၀န်ထမ်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လိုအပ်နေသော ပထမနေရာ ခေါင်းဆောင်သူ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများ ဖြစ်လာနိုင်ရန် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်မှုကိုသာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး လက်တွေ့  ကျင့်ကြံ အားထုတ် ကြိုးစားရမည်မှာ ကျနော်တို့ ၀န်ထမ်း လူငယ်များသာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိက မိမိ အဖွဲ့ အစည်းအတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲကို စဉ်းစားပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့  စွမ်းရည်ကိုလည်း မြှင့်တင်ရပါမယ်။ မိမိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း ရည်မှန်းချက် ဦးတည်ချက် နည်းဗျူဟာများကို သိရှိနားလည်ပြီး၊ မိမိကိုယ်တိုင်အတွက် ရည်မှန်းချက် ဦးတည်ချက် နည်းဗျူဟာများကိုလည်း ချမှတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမယ်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လည်း ၀န်ထမ်းများကို အဖွဲ့ အစည်းအနေနဲ့ ကူညီ ထောက်ပံ့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေပါတယ်။ အနာဂတ် နည်းဗျူဟာများဆိုတာက လူငယ်များရဲ့ လက်ထဲမှာပဲ ရှိပြီး၊ ဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမှာလည်း လူငယ်များပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အဖွဲ့ အစည်း တခုတည်းမှာတင်မကပဲ မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးက လူငယ် အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပြီး တာဝန်လည်း ရှိပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
“My fellow colleges, ask not what your organization can do for you, ask what you can do for your organization”
“My fellow Myanmar, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” (reference from John F. Kennedy Quote)
၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၁၀
ဒါကာမြို့ကို ရောက်ခဲ့တုန်းက (၂)
Let’s have tasty local breakfast@Dhaka
ဒါကာက ဂျပန်စံတော်ချိန်နဲ့ ၃ နာရီနောက်ကျပါတယ်။ အစောကြီးနိုးနေတော့ လိုက်ကာဖွင့်ကြည့်မိပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည်မှာ တိုက်အမြင့်တွေတွေ့ရပါတယ်။ ဆောက်လက်စ တိုက်ကြီးတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မူဆလင်ဘုရားကျောင်းတခုကိုလည်း မြင်ရပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက တက္ကသိ်ုလ်တခုရဲ့ နာမည်ကို တိုက်ခေါင်မိုးမှာ ချိတ်ထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဟိုတယ် ဘေးက တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ဂိုထောင် အသေးလေးရှိပြီး အကီ်ျ င်္ ဘောင်ဘီတွေ လှမ်းထားပါတယ်။ အဝတ်တန်း ဘေးမှာ ယောက်ျားတယောက်က အပေါ် အကျီ င်္မပါ ပုဆိုးဝတ်ထားပါတယ်။ သူက ထိုင်ခုံရှည်ပေါ်ခွထိုင်ထားပြီး ကြက်သွန်လို့ ထင်ရတာကို လှီးနေပါတယ်။ ထိုင်ခုံရှည်ရဲ့ ခြေထောက် သုံးခုမှာ တခုက ကျိုးနေလို့ ထင်ပါတယ်၊ ပလစတစ် ဆေးပုံးကို အောက်မှာခုထားပါတယ်။ တိုက်ခေါင်မိုးဟာလည်း ရေငြှိစွဲကပ်ထားတဲ့ အရောင်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဟိုတယ်ကနေ မနက်စာစားဖို့ ထွက်ခဲ့ပြီး၊ လမ်းနည်းနည်းလျောက်ပြီး ဆိုင်တွေမြင် တွေတဲ့ လမ်းထဲဝင်ကြည့်ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လို ဆိုင်ရှေ့မှာ ဆိုင်ဝင်ထမ်း ထင်ပါတယ် စကားတွေပြောပြီး ဆိုင်ကို လက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ ထင်တာကတော့ လာပါ စားပါ မနက်စာ အစုံရတယ်လို့ ပြောတယ်ထင်ပါတယ်။ ဘင်ဂါလီစကားနဲ့ပြောတာလား မသိပေမယ့် နားမလည်တော့ ခန့်မှန်းယူရတာပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လိုမေးတော့လည်း ပြန်မဖြေတတ် နားမလည်ဘူး ထင်ပါတယ်။
အခြားဆိုင်လည်း ကြည့်ချင်တာနဲ့ ရှေ့ဆက်လျောက်ပြီး ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေလို ဆိုင်ရှေ့မှာ ဆမူဆာ လုပ်နေတာလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်။ လမ်းအဆုံးမှာက လှည်းတန်းဈေးလိုမျိုး ဈေးရုံကြီးရှိပြီး မနက်ခင်း ဆိုင်ခင်းဖို့ လာသူတွေနဲ့ စည်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ပြန်လည့်ပြီး ခုနက လူထွက်ခေါ်တဲ့ ဆိုင်ကိုပြန်သွားပြီး ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူများစားတာတွေကြည့်ပြီး ချပါတီနဲ့ ဟင်းနဲ့စားနေတဲ့ ဘေးဝိုင်းကို လက်ညိုးထိုးပြီး အဲ့လိုမျိုးလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဆမူဆာလည်း စားချင်ပေမယ့် မကြော်သေးဘူးပြောပါတယ်။ ဘာသာစကား နားမလည်ပေမယ့် နားလည်အောင် ပြောဆိုရတာပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ချပါတီနဲ့ ဆိတ်သားဟင်းစားပြီး ရေသန့်တလုံးမှာ သောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုင်အပြင်အဆင်က ရန်ကုန်က ဆိုင်တွေအတိုင်းပါပဲ။ ဟင်းပွဲ ပြင်ဆင်ပုံလည်း အတူတူပါပဲ။ ရန်ကုန်က ဒါန်ပေါက်ဆိုင်တွေ ချစ်တီးထမင်းဆိုင်တွေလိုပဲ လက်ဆေးတဲ့ နေရာ ကျယ်ကျယ်လည်းရှိတယ်။ ဒေသခံတွေက လက်ဆေးပြီး လက်နဲ့စားကြတယ်။ ကိုယ်တွေကိုတော့ နိုင်ငံခြားသားဆိုပြီး ဇွန်းခရင်း ချပေးတယ်။ ဒေသခံ တွေက အသားဟင်းမဟုတ်ဘဲ ပဲကြီးဟင်းလို ဟင်းမျိုးနဲ့ ချပါတီကို တို့ပြီး စားကြတယ်။ အဝစားလိုက်တာ တောင် မြန်မာငွေ ၂၀၀၀ ကျပ် လောက်ပဲကျတယ်။ ဆိတ်သားဟင်းနဲ့ ချပါတီ သုံးချပ်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ တန်ပါတယ်လေ။
စားပြီး တနေ့တာ လေ့လာရေး ခရီးမထွက်ခင် ဟိုတယ်ခဏပြန်ခဲ့ပါတယ်။ နီရဲနေတဲ့ စိန်ပန်းပင်ကြီးလည်း တွေ့ရတယ်။ လမ်းမှာ ကျောင်းသွားကြတဲ့ ကလေးတွေ ကျောပိုးအိပ်ကိုယ်စီနဲ့ လမ်းလျောက်သွားတာတွေ့ရတယ်။ လူငယ်အချို့က ပလက်ဖောင်းမှာ ထိုင်ခုံချထိုင်ပြီး စကားပြောနေကြတယ်။ လန်ချားမောင်းနေသူတွေလည်း တွေ့ရတယ်။ လမ်းဘေးမှာ မသိမ်းသေးတာလား အမှိုက်တွေလည်း တွေ့ရတယ်။ မညီမညာ ကပ်ထားတဲ့ ကြေငြာစာရွက်တွေ၊ အရောင်နွမ်းနေတဲ့ ဆိုင်ဆိုင်းဘုတ်တွေ လည်းတွေ့ရတယ်။ လမ်းပေါ်က မြောင်း အဖုံးကို ဖုံးထားတဲ့ ကွန်ကရစ် အတုံးကြီးတွေလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒါကာမြို့နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ တူညီတာတွေ အတော်များတာပဲ။ ဟိုတယ်မှာ ဒီနေ့ လိုက်ပို့မယ့် ဒေသခံ ကိုစောင့်ရင်း ခဏနားပါတယ်။ ဒီနေ့ သွားမယ့် အစီအစဉ်က ဂျပန်စာသင်ကျောင်း၊ JETRO၊ ဂျပန်သံရုံး၊ ဒါကာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ဒါကာ တက္ကသိုလ်၊ ဒေသခံ IT ကုမ္ပဏီ ၂ ခု ကို သွားရောက် လေ့လာပါမယ်။
၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း
ဒီနေ့မနက် မနက်စာကို အိမ်မှာ ပန်ကိတ် လုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။
ပန်ကိတ်လုပ်ဖို့ ကြက်ဥကုန်နေတော့ လမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့ ၂၄ နာရီ ဖွင့် ကုန်စုံဆိုင် ( Convenient Store) သွားပြီး ကြက်ဥ ဝယ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းက ဂျပန်မဟုတ်တဲ့ အာရှသား တယောက်ပါ။ ဂျပန်မှာ ဒီလိုမျိုး ၂၄ နာရီ ဖွင့်တဲ့ ကုန်စုံဆိုင်တွေက ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တိုကျိုလို မြို့ကြီးတွေမှာပါ။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး လာမှုနဲ့အတူ ၂၄ နာရီ အလုပ်လုပ်တဲ့ မြို့အဖြစ် တိုကျိုမြို့ကြီးက ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ကုန်စုံဆိုင်တွေတင် မကပဲ စားသောက်ဆိုင်တွေ ကုန်တိုက်တွေ လည်း ၂၄ နာရီ ဖွင့်တဲ့ဆိုင်တွေ ရှိပါတယ်။
လူဦးရေ နည်းပါးလာမှုနဲ့အတူတူ ၂၄ နာရီ လုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်သား ရှားပါးမှုဖြစ်လာပါတယ်။ ၂၄ နာရီ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့ အခက်အခဲများ ရှိလာပြီး အချို့ လုပ်ငန်းတွေက ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်နားဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။
၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှုက စားသုံးသူတွေအတွက် စိတ်ကျေနပ် သက်တောင့်သက်သာရှိစေပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း အလုပ်ချိန် ကြာရှည်မှု ပြဿနာများလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ ၂၄ နာရီ လုပ်ငန်းတွေက ဝယ်ယူသူ နည်းပါးတဲ့ ညနက်ချိန် တာဝန်ကို လုပ်သား တဦးတည်းကို တာဝန်ပေးတာတွေရှိပြီး၊ အလုပ်ဝန်ပိမှုများလည်း ရှိလာပါတယ်။
၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ကျင့်သားရလာမှုနဲ့အတူ စားသုံးသူတွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုကလည်း တင်းကျပ်လာပါတယ်။ ထုတ်ကုန်တခုကို မနက်ဖြန် မနက် လိုချင်တယ် ဆိုတာမျိုးကို ညနေပိုင်းမှာ အေးအေးဆေးဆေး ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ညလုံးပေါက် အလုပ်လုပ်ရတာတွေ ရှိလာပါတယ်။ အလုပ်ချိန် ရှည်ကြာမှုပြဿနာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ရှေ့လကဆိုရင် ဒန်းဆူးလို့ခေါ်တယ့် နာမည်ကြီး လုပ်ငန်းစုကြီးတခုက ဝန်ထမ်းသစ် အမျိုးသမီးလေး တဦးဟာ အလုပ်ချိန် ရှည်ကြာမှုနဲ့အတူ စိတ်ဖိစီးမှုများလာပြီး မိမိကိုယ်ကို သတ်သေသွားပါတယ်။
အကျိုး အကောင်း အဆိုးတွေဆိုတာ ဒွန်တွဲနေတတ်တဲ့ သဘောရှိပြီး၊ ထိုထိုသော အကြောင်း အကျိုးတွေကို လေ့လာပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ စနစ်တွေကို လူ့ဘောင်လောက အတွက် စဉ်ဆက်မပျက် တည်ဆောက် ပြုပြင်ရန်မှာ အရေးကြီးဆုံးပင် ဖြစ်ပါတယ်။
2016 Dec 4
အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများ အကြောင်း
ဒီနေ့ ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ နေ့လည်စာကို အိမ်မှာ အတူတူစားဖြစ်တယ်။
ရန်ကုန်ကနေရောက်နေတဲ့ အမေက ရန်ကုန်က ဈေးနှုန်းတွေ သိတော့ ဂျပန်မှာ အသားငါးတွေ ဈေးဝယ်ရတာ သက်သာကြောင်း လတ်ဆတ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
အသီးအနှံတွေလည်း ကုန်တိုက်မှာမဝယ်ပဲ အသီးအနှံသီးသန့်ရောင်းတဲ့ အိမ်နားက ကမဲအိဒို ဈေးမှာသွားဝယ်ရင် အတော်လေးကို သက်သာပါတယ်။ တခါတလေ တချို့ဆိုရင် မြန်မာမှာထက် သက်သာနေတတ်တယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံက စိုက်ပျိုးရေးလည်း လုပ်တော့ နိုင်ငံတွင်းမှာလည်း စားသောက်ကုန်ပေါများပါတယ်။ တချို့ အသီးအနှံတွေက တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ဘရာဇီး၊ အမေရိက စတဲ့နိုင်ငံတွေကနေ တင်သွင်းလေ့ရှိပါတယ်။ သွင်းကုန် အသီးအနှံတွေက နိုင်ငံတွင်းစိ်ုက်ပျိုးတာထက် ဈေးသက်သက်သာသာ သွင်းပြီး ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။
အခုနာမည် ကြီးနေတဲ့ ပစိဖိတ်နိုင်ငံများ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီမှုTPP (Trans-Pacific Partnership) သာ အသက်ဝင်လာမယ်ဆိုရင် အခွန်အခတွေဈေးသက်သာပြီး သွင်းကုန်တွေ ပိုမို ဈေးသက်သာစွာ ဝယ်ယူလာနိုင်မှာပါ။ ဂျပန် အတိုက်အခံများကတော့ TPP ကိုသဘောတူ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရင် ဂျပန်ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်တွေ မယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာစိုးရိမ်ပြီး ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ လက်ရှိ အစိုးရကတော့ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တိုးမြှင့်ပြီး ဂျပန် လုပ်ငန်းရှင်များ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ထုတ်ကုန်ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရန်ဆိုပြီး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
TPP နိုင်ငံများ အပါအဝင် အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံများကို ထုတ်ကုန် တင်ပို့ချင်သူ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ချဲ့ချင်သူ အသေးစားနှင့် အလယ်အလတ်လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် ဘက်ဂျက်များသက်မှတ်ကာ JETRO ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများက ထောက်ပံ့ကူညီပေးပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းလူဦးရေနည်းပါးလာပြီး ဈေးကွက်ချဲ့ ရန်မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့် ဂျပန် အသေးစားနှင့် အလတ်စား ကုန်ထုတ်လုပ်သူများသည် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ထွက်ပြီး ဈေးကွက်ရှာရန် လိုအပ်လာပါတယ်။ ဂျပန်လုပ်ငန်းများရဲ့ ၉၀% ကျော်က အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်များ ဖြစ်တာကြောင့် စီးပွားရေးပြန်လည် ဦးမော့လာရန်နှင့် ဆက်လက်ရပ်တည် တိုးတက်လာစေရန်မှာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်ရန်သာရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း တိုးတက်မှုရရန်ကြိုးစားနေသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံတွင်း အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင် များလည်း တချိန်ချိန်မှာ ပြည်တွင်းဈေးကွက် တခုတည်းနဲ့ ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲလာနိုင်ပါတယိ။ ယခုအချိန်တည်းက ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အထိ ရည်မှန်းပြီး၊ အသင့်ပြင်ဆင်ထားကာ အခွင့်ရသည်နှင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်သင့်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ ပြိုင်ဖက်က နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များ မဟုတ်ဘဲ အခြားနိုင်ငံများမှ လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ ရင်ဘောင်တန်း လုပ်ဆောင်နိုင်မှသာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် ရပ်တည် လုပ်ကိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန် နှစ်ကူး အလှူ ကောက်ညှင်းမုန့်ဝေခြင်း
ဒီနေ့ ရပ်ကွက်ထဲက အဖွဲ့တွေ နှစ်ကူး အထိန်းအမှတ်အနေနဲ့ ဂျပန်ရိုးရာ ကောက်ညှင်းမုန့် (ခေါပုတ်) အခမဲ့ကျွေးပွဲ လုပ်ပါတယ်။
ရပ်ကွက်ထဲကသူတွေ စုဝေးပြီး မနက် ၈ နာရီလောက်ကစပြီး ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ် ကြပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ကောက်ညှင်းဆန်ကို ချက်ပါတယ်။ ကျက်တော့ သစ်သားစဥ့် ထဲ ထည့်ပြီး ထောင်းပါတယ်။ ချက်တာနဲ့ ထောင်းတာကို အမျိုးသားတွေက လုပ်ကြပါတယ်။ ထောင်းပြီးတော့ ရလာတဲ့ ကောက်ညှင်းမုန့်ကို သေးသေးလုံးပြီး ပဲနဲ့နယ်တာနယ်၊ ပဲမှုန့်ဖြူးတာဖြူး၊ မုန်လာဥဖြူ ကြိတ်ပြီး ဂျပန်ပဲငံပြာရည် နယ်ထားတာနဲ့ နယ်တာနယ်၊ စသဖြင့် သုံးမျိုး လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါကိုတော့ အမျိုးသမီးတွေက လုပ်ကြပါတယ်။ ဂျပန်ရိုးရာ ခေါင်ရည် အရက်ချိုကိုလည်း ချက်ပါတယ်။
နေ့လည် ၁၁ နာရီကနေ စတင်ပြီး မုန့်ဝေမှာဆိုတော့ ၁၀ နာရီ ၄၅ လောက်မှာ လူတွေစ တန်းစီကြပါတယ်။ ပန်းခြံက အိမ်ရှေ့မှာပဲဆိုတော့ ကျနော်တို့က အိမ်ကနေ ကြည့်နေပြီး လူတွေစတန်းစီမှ သွားတန်းစီဖြစ်တယ်။ တန်းစီတော့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ လူ ၁၄၅ ယောက်ရှိတယ်။ တိုကင်လိုက်ဝေတဲ့ နံပတ်ကို ကြည့်ပြီး သိရတယ်။ စုစုပေါင်း အခု ၃၀၀ ဝေမယ်လို ကြေငြာထားပါတယ်။
မုန့်ရတော့ အိမ်မှာပြန်ပြီး စားပါတယ်။ နေ့လည် ၁၂ မထိုးခင်မှာပဲ ပန်းခြံထဲမှာ မုန့်လုပ်တဲ့သူတွေ ရှင်းလင်းပြီး ပြန်သွားကြပါတယ်။ မုန့်လည်း စားလို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး နှစ်သစ် အထိန်းအမှတ် ကောက်ညှင်းမုန့်ကျွေးတာက အာရှနိုင်ငံများရဲ့ တူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲက တခုပါပဲ။
M&A Seminar လုပ်ငန်းသေး /လတ်များနှင့် M&A
အဲ့ဒီနေ့က Tokyo International Forum အဆောက်အဦးထဲမှာလုပ်တဲ့ M&A Seminar ကို သွားတက်ဖြစ်တယ်။
လူဦးရေ နည်းပါးလာမှုနဲ့အတူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်း ကျဆင်းလာနေတယ်ဆိုပါတယ်။ လုပ်ငန်းများ ဆက်ခံမယ့်သူမရှိဖြစ်ပြီး အခြား လုပ်ငန်းကြီးများက ဝယ်ယူမှုကို ခံနေရတာတွေ များလာပြီး၊ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ အနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ လုပ်ငန်း ဆက်လက် ရှင်သန်နေစေရန်နဲ့ မိမိ ဝန်ထမ်းများ အလုပ်ဆက်လက်ရရှိနေစေဖို့ လုပ်ငန်းကို ရောင်းချခြင်းကိုလည်း ရွေးချယ်လာကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိမိလုပ်ငန်း ဆက်ခံရန်အတွက် မိမိ သွေးသားရင်း သား၊ သမီးကို စဉ်းစားကြလေ့ရှိပေမယ့် လက်တွေ့မှာ မိမိလုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းက မိမိ သားသမီးက စိတ်ဝင်စားပြီး လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ် မဖြစ်နေတာ များပါတယ်။ မိမိ ဝန်ထမ်းများထဲက စီမံခန့်ခွဲသူ ဝန်ထမ်းကို ဆက်ခံခိုင်းဖို့အတွက်ကလည်း၊ လုပ်ငန်းကို ဝယ်နိုင်မယ့် ငွေအားမရှိ၊ မိမိ သမီးနဲ့ ပေးစားဖို့ စီစဉ်ချင်သော်လည်း ယနေ့ခေတ်ကာလနဲ့ မကိုက်ညီ။ အဲ့ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းကို ရောင်းထုတ်ပြီး လုပ်ငန်း ဆက်လက် ရပ်တည်ဖို့နဲ့ ဝန်ထမ်းများ ဆက်လက် အလုပ်လုပ်နိုင်ရေးကို စီစဉ်ကြရတာတွေ များလာတယ် ဆိုပါတယ်။
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတခုကို စီမံခန့်ခွဲတယ်ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပေမယ့်၊ ခက်ခဲတဲ့ အရာတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခု ဆက်လက် ရပ်တည်ဖို့ထက် နောင် ၅ နှစ် ၁၀ နှစ်မှာ ယခုထက် တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးလာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဝန်ထမ်းအတော်များများက လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်း ဆက်လက်ရပ်တည်နေဖို့တခုတည်းကို စဉ်းစားသူ များပေမယ့် ၊ လုပ်ငန်းတခုအနေနဲ့ နှစ်စဉ် အနည်းဆုံး ၂၀ % ခန့် လုပ်ငန်း တိုးတက်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ပြောင်းလဲမှုများတဲ့ ယနေ့ လောကမှာ လုပ်ငန်း ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။
လုပ်ငန်းကို ရောင်းချတဲ့အခါမှာလည်း အရေးကြီးတာက မိမိ လုပ်ငန်းကို အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားသူ၊ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝကို သိရှိနားလည်သူ လုပ်ငန်းရှင်ကိုသာ ရောင်းသင့်ပါတယ်။ ရောင်းချပြီးပါကလည်း မိမိဝန်ထမ်းများ ဆက်လက်ပြီး အဆင်ပြေစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ အချိန် တခုအထိ ဆက်လက်ပြီး လက်တွဲ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပေးတာမျိုး လုပ်ပေးသင်တယ်။ ဝန်ထမ်းများ၊ စီးပွားမိတ်ဖက်များ အနေနဲ့ စိတ်ခံစားချက်ရှိနိုင်တာကြောင့် ထိုသို့သော အချက်များကို ကျော်လွှားပြီး လုပ်ငန်းဆက်လက် အောင်မြင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရန်လိုတယ် လို့ သိရပါတယ်။
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်စတဲ့ လုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေရသူများသည် သာမန်ဝန်ထမ်းများကဲ့သို့ အလုပ်ချိန် သက်မှတ်ချက်မရှိ ၂၄ နာရီ နီးပါး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် စဉ်းစား ရပြီး၊ လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ ဝန်ထမ်းများ အဆင်ပြေဖို့၊ စားသုံးသူများ အဆင်ပြေဖို့ ကြံစီတွေးတောနေရပါတယ်၊ လုပ်ကိုင်ကြရပါတယ်။ သက်ပြည့် ပင်စင်ဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် လုပ်ငန်းကို လွှဲပြောင်းပေးခြင်း တခုဖြစ်တဲ့ ရောင်းချခြင်းဖြင့် ပင်စင်ယူကြပါတယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။
Social Residence နဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ၊ ဆက်စပ်လုပ်ငန်း
တနေ့က အိမ်ငှားခြင်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်း လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက တာဝန်ရှိသူ တယောက်နဲ့ ရုံးမှာ တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။
Social Residence, Share House, Guest House, Hotel Business လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။ ဂျပန်မှာ နိုင်ငံခြားသားတွေ အိမ်ငှားတဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲရှိကြပါတယ်။ သာမန် အိမ်ပိုင်ရှင်တွေက ဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ရင် အာမခံမယ့် ဂျပန်လူမျိုး မရှိရင် မငှားတာ များပါတယ်။ ပြီးတော့ အာမခံ စပေါ်ငွေ စတာတွေလည်း ပေးရတော့ အိမ်ခန်း တခန်း အသစ်ငှားမယ်ဆိုရင် ကနဦးကုန်ကျငွေက အလွန်များပါတယ်။ ယခု ကုမ္ပဏီက အဲ့ဒီ အခက်အခဲကို business chance အနေနဲ့ အသုံးပြုပြီး အာမခံလူမလို၊ စပေါ်ငွေမလို စသည်တို့ဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများ အပါအဝင်ကို အိမ်ခန်းငှားပေးပါတယ်တဲ့။
Social Residence ဆိုတာက Sharing House ကို နည်းနည်း အဆင့်မြင့်ထားတဲ့ model လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နေထိုင်ကြသူအချင်းချင်း အသိပညာ ဖလှယ်နိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချကိနဲ့ပါတဲ့။ ဝါသနာပါသူ အချင်းချင်း အသိဖလှယ်ကြဖို့ social media တခုအဖြစ် နေထိုင်ကြတယ်ဆိုပါတယ်။ ဂျပန်တိုင်ငံသား လူငယ်တွေကြားမှာ ခာတ်စားတယ်ပြောပါတယ်။ နှစ်စဉ် Revenue 60 Billion Yen ရှိပါတယ်တဲ့။
Marketing က အင်တာနက် Marketing ကိုသုံးပြီး ဂျပန်တွေကော နိုင်ငံခြားသားတွေပါ သူတို့ website ကိုကြည့်ပြီး တိုက်ရိုက် reservation လုပ်တယ်ဆိုပါတယ်။
Online payment နဲ့ Bank Transfer Payment ကို အဓိက သုံးပါတယ်တဲ့။ ရှေ့လျောက် လုပ်ငန်းအမြတ်တိုးချဲ့ဖို့အတွက် လုပ်ငန်းခွန်သက်သာတဲ့ နိုင်ငံ ပြီးတော့ credit card payment gateway ရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ပြီး အခွန်သက်သာပြီး အမြတ်ပိုထွက်အောင် လုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ် ဆိုပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွန်သက်သာချင်ရင် စင်ကာပူနိုင်ငံက သင့်တော်ပြီး၊ payment gateway လည်း ရှိတာကြောင့် စင်ကာပူက သင့်တော်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်သားကုန်ကျစရိတ်လျော့ချဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံလို လုပ်သားလစာ နည်းပါးသေးသော နိုင်ငံတွင် cost center အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသား စိမ်းသေးသော ဂျပန် IT လုပ်ငန်းများ
ဒီနေ့ IT ကုမ္ပဏီတခုက တာဝန်ရှိသူတဦးနှင့် ဝန်ထမ်း တဦးနဲ့ ယခင် လုပ်ငန်းဆက်စပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းက တရုတ်လူမျိုး အရောင်း ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး တဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ လုပ်ငန်းတွင် ယခုလက်ရှိ တရုတ်လူမျိုး ဝန်ထမ်းအချို့ နှင့် မိတ်ဖတ်လုပ်ငန်းမှ တရုတ်လူမျိုး IT နည်းပညာရှင်များကို ခန့်ထားပြီး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ ၎င်းတို့ လုပ်ငန်းက ၂၀၁၁ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့ပြီး မတည်ရင်းနှီးငွေ သောင်း ၂၀၀၀ ရှိသော အလယ်အလက်တန်း လုပ်ငန်း တခုဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးပြီး မြန်မာ IT လူငယ်များ အကြောင်း မိတ်ဆက်ပြောပြခဲ့ပေမယ့် သူတို့ လုပ်ငန်းထဲမှာ အတူတူ ပါဝင် လုပ်ကိုင်ဖူးခြင်း မရှိတာ၊ မြန်မာဆိုတာ ဘယ်လို၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုတာ မသိသေးတာ အစရှိတဲ့ အချက်တွေကြောင့် ချက်ခြင်းကြီး မြန်မာနိုင်ငံသား IT ပညာရှင်တွေကို ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့် အပ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူကြောင်းပြောပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မှ အမိန့်နဲ့ ဘာမှ မသိသေးတဲ့ နိုင်ငံခြား ဝန်ထမ်း ခန့်မယ်ဆိုရင်တောင် အမှန်တကယ် အလုပ်အတူတူ လုပ်ရမယ့် လက်အောက် ဝန်ထမ်း ဂျပန် IT ပညာရှင်တွေက လက်မခံရင် ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်ငမှာ မဟုတ်ဘူး၊ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဟာ မိမိလူမျိုးများနဲ့သာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိသူက များပြီး နိုင်ငံခြားသားများနဲ့ အလုပ်လုပ်ရမှာကို စိုးရွံ့ စိတ်ရှိကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဂျပန်စကားမပြောတက်တဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးများကတော့ ရှေးယခင်ကတည်းက ဂျပန်နိုင်ငံကို လာရောက် အလုပ်လုပ်သူများပြီး ဂျပန်နေနိုင်ငံခြားသားထဲမှာ လူဦးရေအများဆုံးပါ။ အချို့ ဂျပန်လူမျိုးများဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားသားဆိုလျှင် တရုတ်လူမျိုးလိုပဲလို ထင်မှတ်မှားနေသူတွေလည်း အများ ကြီးရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတခုက နိုင်ငံသားတွေနဲ့ အလုပ်အတူတူတွဲလုပ်ဖို့ဆိုရင် အဲ့ဒီနိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံသားတွေအကြောင်း အနည်းနဲအများ သိရှိထားသင့်တာဖြစ်လို့ ပိုက်ဆံငွေကြေး တတ်နိုင်တဲ့ ဂျပန် အထက်အရာရှိ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို တခေါက်လောက်တော့သွားပြီး လေ့လာလေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ မိမိလုပ်ငန်းအတွက် မြန်မာ IT ပညာရှင်ကို အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ် မခန့်အပ်ခင်မှာ မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများမှ မြန်မာ IT ပညာရှင်များနဲ့အတူတူ တွဲဖက် အလုပ်လုပ်ကြည့်ရင်း အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ဂျပန် IT ပညာရှင်များနဲ့ အဆင်ပြေမှုရှိမရှိကို လေ့လာသုံးသပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
လူသတင်းလူချင်းဆောင် ဆိုသလို မြန်မာ IT ပညာရှင် လူငယ်များရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဖြန့်ကျက်ပြီး မ်ိမိတို့ နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များ ထပ်မံပြီး ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လာရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံများ ရစေရန်၊ လက်ရှိ ဂျပန်ရောက် မြန်မာ IT ပညာရှင် လူငယ်များမှ မိမိတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထုတ်ဖော်ပြကာ မြန်မာ IT ပညာရှင်လူငယ်များရဲ့ ပုံရိပ်ကို တက်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည် ဟု ထင်ပါတယ်။
Photo : ဂျပန်မှာ နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဓလေ့ရှိပြီး ပုံမှာ တွေ့ရသလိုမျိုး နတ်ကွန်းလေးတွေက မြို့လယ်ခေါင် တိုက်တွေကြားထဲမှာလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။
IoST (Internet of Secure Things) Seminar အကြောင်း
ဒီနေ့ DNP ( Dai Nippon Printing) ပုံနှပ်စက်လုပ်ငန်းစုကြီးက ကျင်းပတဲ့ IoSTSeminar ကိုသွားတက်ခဲ့ပါတယ်။ Internet of Things မှာ Secure ထည့်ပြီး Internet of Secure Things ဆိုပြီး solutions တွေ promotion လုပ်တာလည်း ပါတာပေါ့။
DNP ဆိုတာ ဂျပန်မှာ သုံးနေတဲ့ IC card တွေကို ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။ နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ Suicaကဒ်တွေ ဘဏ်ကဒ်တွေ credit ကဒ်တွေ သူတို့ လုပ်ငန်းကနေ printing လုပ်တာပါ။
အခုက IoTခေတ်ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပြီး security ကအရေးကြီးတဲ့ နေရာမှာရှိပါတယ်ဆိုပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့လည်း ပညာရှင်များကို တိုင်ပင်ပြီး IoT Guideline ကို ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် လို့ အစိုးရအဖွဲမှာ အကြံပေးဝင်လုပ်နေသူက ဆိုပါတယ်။
Social Networking ခေတ်မှာ ဂျပန်က နောက်ကောက်ကျခဲ့ကြောင်း၊
စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ဂျပန်ရှိနည်းပညာများဖြင့် လုပ်လို့ မရခဲ့စရာ အကြောင်းမရှိခဲ့ပေမယ့် ဂျပန်လုပ်ငန်းများ မထွန်းပေါက်ခဲ့ပါဘူး။
ဂျပန်နိုင်ငံက ကားတွေ နိုင်ငံတကာမှာ ဈေးကွက်ရရှိနေတာက စိတ်ချ လုံခြုံမှုရှိတာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှင်းကန်စံဟာဆိုလျင်လည်း အမြန်နှုန်းမြင့် သွားနေပေမယ့် ငလျင်လှုပ်လျင် ချက်ခြင်း ရပ်တန့်နိုင်သော ဘရိတ်စနစ်နဲ့ စိတ်ချ လုံခြုံမှုရှိခြင်းကြောင့် နာမည်ကြီးကြောင်း စသည်တို့ကို ဥပမာပေးပြီး ယခု IoT ခေတ်မှာတော့ Things လို့ခေါ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက မည်သူမဆို ထိတွေ့နိုင်လို့ လုံခြုံစိတ်ချရမှုက အရေးကြီးတာဖြစ်လို့ လုံခြုံစိတ်ချမှုကို အမြဲဦးစားပေးလုပ်ဆောင်တဲ့ ဂျပန် လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ ကြိုးစားစွမ်းဆောင်သင့်ကြောင်း ပြောသွားပါတယ်။
Security ABCD ဆိုတာနိုင်ငံတော်အဆင့်လည်း ထိန်းသိမ်းရတာဖြစ်ကြောင်း
A : Atomic
B : Bio
C : Chemical
D : Digital
စသဖြင့် အသီးသီး ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။
ယခုအခါ Cold War မှာ Code War အဖြစ်ပြောင်းနေပြီဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံ အဆင့် Hackers အဖွဲ့အစည်းများပင်ရှိနေပြီး၊ စစ်ပွဲများတွင်လည်း အမေရိကန်သည် Cyber Attack များဦးစွာ ပြုလုပ်ပြီးမှ လက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ် ဆိုပါတယ်။
လုံခြုံမှု security ဆိုရာတွင် များသောအားဖြင့် ကုန်ကျစားရိတ် များလာမယ်လို့ပဲ တွေးကြပေမယ့်။ နောက်တခု အသုံးဝင်မှု Usability ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။
CAMBRIC အကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
C : Cloud
A : AI
M : Mobility
B : Big Data
I : IoT
C : Cyber
အင်တာနတ်ခေတ်ဖြစ်လာပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာရာမှ ယခုအခါမှာ IoTခေတ် ဖြစ်လာနေပါပြီ။ Things ပစ္စည်းတွေ လုံခြုံမှု Secure မဖြစ်ရင်တော့ IoT ဆိုတာ Internet of Threats ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်မှာ Things ပစ္စည်းအတော်များများက အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ဆက်နေပြီး Data Analysis အဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ IoT , Cloud , Big Data
ဒါကာမြို့ကို ရောက်ခဲ့တုန်းက (၁)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဒါကာ မြို့ကို သွားလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ 2016 May 23 ကနေ 27 အထိ ၅ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
မသွားခင် တိုကျိုက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံရုံးမှာ အလည်အပတ် ဗီဇာ သွားယူပါတယ်။ ဗီဇာကောင်တာက တခုပဲရှိပြီး ဂျပန်တွေလည်း လာယူနေကြပါတယ်။ ကောင်တာထိုင်တဲ့ သူက သဘောကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ အလုပ်ချိန်မှာ ဘာပြောနေမှန်းမသိတဲ့ စကားတွေပြောနေတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ချိန်မှာ အလုပ်ကိစ္စမဟုတ်တဲ့ ဖုန်းပြောတတ်တာ မြန်မာနိုင်ငံက အချို့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့တူသလိုပါပဲ။
Haveasafe flight! ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောရင်း လေယာဉ်ကွင်းကို သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကာမြို့ကို သွားရမယ်ဆိုတော့ မရောက်ဖူးတဲ့ဒေသဆိုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ခရီးစတင်ခဲ့ပါတယ်။ တိုကျိုကနေ တိုက်ရိုက်လေယာဉ်မရှိတော့ မလေးရှားကနေတဆင့် လေယဉ်ပြောင်းစီးရပါတယ်။ မလေးရှားမှာ လေယာဉ်ပြောင်းတော့ ဘင်္ဂလားဒေရ်ှလူမျိုးတွေလားမသိ အတူတူ စီးမယ့်သူတွေ အများကြီးတွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ညဘက်မှာပဲ ဒါကာ လေဆိပ်ကို ရောက်ရှိပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းတာနဲ့ ပူနွေးတဲ့ ရာသီဥတုကို ခံစားရပါတယ်။ လေဆိပ်က သန့်သန့်ရှင်းရှင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နာရီတာလေဆိပ်၊ မလေး လေဆိပ်နဲ့နှိုင်းရင်တော့ အတော်လေးကို ဟောင်းတယ်လို ပြောရမှာပဲ။
လေဆိပ် လဝက ကို ဖြတ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုပြီး အထူးအဆန်းနဲ့ မေးပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ လာကြောင်းပြောတော့မှ တည်းမယ့် ဟော်တယ်၊ စီးပွားရေး မိတ်ဆွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား နာမည် ဖုန်းနံပတ် ရေးပေးပါပြောပြီး ဗီဇာ ထုပေးပါတယ်။ နယ်စပ်ဒေသ ပြဿနာတွေရှိတော့ နှစ်နိုင်ငံ အဝင်အထွက်က အနည်းငယ် အခက်အခဲရှိမယ် ထင်ထားခဲ့ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် သေချာ ရှင်းပြပြောပြရင် အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ သူတို့မှာလည်း မေးမြန်းရမယ့် တာဝန်ရှိတာပဲလေ။
လာကြိုတဲ့ စီးပွားရေး မိတ်ဆွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လူမျိုးနဲ့အတူတူ ကားနဲ့ ဟော်တယ်ကို သွားပါတယ်။ လေဆိပ်ကအထွက်မှာ လက်နက်ကိုင် စစ်သား ၄- ၅ ယောက်လောက် လုံခြုံရေးယူထားပါတယ်။ လေဆိပ်အပြင်မှာ လူတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ တခုကောင်းတာက ရန်ကုန်လေဆိပ်လို အထုတ်ကို အတင်း သယ်ပေးမယ် မလုပ်တာပါပဲ။ ရန်ကုန်မှာတော့ အထုတ်ကို နီးနီးလေးသယ်ပေးတာကို ကျပ် ၁၀၀၀ အနည်းဆုံးမပေးရင် စိတ်ဆိုးခံရသေးတာ။
လေဆိပ်က သိပ်အကြီးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လေဆိပ်က ထွက်တော့ ကားတွေပိတ်နေတယ်။ မီးပွိုင့်တွေမှာ မော်တော်ပီကယ်တွေလည်းရှိပြီး လမ်းရှင်းရေးလုပ်နေကြပါတယ်။ ကားလမ်းတလျောက် မောင်းလာရင်း မြို့ထဲက ဟိုတယ်ကိုရောက်ပါတယ်။ ဟိုတယ်က ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်က လမ်းထဲက ဟိုတယ်လိုမျိုးပါပဲ။ မအိပ်ခင် ပတ်ဝန်းကျင်ခဏ ကြည့်ချင်တာနဲ့ ဟိုတယ်နားက လမ်းကို လျောက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းတွေက ရန်ကုန်က လမ်းတွေလိုပဲ။ ဓာတ်တိုင်တွေက ဝါယာကြိုးတွေ ရှုတ်နေပြီး၊ ဆောက်လက်စ တိုက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြား ရန်ကုန်မြို့ထဲကလို Fuji Color ဓာတ်ပုံဆိုင်လည်း ရှိတယ်။ ကုန်စုံဆိုင်တခုမှာ အအေးနဲ့ မုန့် နည်းနည်း ဝယ်ပြီး ဟိုတယ် ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ရေချိုးတော့ တဘက်တွေက အဖြူရောင်ဖြစ်တော့ နည်းနည်း နွမ်းနေတယ်။ တဘက် ဘေးအသားလေးတွေလည်း နည်းနည်း ပြဲနေပါတယ်။ လျော်ထားတာ မပြောင်လို့လားမသိပေမယ့် ဆေးလိပ်အနံ့ နည်းနည်းရတယ်။ ဒီဈေးနဲ့ ဒီဟော်တယ် လောက်ပဲရမှာပေါ့လို့ ဖြေသိမ့်ရပါတယ်။ ရေချိုးပြီးတော့ မေးလ်စစ် ပြန်စာပြန်ပြီး အိပ်စက်အနားယူလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက် အမြန်နှုန်းက အတော် မြန်ပါတယ်။ အိပ်ရာနဲ့ အိပ်ရာခင်း ခေါင်းအုံးကတော့ သန့်ပါတယ်။ အဲယားကွန်းလည်း ကောင်းကောင်းအေးပါတယ်။ ရန်ကုန်စီးပွားရေး ဟိုတယ်တွေလို မဟုတ်ပဲ အအေးလည်း ချိန်လျော့ တိုးလို့ ရပါတယ်။ မနက်ဖြန် ဒါကာ လုပ်ငန်းတွေ လိုက်ကြည့် လေ့လာရမယ်။
အရှေ့ အနောက် တောင် မြောက်
လမ်းညွှန် ဆိုင်းဘုတ် မမြင်ခင်
အခုခရီး လမ်းဆုံမှာ ဦးတည်ရာအရပ်
How to get Japan Driving License ( မြန်မာယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှ ဂျပန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူခြင်း)
မြန်မာယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံက လိုင်စင်ကို ရယူချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဦးစွာ စာရွက်စာတမ်းတွေပြင်ဆင်ရပါမယ်။
1. JAF Japanese Translation for Driver License မူရင်း
မြန်မာနိုင်ငံကရရှိထားတဲ့ လိုင်စင်ကို ဘာသာပြန်ရပါမယ်။ JAF မှဘာသာပြန်ထားတဲ့ စာရွက်လိုအပ်ပါတယ်။ လိုင်စင်မူရင်းကို ပို့ပေးပြီး ဘာသာပြန်ရပါမယ်။ See the following URL for detail.
2. Driving License Record and History မူရင်း၊ ဘာသာပြန်(English)
မြန်မာနိုင်ငံက ကညနက ထုတ်ပေးတဲ့ လိုင်စင် မှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ သက်တမ်းတိုး မှတ်တမ်း စာရွက် မြန်မာစာ မူရင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်လုပ်ရပါမယ်။ သက်တမ်းတိုး မှတ်တမ်းက ကညနမှာ ထုတ်ပေးရခက်တယ်လို ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ OPMပေးပြီး ရေးခိုင်းတာဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ဘာကို မှတ်မိရင် လက်ရေးနဲ့ ရေးပြီး၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ရာမှာ သေချာ ရုိုက်ပေးရင် okပါတယ်။
3. Passports (Current one and Olds) မူရင်း
လက်ရှိ passportအပြင် အရင်တုန်းက အဟောင်းတွေပါ ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်မလာခင် လိုင်စင်ရပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၆လနေခဲ့လားဆိုတာကို စစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
5. Driving License မူရင်း
6. Resident Card မူရင်း
အထက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ စုံလင်ပြီဆိုရင် 鮫洲運転免許試験場　ကိုသွားပြီး လျောက်လွှာတင်ရပါမယ်။
လျောက်လွှာက အဲ့ဒီကိုရောက်မှဖြည့်ရပါမယ်။ တနင်္လာနေ့ကနေ သောကြာနေ့ မနက် ၈နာရီခွဲကနေ ညနေ၃နာရီအထိ လျောက်လွှာလက်ခံတယ်ဆိုပေးမယ့် မနက်စောစောသွားပြီး လျောက်တာကောင်းပါတယ်။ စောင့်နေရပြီး ပြီးမယ့်အချိန်က ညနေ ၃နာရီ ၄နာရီလောက်အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်းမစုံခဲ့ဖူးဆိုရင်တော့ နောက်နေ့တစ်ခါထပ်ပြီး လာရပါမယ်။
စာရွက်စာတမ်းစုံလို့ လျောက်လွှာကို လက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့၊ မျက်စိစစ်၊ရေးဖြေအတွက် ငွေသွင်းပြီး၊ မျက်စိစစ်၊ ရေးဖြေဖြေရပါမယ်။ မျက်စိစစ်တာက ပုံမှန် မျက်စိ အမြင်စွမ်းအားကို စစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီး အရောင်(၀ါစိမ်းနီ)ခွဲနိုင်သလား စစ်ပါတယ်။ ရေးဖြေကလည်း မြန်မာလို ဖြေနိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်း ၁၀ ပုဒ် မေးတာဖြစ်ပြီး ၇ပုဒ်မှန်ရင်အောင်တယ်ပြောပါတယ်။ လမ်းညွှန်အမှတ်အသား တွေကို Multiple ရွေးရတာပါ။ ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျပန်နိုင်ငံက လမ်းညွှန်အမှတ်အသားတွေကို လေ့လာမှတ်သားထားမယ်ဆိုရင် ဖြေနိုင်ပါတယ်။
မျက်စိစစ်၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သွားရင် အထက်ပါ စာရွက်စာတမ်းတွေကို စာအိတ်နဲ့ထည့်ပေးပြီး၊ ယာဉ်မောင်းစစ်စာမေးပွဲအတွက် Reservationလုပ်ရပါတယ်။ မိမိခွင့်ယူလို့ရမယ့် နေ့ကို reserve လုပ်ပါ။
ယာဉ်မောင်းစစ်ဖြေမယ့်နေ့မှာ စာရွက်စာတမ်းထည့်ထားတဲ့ စာအိတ်၊ မြန်မာလိုင်စင်၊ Resident Card, Passportကိုယူပြီး၊ ချိန်းထားတဲ့ အချိန် မတိုင်ခင် 府中運転免許試験場ကိုအရောက်သွားရပါမယ်။ သက်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပေးပြီး ယာဉ်မောင်းစစ်အချိန်အထိ စောင့်ပြီး စစ်ဆေးမယ့် ဆရာမလာခင် ဘယ်လိုပုံစံစစ်ဆေးတယ်၊ ဘာတွေကို သတိထားရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြပါတယ်။
စစ်ဆေးမယ့်ဆရာလာတော့၊ ယာဉ်စစ်ကွင်းကိုသွားပြီး ကိုယ့်အလှည့်ကို စောင့်ရပါတယ်။ ယာဉ်မောင်းစစ် ဆရာကထပ်ပြီးတော့ သတိထားရမယ့် အချက်တွေကို ထပ်ရှင်းပြပါတယ်။
ကုိုယ် မောင်းရမယ့် အလှည့်မရောက်ခင် ကိုယ့် အရှေ့ ကလူ ယာဉ်မောင်းစစ်ဆေးတာကို ကိုယ်က အနောက်ခန်းကနေ လိုက်စီးပြီး ကြည့်ရပါတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ရင်လည်း ကုိုယ့် အနောက်ကလူက ကိုယ်မောင်းတဲ့ ကားအနောက်ခန်းကနေ လိုက်စီးပြီး ကြည့်ရပါတယ်။
ကိုယ် ယာဉ်စစ်ဆေးမယ့် အလှည့်ရောက်ရင် နောက်ခန်းကနေဆင်းပြီး
၁) ကားရှေ့ မှ ကားအောက်ကိုကြည့်စစ်ဆေးပြီး၊ လက်ယာရစ်ပတ်စစ်၊ ကားအနောက်မှ ကားအောက်ကိုကြည့်စစ်ဆေးပြီး ယာဉ်မောင်းခန်းဘေးတွင်ရပ်ကာ ရှေ့ နောက်ကြည့်စစ်ပြီး ကားထဲဝင်ထုိုင်ပါ။
၂) ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံဘေးတွင် ထိုင်နေသော ယာဉ်စစ်သူကို Resident Cardနဲ့ reservation cardကိုပေးပါ။
၃) ယာဉ်မောင်းခါးပတ်ပတ်၊ တံခါးလော့ချ၊ ထိုင်ခုံ နေရာအနေအထားကိုပြင်၊ နောက်ကြည့်မှန်ချိန်၊ ဘေးကြည့်မှန်စစ်၊ ဟန်းဘရိတ်ဆွဲထားမထားကြည့်၊ ဂီရာဖရီးဖြစ်မဖြစ်ကြည့်ပြီး အသင့်အနေအထားပြင်ရပါမယ်။
၄) အသင့်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြီး ယာဉ်စစ်သူက စက်နှိုးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလျင် ကလပ်၊ဘရိတ်ကိုနင်းပြီး စက်နှိုးရပါမယ်။
၅) ဟန်းဘရိတ်ကိုချ၊ ဂီယာတစ်ပြောင်း၊ ညာဘက်အချက်ပြမီးပြ၊ ညာဘက်နောက်လှည့်ကြီး ဘေးကင်းရင် စထွက်လို့ရပါပြီ။
၆) စထွက်ပြီး အပြာရောင်တိုင်နှစ်ခုကြားမှာ ခဏရပ်ပြီး၊ ယာဉ်စစ်သူမှ စထွက်ရန်ထပ်ပြောမှ စထွက်ရပါမယ်။
၇) ရပ်ဆိုတဲ့ အမှတ်အသားရောက်ရင်ရပ်ပြီး၊ ယာဉ်မောင်းစစ်က ပြောတဲ့အတိုင်း ကွေ့ ရမယ့် ဘက်ကို အချက်ပြမီးပြပြီး ဘေးကင်းရင် ကွေ့ပြီး မောင်းရပါမယ်။
၈) လမ်းဘေး ဘယ်ဘက်ကို ကပ်ပြီး မောင်းရပါမယ်။
၉) ယာဉ်မျဉ်းပြောင်းလျှင် အချက်ပြမီးပြပြီး ဘေးကင်းကြောင်းကြည့်ပြီး ပြောင်းရပါမယ်။
၁၀) ယာဉ်မောင်းစစ်ပြောတဲ့ နံပတ်လမ်းတွင် အချက်ပြမီးပြပြီးကွေ့ ရပါမယ်။ ကွေ့ ရမှာက ညာဘက်ဆိုရင် ညာဘက်လိမ်းကိုပြောင်းပြီးမှ ကွေ့ ရပါမယ်။ မကွေ့ ခင် အချက်ပြဖို့နဲ့ ဘေးကင်းကြောင်း သေချာကြည့်ဖို့မမေ့ရပါဘူး။
၁၁) ယာဉ်မောင်းစစ်ပြောတဲ့ နံပတ်လမ်းတွေကို ၀င်ပြီး မောင်းပြယုံပါပဲ။ လေးထောင့်ကွက် လမ်းကျဉ်းနဲ့ S ပုံစံလမ်းကျဉ်းကိုလည်း မောင်းပြရပါမယ်။ အဲ့ဒီလမ်းတွေမှာ ဖြည်းဖြည်းမောင်းလို့ရပါတယ်။ လမ်းခုံပေါ်တက်သွားလျင် ဘရိတ်နင်းပြီး အနောက်ကို ပြန်ဆုတ်ပြီး ပြန်မောင်းလို့ရပါတယ်။
၁၂) မီးပွိုင့်တစ်ခုဖြတ်ပြီး၊ မီးဝါမှိတ်တုပ်ကိုလည်း ဖြတ်ရပါတယ်။ လမ်းမကြီးတွေကို ကွေ့ ဝင်ခါနီးရင်လည်း ရပ်ဖို့မမေ့ဖို့နဲ့ ရပ်ရမယ့်နေရာတွေမှာ ရပ်ဖို့မမေ့ဖို့လိုပါတယ်။ မကွေ့ခင် ၃sec ကြိုပြီးပြရပါမယ်။ ဘရိတ်ကို စောင့်မအုပ်ဖို့နဲ့ ဖြည်းဖြည်း၃ချက်နင်းပုံစံနဲ့  ဘရိတ်နင်းသင့်ပါတယ်။
၁၃) နောက်ဆုံးကားရပ်ရမယ့် နေရာရောက်ရင် ဘယ်ဘက်ကို မီးအချက်ပြပြီး ကားကို ရပ်ရပါမယ်။ ကားရပ်ပြီးလျင် ဟန်းဘရိတ်ဆွဲ၊ ဂီယာဖရီးလုပ်ပြီး၊ ကားစက်ပိတ်ရပါမယ်။
၁၄) ယာဉ်မောင်းစစ်သူမှ မိမိယာဉ်မောင်းစစ် အောင်မြင်ကြောင်းပြောပြီး၊ Resident Cardနဲ့ ယာဉ်မောင်းစစ် အောင်မြင်ကြောင်းရေးထားတဲ့ ပန်းရောင်စာရွက်ပေးပါမယ်။ (မအောင်ရင် အဖြူရောင်စာရွက်ရပါမယ်)
၁၅) ပန်းရောင်စာရွက်ကိုယူပြီး ကောင်တာမှာ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပေးပြီး ခဏစောင့်ရပါမယ်။
၁၆) လိုင်စင်ဖို့ ငွေသွင်းပြီး၊ passwordသွင်းပြီး၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ရပါမယ်။
၁၇) နောက်ထပ် နာရီဝက်လောက်နေရင် လိုင်စင်ရပါပြီ။
၁၈) လိုင်စင်ယူပြီး စက်မှာ လိုင်စင်တင်ပြီး passwordရှုိုက်ကာ မိမိအချက်အလက်များမှန်မမှန်စစ်ဆေးပြီး၊ ပြီးပါပြီ။
ယာဉ်မောင်းစစ်ကြာချိန်မှာ နေ့လည် ၁၂နာရီမှ ၅နာရီအထိကြာတာဖြစ်လို့ နေ့တ၀က်လောက်တော့ အချိန်ကုန်သွားတာပါပဲ။
အဲဒီနှစ်က ကျွန်တော် ၅တန်းစားမေးပွဲကြီးပြီးလို့ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်၊ အောင်ဆန်းအားကစားကွင်းကို အားကစားသင်တန်း (ကရာတေး) သွားတက်ဖို့ ဘတ်စ်ကားနဲ့ အသွား ကားပေါ်မှာ ရင်းနှီးခဲ့ရသူကတော့ ကိုလင်း လို့ခေါ်တဲ့ အစ်ကို တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ လူရည်လည်သော၊ အသားအရည် ကောင်းမွန်သော၊ ခင်မင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော၊ စကားပြောကောင်းသော အစ်ကို တစ်ဦးဖြစ်လို့ အလွန်ပင် ခင်မင်ရင်းနှီးသွားခဲ့ပါသည်။ သူသည် ကျွန်တော်တို့ အိမ်ပြောင်းလာသော လမ်းတွင်နေထိုင်သော တစ်လမ်းတည်းသား အိမ်နီးနားချင်း မိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းလည်း သိလိုက်ရပါသည်။
အစ်ကိုလို ခင်ဖို့ကောင်းသော ကိုလင်းသည် စကားအပြောအဆို အလွန်ပင် နူးညံ့သူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တုို့ ပထမဆုံးခင်မင် ရင်းနှီးပြီး၊ အောင်ဆန်းကွင်းက အပြန်၊ ကျွန်တော် အိမ်သို့ အ၀င် လမ်းခွဲစဉ်တွင်၊ “ညီလေး ဒီနေ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်”၊ လို့ ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ဆက်ပါသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် ငြိမ်းချမ်းသော စိတ်ခံစားချက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်းပဲ အစ်ကိုလို ပြောတတ်ချင်ခဲ့ပါသည်။ မိတ်ဆွေများကို ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုသော စကားကို ပြောဖြစ်ရန် ကြိုးစားပါတော့သည်။ အခြေအနေပေးတိုင်း၊ စိတ်ထဲတွင် ကျေးဇူးတင်ရှိတိုင်း ကျွန်တော့်နှုတ်မှ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုသော စကားကို အသေးအဖွဲလေးမှ အစ ပြောဖြစ်ရန် ကျွန်တော် ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။
လူအချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကျေးဇူးတင်ခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းခြင်း၏ အခြေအနှစ်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ယူဆပါသည်။ အသိမိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူးတင်သော အခါတွင်၊ နှုတ်မှထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းသည် လူ့ယဉ်ကျေးမှုအဆင့် မြင့်မားသော အပြုအမူ တစ်ခုဟု ကျွန်တော်ယူဆမိပါသည်။ ထို့အပြင် အသိမိတ်ဆွေများက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာသော ကျေးဇူးတင်မှုများကိုလည်း လေးနက်စွာ လက်ခံပေးခြင်းသည်လည်း ထိုနည်း၎င်းပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆင်ခြင်မိပါသည်။
Novemberလသည် အနောက်နိုင်ငံများတွင် Thanksgiving Dayဟုဆိုကာ ရုံးပိတ်ရက်သက်မှတ်ပြီး ဆင်နွှဲကြသော လလည်းဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်တော့ 勤労感謝の日ဟုဆိုကာ ရုံးပိတ်ရက် သက်မှတ်ထားကြပါသည်။ နှစ်တစ်နှစ်ကို ဖြတ်ကျော်လာပြီး၊ ပြီးဆုံးခဲ့သော နှစ်တစ်နှစ်စာအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာမှ ပေါက်ဖွားလာသော နေ့ရက်များဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
လူ့လောကထဲတွင် နေထိုင်နေသောသူများ ဖြစ်သည့် အလျောက် အပြန်အလှန် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ ကျေးဇူးတရား ရှိကြသည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ်သည် ဟုထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။ လူအခြင်းခြင်းမှပင်မဟုတ်၊ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိနေကြသော သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ အရာဝတ္ထုများ၊ တိရိ စ္ဆာန်များ၊ စသဖြင့် အရာအားလုံးတို့သည် အပြန်အလှန် ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ်၊ ကျေးဇူးတရားများ အပြန်အလှန်ရှိကြသည် ဖြစ်သည်ဟု ဆင်ခြင်မိပါသည်။
တိုတောင်းလှသော လူ့သက်တမ်းပေါ်တွင် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ထားရှိခဲ့ကြသော ကျေးဇူးတရားများကို ဆင်ခြင် အောက်မေ့ရင်း၊ ကျန်ရှိနေသေးသော လူ့သက်တမ်းကို ချစ်ခြင်းတရားများ၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းတရားများကို ဖော်ကျူးပေးနိုင်မယ့် ကျေးဇူးတရားများကို အခြင်းခြင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆို အသိအမှတ်ပြုရင်း၊ ငြိမ်းအေးသော ဘ၀ပိုင်ရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် ကြိုးစားတည်ဆောက်သွားမည်ဟု တွေးတော ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်မိပါသည်။
2014 Nov 24, 4:56 AM
Leaveacomment	| posted in ကျွန်တော်နှင့်.., အတွေးအခေါ်
Trip to Bagan (ပုဂံသို့ တစ်ခေါက်) -၁
ဒီတစ်ခါ ရန်ကုန်ပြန်ရင် မေမေ ပုဂံသွားမည်ဟု စဉ်းစားထားသည့်အတိုင်း ပုဂံကို သွားဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ရယ်၊ မေမေရယ်၊ တီတီကြီးရယ် သုံးယောက်သွားဖြစ်ခဲ့သည်။ အဝေးပြေးကားဂိတ်ကို ဖေဖေလိုက်ပို့သည်။ ရန်ကုန်မှ ပုဂံကိုထွက်သော အဝေးပြေးကားသည် ညနေခင်းတွင် စတင်ထွက်ခွာပါသည်။ ရန်ကုန်အထွက် နေ၀င်ဆည်းဆာ မြင်ကွင်းဖြစ်သည့် ပန်းဆီရောင်သွေးနေသော မိုးကောင်းကင်၏ ရှုမျှော်ခင်းကို ငေးမော ခံစားရင်းဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ ကို နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာ လာခဲ့ပါသည်။
အချိန်က ညနေ ၉ နာရီဖြစ်သည်။
အဝေးပြေးလမ်းပေါ်က နားနေစခန်းတစ်ခုကို ရောက်တော့ အပေ့ါအပါးသွား၊ လမ်းဆင်းလျောက်ကြသည်။ အဝေးပြေးလမ်း နားနေစခန်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တွေ့ ရသော နားနေစခန်းများကဲ့သို့ပင် အဆင့်မြင့်လှပါသည်။ ကွာခြားသည်မှာ စားသောက်ဆိုင်တိုင်းတွင် အိမ်သာရှိခြင်းနှင့် လမ်းဘေးဈေးသည်များ ရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကားကြီးများရပ်နားရန်နေရာ ခွဲခြားထားမှု၊ ကားငယ်များရပ်ရန်နေရာခွဲခြားထားမှု၊ ကားအ၀င်အထွက် ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ထားခြင်းများသည် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ပုဂံကိုရောက်တော့ မနက်၈နာရီခန့် ဖြစ်သည်။ ဖေဖေ စီစဉ်ပေးထားသော မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ တည်းခိုခန်းတွင် Check in လုပ်ကာ၊ စီစဉ်ပေးထားသော မြင်းလှည်းဖြင့် မျိုးမျိုး ထမင်းဆီဆမ်း ဆိုင်သို့ ချီတက်ပြီး၊ မနက်စာကို စားကြပါသည်။ အချိန်က မနက် ၉ နာရီဖြစ်သည်။
မနက်ခင်းစာကို စားသောက်ပြီး၊ မြင်းလှည်းလေးကို စီးပြီး၊ ပုဂံမြို့ ကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်း စတင်ပါတော့သည်။ ပုဂံမြို့ ကို ရောက်ရောက်ခြင်း ခံစားရသည်က မျှော်လင့်ထားသော အပူပို်င်းဒေသ၏ ပူပြင်းမည်ဟူသော ခံစားချက်မျိုး မဖြစ်ပေါ်ပါပဲ၊ စိမ်းလန်းစိုပြေသော သစ်ပင်ကြီးများနှင့် မျက်စိတဆုံး မြင်တွေ့ နိုင်သော ဘုရားစေတီပုထိုးများကို ကြည့်ရှုရင်း အေးချမ်းသော၊ သာယာသော၊ စိုပြေသော၊ စသဖြင့် ကောင်းမွန်မြတ်သော ခံစားချက်ပေါင်းစုံဖြင့် အလွန်ပင် ငြိမ်းချမ်းမှုပီတိကို ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော် ပုဂံကို ချစ်မိသွားပါသည်။
ပထမဦးဆုံးသွားဖြစ်တဲ့ ဘုရားကတော့ အလိုတော်ပြည့်ဘုရား ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ်ကျော်က ရန်ကုန်အိမ်တွင် အလိုပြည့် အုတ်ခွပ်ဘုရားတစ်ဆူကို ဖေဖေပင့်လာပေးချိန်ကစပြီး စိတ်ဝင်တစားဖြစ်ခဲ့ရပါသော အလိုတော်ပြည့်ဘုရားဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားအတွင်းခန်းတွင် လေအေးပေးစက်များကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ မေမေရဲ့  ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ကန်တော့နေသော ပုံရိပ်များကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး၊ ကျွန်တော်ကတော့ ဘုရားရင်ပြင်ဘေးက ပတောက်ပင်ကြီးအောက်က ခုံတန်းလျားပေါ်တွင် ထုိုင်ရင်း ပုဂံ၏ လေပြေကို ရှုရှိုက်ရင်း နားနေမိပါသည်။ အချိန်က မနက် ၁၀နာရီဖြစ်သည်။
ဒုတိယသွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘုရားကတော့ ထီးလိုမင်းလို ဘုရားဖြစ်ပါသည်။ ထုထည်ထူသော နံရံများဖြင့် လက်မှုလက်ရာပြောင်မြောက်လှပါသော စေတီတော်ကို ကြည့်ရှုရသည်မှာ ကြည်နူးစရာပင်ဖြစ်သည်။ ရှေးမြန်မာများ၏ နည်းပညာ ကြွယ်ဝမှုကိုလည်း အံ့သြမိပါသည်။ စေတီဘေးမှာရှိသော ခေါင်းလောင်း၊ အရုပ်ဆိုင်လေးတွင် တင်ထားသော လက်မှုလက်ရာများသည်လည်း အနုပညာမြောက်လှပါသည်။
နောက်ထပ်ဘုရားတွေလည်း တစ်စူပြီးတစ်စူ သွားပြီး နေ့လည်စာကိုတော့ ပုဂံမြို့ က အ၀စား ထမင်းဆိုင်မှာ စားဖြစ်သည်။ ဟင်းပွဲပေါင်းများစွာဖြင့် စားကောင်းသော နေ့လည်စာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ နေ့လည်စာ စားပြီးတော့ တစ်ခါထပ်ပြီး ဘုရားများကို လှည့်ပတ် ဖူးမြော်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ညနေခင်း တည်းခိုခန်းပြန်ပြီး အိပ်တော့ အတော်ပင်အိပ်လို့ကောင်းပါသည်။
Leaveacomment	| posted in သွားပါများခရီးရောက်
Pepper Robot မိတ်ဆက်
ဂျပန်နိုင်ငံက Softbank Group မှနေပြီး၊ ၂၀၁၅ခုနှစ် ၂လပိုင်းတွင် Pepper ဟု အမည်ရသော Robot ကို ယန်းငွေ ၂သိန်းထက်နည်းသော ဈေးနှုန်းဖြင့် သာမန်စားသုံးသူများကို ရောင်းချပေးမည်ဟု ကြေငြာထားပါသည်။ Robotကို သာမန် စားသုံးသူများကို ရောင်းချပေးခြင်းသည် ပထမဦးဆုံး ဖြစ်မည်ဟုထင်ပါသည်။ လူတို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀တွင် Robotများ၏ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းများ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာတော့မည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
Pepper Robot၏ မူလအစသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ALDEBARAN ဟု အမည်တွင်သော Companyကို Softbank Group မှ ၀ယ်ယူပြီး၊ Pepperဟုအမည်တွင်သော လူသားတို့ဖြင့် အတူနေနိုင်မည့် စက်ရုပ်ကို တီထွင်စေခဲ့ပါသည်။ Pepperစက်ရုပ်သည် လူသားတို့ဖြင့် အတူနေထုိုင်နိုင်မည့် စက်ရုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် သူသည် အိမ်သန့်ရှင်းရေးလည်း လုပ်မပေးနိုင်၊ ဟင်းလျာများလည်း မချက်ပြုတ်နို်င် Super Powerများလည်း မရှိပါ။ Pepperစက်ရုပ်သည် လူသားတို့ဖြင့် စကားပြောပေးနိုင်၊ နားလည်ပေးနိုင်၊ ခံစားချက်ကို လိုက်ပြီး တုန့်ပြန်ပေး၊ နေထိုင်ပေးနိုင်မည့် စက်ရုပ်အမျိုးအစားပင်ဖြစ်သည်။
Pepperသည် စက်ရုပ်ဟုဆိုသော်လည်း၊ အသံ၊ ထိတွေ့ မှု၊ စိတ်ခံစားမှု များကိုအခြေခံပြီး လူသားတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်သော စက်ရုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ သင့်၏ရယ်မောသံသည် Pepperကို သင်သည် စိတ်ပျော်ရွှင်နေကြောင့် သိရှိစေပြီး၊ သင့်မျက်နှာအနေအထား မကောင်းလျင် Pepperကသင်စိတ်မကောင်း မပျော်ရွှင်ကြောင်း သိရှိနေမည် ဖြစ်သည်။
Pepperသည် လူသားတို့၏ မျက်နှာအနေအထားကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်း၊ လူသားတို့၏ ကိုယ်လက်ဟန်ဖြင့် ပြောဆိုမှု၊ လူသားတို့၏ စကားပြောဆိုမှုတို့ကို သိရှိနားလည်ပြီး တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
Pepperသည်လူသားတို့ဖြင့် ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် သိရှိနားလည်မှုများတိုးပွားလာကာ အနာဂတ်တွင် ကြင်နာတတ်သော၊ လူသားတို့အပေါ်နားလည်နိုင်စွမ်းအပြည့်ရှိသော စက်ရုပ်ထက်သာလွန်သော လူသားတို့၏ မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ဦး၏ နေရာသို့ ၀င်ရောက်နေရာယူလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ Softbank Mobile ဆိုင်များတွင် ယခုသင်သွားရောက် ပြောဆို ဆက်သွယ်နိုင်သော Pepperသည် အနာဂတ်၏ အစပထမ ခြေလှမ်း တစ်လှမ်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ စက်ရုပ်လေး Pepperနဲ့အတူ နောင် အနာဂတ်သည် မည်သို့ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာမည်ကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုသွားရမည်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ Pepperရဲ့  ညီအစ်ကိုတွေဖြစ်တဲ့ NAO, Romeo စက်ရုပ်လေးတွေလည်း အနာဂတ် လူသား ကမ္ဘာတွင် ပါဝင်လာမည်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
Meanwhile in Tokyo…
Just never think like that,
I will fall in that kind of awkward conditions
I’ve already understood that
there are always new experiences waiting ahead
But I just never think that
this kind of awkward moments ever happen to me
Bleeding in heart,
this might be some kind of natural matter or what
everything happens with its own reasons
this kind of risks ever happen to me
As I’d mentioned before
in my some kind of previous posts
This too gonna flying away
But just in this meanwhile,
make the breath to stop and die peacefully…..
အချစ်ဆိုတာ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ခြင်း ဆိုတဲ့
အချစ်ဆိုတာ လူသားတို့ရဲ အဆင့်မြင့်သော စိတ်ခံစားချက်
စနစ်တကျ တည်ဆောက်ယူရပါသော စနစ်တစ်ခု။
ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းတစ်ခုထက်မပိုသော ပိုင်ဆိုင်၊ စွန့်လွှတ်ခြင်း
အရင်းရှင်စနစ် ပစ္စည်းမဲ့စနစ်တို့ အချစ်ပေါ်သို့ မသက်ရောက်စေသား။
ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ ပူဆွေးခြင်း၊ စိတ်ကျေနပ်ခြင်း
အခြေခံ စိတ်ခံစားချက်များထက် သာလွန်မြင့်မားပါသော အစဉ်။
ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်း၊ မမြဲသော အရာများ တည်ရှိရာ လောက
အချစ်သည်လည်း ဖြစ်၊ ပျက် မမြဲ အစဉ် ဖြစ်တည်နေသော အနုပညာ။
အချစ်သံစဉ် တစ်ပုဒ် သီဆို ကျူးရင့်၊ နူးညံမှုစိတ် အစဉ်အတွက်
ချစ်ခင်ခြင်း ထို ခံစားချက်သည် နှလုံးသား အဟာရ သက်သက်သာ။
2014, Jun 29 (Sunday)
ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်သော အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများ၊ ပြောင်းလဲသင့်ပါသလား။
ဒီနေ့ ရုံးအနားယူရက်၊ စာအုပ် အချို့ ၏ စာမျက်နှာများကို ဖတ်ရှုဖြစ်သည်။ ဆရာဆန်းထွန်းသောင်ရေးသော စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှ (အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှု) ဟုဆိုသော ဒဿနဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်မိသည်။ စာအဖွင့်တွင် “အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုမှု၊ သို့မဟုတ် အဓိပ္ဗာယ် ကောက်ယူမှုသည် လုပ်ငန်း ကိစ္စရပ်များတွင် အရေးကြီးပါသည်။ မှားယွင်းစွာ အဓိပ္ဗာယ် ဖွင့်ဆိုမှုကြောင့် အချည်းနှီး ဖြစ်ရပ်များ ကြုံတွေ့ ရတတ်ပါသည်။” ဟု ရေးသားတင်ပြထားပါသည်။ ဥပမာ တစ်ခုအနေဖြင့် တောင်ပေါ်ဒေသ အလည်သွားသူ တစ်ဦး ချမ်းအေးသောကြောင့် ရေမချိုးချင် ဖြစ်နေသည်ကို “ပထမ တစ်ခွက်သာ အေးတာပါ။ နောက်တစ်ခွက်က မအေးပါဘူး” ဆိုပြီး ရေချိုးစေသောအခါ ထိုလူက ပထမ တစ်ခွက်ကို သွန်ပစ်ပြီး နောက်တစ်ခွက်မှ စချိုးသော်လည်း “နောက်တစ်ခွက်လည်း အေးတာပဲဗျ”ဟုဆိုလေသည်။ လက်တွေ့ ကျကျ စဉ်းစားလုပ်ကိုင်တတ်သူဟု မိမိကိုယ်ကို ယူဆနေသူများကို ဆင်ခြင်သတိပြုမိစေရန် ရည်ညွှန်းသောပုံပြင် တစ်ပုဒ်ဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားပါသည်။
တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး၊ အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဆက်ဆံကြရာတွင် တစ်ဦး၏ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို တစ်ဦးက မှန်ကန်စွာ နားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၄င်းတို့ကို လေ့လာပြီးမှ လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ မှန်ပါသည်။ တစ်ခု သုံးသပ်ချင်သည်က ထိုကဲ့သို့ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများကို အများနားလည်အောင်၊ မိမိဖြင့် ပြောဆို ဆက်ဆံမည့်သူ နားလည်အောင် တင်ပြနိုင်စွမ်း ရှိမှုသည် ပိုပြီး အရေးပါကြောင်း၊ မိမိ၏ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှု တင်ပြပုံ အရည်အချင်းနည်းပါးမှုကြောင့် တစ်ဖက်လူမှ မှန်ကန်စွာ နားမလည်နိုင်သော အခြေအနေတစ်ခုကို ရှောင်လွှဲ နိုင်သော ပြီးပြည့်စုံသော အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှု တစ်ခု ဖြစ်သင့်သည်။
သားအဖနှစ်ဦး၏ “ကျောင်း”၏အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုချက် အလွဲကို ဖော်ပြထားသည်။ ဖခင်က မိမိသည် တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာဖြစ်သောကြောင့် မိမိကျောင်းကို ဆိုလိုသည်မှတ်ယူပြီး၊ သားသည်လည်း ကျောင်းသားဖြစ်သောကြောင့် မိမိကျောင်းကို ဆိုလိုသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ သားအဖနှစ်ဦး ချိန်းဆိုသော ကျောင်းတွင်တွေ့ မည်ဟု ဆိုကြရတွင် မိမိကျောင်းတွင် မိမိ စောင့်မျှော်ရင်း လွဲခဲ့ရသည်ကို တင်ပြထားသည်။
ဒီနေရာတွင် ကျွန်တော် တင်ပြချင်သည်က လူတစ်ဦး၊ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုချင်းတွင် အဓိပ္ဗာယ် ဖွင့်ဆိုမှုများ တစ်မျိုးတစ်ဘာသာ ရှိကြသည်မှာ အမှန်ပင် ရှောင်လွှဲမရသော အခြေအနေဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့ကို နားလည် သဘောပေါက်ရန် အရေးပါပါသည်။ သို့သော် အခြားသူ ဖွင့်ဆိုသော အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖတ်ရှုနားလည်နိုင်သည် ဖြစ်နိုင်ပါသော်လည်း၊ မိမိ၏ အမြင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင် မှားယွင်းကောက်ယူမှုများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကျွန်တော် လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်ထဲတွင်လည်း တစ်ဦး၏ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို နားလည်မှုလွဲပြီး ပရောဂျက်များတွင် အခက်အခဲများရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ သုံးသပ်ချက်များအရ ၄င်းတို့သည် ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး၏ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု နည်းပါးသောကြောင့်သာ လွဲမှားသော အဓိပ္ဗာယ် ဖွင့်ဆိုမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ ရသည်ဟု ထင်ပါသည်။
ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟု ဆိုလိုရာတွင် တစ်ဖက်လူမှ ဆိုလိုအပ်သော အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို မိမိနားလည်လုိုက်သော ဖွင့်ဆိုမှုဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ညှိနှိုင်းသင့်ကြောင်းကို ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့တွေတွင် ဖြစ်တတ်ကြသည်က တစ်ဖက်လူ၏ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို မိမိနားလည်မှုဖြင့် အသေအချာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်မှု မယူပါပဲ၊ မိမိအထင်၊ မိမိအမြင်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်မှုများကို မပြုလုပ်မီ၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကာ နားလည်သဘောပေါက်စေသင့်သည်။ ထုို့နောက်မှသာ လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ကိုင်ပါက အမှားနည်း၊ အငြင်းပွားမှု နည်းပါးပါပေမည်။
စာရေးသူဆက်လက်တင်ပြထားသည်မှာ “လူတို့သည် မိမိသက်မှတ်ဖွင့်ဆိုထားသော အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို မိမိကုိုယ်တိုင် လိုက်နာသင့်ပုံကို “အချစ်ကို ပေးဆပ်ခြင်း”ဟု မိမိက အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုပါက မိမိချစ်သူကို ပေးဆပ်သင့်သည်၊ “အချစ်ကို မြတ်နိုးခြင်း”ဟု အဓိပ္ဗာယ် ဖွင့်ဆိုပါက မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသင့်သည်။ မိမိ၏ အဓိပ္ဗာယ် သက်မှတ် ဖွင့်ဆိုမှုနှင့် လက်တွေ့  ဆောင်ရွက်မှု ရှေ့ နောက်ညီသင့်သည်ဟု တင်ပြထားပါသည်။ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှု မှန်ကန်ရန်လိုသကဲ့သို့ မိမိမှန်ကန်စွာ ဖွင့်ဆိုမှုအတိုင်း လက်တွေ့  ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်း အရေးကြီးကြောင်း၊ ထို့မှသာ လုပ်ငန်းကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှု လွဲမှားလျှင် အချည်းနှီးဖြစ်တတ်ကြောင်း၊ လက်တွေ့ မလိုက်နာပါက ရှေ့ နောက်မညီဖြစ်ခြင်း၊ အများ၏ စိတ်ချ ယုံကြည်မှု(Trust)မရှိခြင်းများ ကြုံတွေ့ နိုင်ကြောင်းနိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် တင်ပြထားပါသည်။
ဖြည့်စွတ်စဉ်းစား မိသည်မှာ မိမိသက်မှတ်ဖွင့်ဆိုသော အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုသည် မှားယွင်းနိုင်သည်။ မှားယွင်းသော အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းသည် လွဲမှားသော အလုပ်များကိုသာ လုပ်ကိုင်မိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများသည် မှန်ကန်ရန်လိုသကဲ့သို့ ၊ မှားယွင်းနေသော အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ပြောင်းလဲရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲမှုသည် အပြောလွယ်ပေသော်လည်း အလုပ်မလွယ်လှပေ။ သို့သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ မှားယွင်းစွာ သက်မှတ်မိသော မိမိ၏ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ပြောင်းလဲပစ်ရန်သည်ကား လွန်စွာ သတ္တိမွေး၊ သတိထားပြီး လုပ်ဆောင်သင့်သော အရာပင်ဖြစ်သည်။
အဆုံးသပ်အနေဖြင့် အဓိပ္ဗယ်ဖွင့်ဆိုမှုများသည် တစ်ဦး၏နားလည်မှုနှင့် နောက်တစ်ဦး၏နားလည်မှု ကွဲပြားမှုများ ရှိသည်မှာ ထူးဆန်းသော ကိစ္စရပ်တစ်ခု မဟုတ်ချေ။ မိမိ၏ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို အခြားသူနားလည်အောင်၊ အခြားသူ၏ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို မိမိနားလည်အောင် အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည်သာ နေ့စဉ်လူ့ဘ၀ လုပ်ငန်းကိစ္စများကို ချောမွေ့ စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပေမည်။ လွဲမှားသော အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုတစ်ခုကို ပြုမူလုပ်ဆောင်မိပါက ထိုအဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပစ်ရန် ၀န်မလေးသင့်ပဲ အလျှင်အမြန် ပြောင်းလဲသင့်ပေသည်။ ထိုသို့ ပြောင်းလဲမှုကို နှောင့်နှေးနေပါက မိမိ၏ လုပ်ဆောင်မှုများသည် ကြီးမားသော လွဲမှားမှုများနှင့်ကြုံတွေ့ ကာ ပန်းတိုင်လွဲမှားတတ်ပေသည်။ အဓိပ္ဗာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး၊ ပြောင်းလဲသင့်သည်များကို ပြောင်းလဲနိုင်ရမည်ဟု စဉ်းစားဆင်ခြင်မိပါသည်။
2014 Jun 26 12:34 AM
ခွဲခွာဖို့ နှုတ်ဆက်ကြရင်း ငြီးတွားတေးသံ
၂၀၁၄ မေလ ၃၁
Leaveacomment	| posted in ကဗျာ, အချစ်
ဒီနေ့ ရုံးကို ခွင့်ယူပြီး အိမ်မှာပဲနေဖြစ်တယ်။ ရန်ကုန်က Facebookမိတ်ဆွေတစ်ဦးက လူကြုံထည့်ပေးလိုက်တဲ့ တရားစာအုပ်သုံးအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒေါက်တာ အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ ဟောတဲ့တရား ဓမ္မတွေကို ပြန်ရေးထားတဲ့ စာအုပ် ၃အုပ်ပါ။
ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တာက နှစ်ဦးမေတ္တာ လူတိုင်းမှာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ။ ဆရာတော်က ၂၀၁၂ နှစ်ကူးတဲ့ အချိန်တုန်းက ဟောပြောခဲ့တဲ့ တရား ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ နှစ်သစ်အမှာ စကားတစ်ခုအနေနဲ့ မေတ္တာတရားအကြောင်းကို ဟောပြောထားပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး လူသားတွေရဲ့  လိုအင်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို တင်ပြထားပါတယ်။ လူတွေရဲ့  ပျော်ရွှင်မှုလိုလားမှု၊ ဆင်းရဲဒုက္ခကို မလိုလားမှုအကြောင်းနဲ့ စတင်ထားပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပြောသမျှ၊ ဆိုသမျှ၊ စိတ်ကူသမျှတွေကို မေတ္တာနဲ့ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ မေတ္တာရဲ့  အဓိပ္ဗါယ်ကို မိတ်ဆွေတို့ရဲ့  စိတ်ဓာတ်၊ မိတ်ဆွေရဲ့  စိတ်နေသဘောထား ဟု ပေါ်လွင်အောင် ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ခင်မင်သူကို ကြီးပွားတိုးတက်စေချင်မှု၊ ပျော်ရွှင်စေလိုမှု၊ စတဲ့ မိတ်ဆွေ စိတ်ဓာတ်၊ စိတ်နေသဘောထားကို အကန့်အသက်မရှိ လူသားအားလုံးအပေါ်မှာ ထားနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
၀န်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုပဲ လုပ်လုပ်၊ မိမိလုပ်တဲ့ အလုပ်ကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ၊ မိတ်ဆွေတွေကို ကူညီပေးနေရတယ်လို့ တွေးတော၊ ပြောဆို၊ လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်လည်းရ ၀မ်းလည်းဝတဲ့ အကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆို ရေးသားထာပါတယ်။ သူတစ်ဖက်သားရဲ့  အကျိုးကျေးဇူးကို အာရုံစိုက်ပြီး ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်း အရယူတတ်ဖို့ အသိပေးထားပါသေးတယ်။
ပြီးတော့ ရှေ့ တန်းတင်လေ့ရှိတဲ့ မာနတရားရဲ့  ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း ပေါ်လွင်အောင်လို့ ကောင်းတဲ့မာန၊ မကောင်းတဲ့ မာန၊ မှီဝဲထိုက်တဲ့ မာန၊ မမှီဝဲထိုက်တဲ့ မာနလို့ ခွဲခြားပြီး ရှင်းပြထားတယ်။ မိမိကုို ကြီးပွားတိုးတက်စေသော မာန၊ နှင့် မိမိကို ပြဿနာဖြစ်ပွားစေ၊ အကုသိုလ်တိုးပွားစေသော မာန၊ စသဖြင့် ခွဲခြား ဟောကြားထားတယ်။
မေတ္တာနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ ခန္တီတရားကိုလည်း ရှင်းလင်းထားပါသေးတယ်။ မိမိစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သော စွမ်းရည်သတ္တိ ကို သည်းခံခြင်း ခန္တီတရားအဖြစ် ရှင်းလင်းထားပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ လာတဲ့ အခါမှာလည်း တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိတဲ့ စိတ်စွမ်းအင်ကို ခန္တီဟုခေါ်ကြောင်း ပြောပြထားတယ်။ မိမိစိတ်ကို တည်ငြိမ်တဲ့ အခြေမှာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်းလို့ ရှင်းလင်းထားပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ လူတစ်ယောက်က မိမိကို ပြောဆို၊ ပြုမူလာတဲ့ အကြောင်းကို ကြုံတွေလာတဲ့ အချိန်မှာ တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိမှု၊ မိမိရဲ့  မူလစိတ်အခြေအနေမှာပဲ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုကို ခန္တီလို့ ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပေက္ခာ အကြောင်းကိုလည်း နားလည်လွယ်အောင် ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။ မိမိပြုမူမှုကို တစ်ဖက်လူက တုန့်ပြန်မှုမရှိရင် မကျေမနပ်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ မိမိပြုမူမှုကိုသာ အလေးအနက်ထားပြီးလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း၊ အသိအမှတ်ပြုမှု၊ မပြုမှုသည် သူ့ကိစ္စပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ တုန့်ပြန်မှုကို မျှော်လင့်ခြင်းမရှိပဲ၊ ပြုမူလုပ်ဆောင်ပေးမှုကို ဥပေက္ခာဟုခေါ်ကြောင်း ရှင်းပြထားပါတယ်။
ရောဂါဝေဒနာ ခံစားရတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်သာနာစေ စိတ်မနာစေဖို့ရန်လည်း ဆုံးမသွန်သင်ထားပါသေးတယ်။ စိတ်ရဲ့ ရောဂါလို့ ခေါ်တွင်တဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန၊ က္ကဿာ၊ မစ္ဆရိယ စတာတွေက လူကို အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်စေ၊ ညစ်နွမ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နောက်ဆုံး အနေနဲ့ မိမိရဲ့  နေစဉ်ဘ၀ကို မှန်မှန်ကန်ကန် စဉ်းစား ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးလောကထဲမှာ လောကဓံနဲ့ကြုံတိုင်း မေတ္တာ၊ ခန္တီ၊ ဥပေက္ခာ တရားသုံးပါးကို လက်ကိုင်ထား ကျင့်သုံးနိုင်ရင် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေက မတောင်းပဲနဲ့ ရောက်ရှိလာမှာပါ။
၂၀၁၄ မေလ ၂၆ ညနေ ၈ နာရီ
မရွေ့ လျားသော ရွေ့လျားခြင်းများ
မရွေ့ လျားနိုင်သော အရာသည် မရှိသကဲ့သို့
မတုန်လှုပ်သော စိတ်သည် မရှိပြီ။
မရွေ့ လျားသော အရာသည် ရှိသကဲ့သို့
တွန်းကန်အားကြောင့် ရွေ့ လျားလေသည်။
တွန်းကန်အားကြောင့် မရွေ့ လျားသော
အရာဝတ္ထုသည် ပိုင်ဆိုင်သော ထုထည်ကို
အခြေပြုပြီး တွန်းကန်အားကို အံတုသကဲ့သို့
စိတ်သည်လည်း ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု ထုထည်ကို
အခြေပြုပြီး အာရုံကို အံတုလေသည်။
တွန်းကန်အားကြောင့် မရွေ့ လျားသကဲ့သို့
ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု အားကောင်းသော စိတ်သည်
အာရုံကြောင့် တုန်လှုပ်မှု မဖြစ်နိုင်ပါပေသတည်း။
:: ကောင်းမြတ်ထွန်း (၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၃)
I have been happy.
I have been sad.
But every time I choose to be happy.
I have been fresh.
But every time I choose to be fresh.
I have been delighted.
I have been disappointed.
But every time I choose to be delighted.
But every time I choose to be encouraged.
I have been peaceful.
I have been violent.
But every time I choose to be peaceful.
Yes, I choose my way of life.
To be myself and to be true one.
Together to the Next.
:: Kaung Myat Tun (Feb 2, 2014)
အမှားများ မလုပ်မိရန် ကြံရွယ်ရင်း
ရှေ့ တိုးလုိုက် နောက်ဆုတ်လုိုက်
Leaveacomment	| posted in ကဗျာ
ယုန်တစ်ကောင်၏ ပုံပြင် : ၁
အပြုံးအချို့  ဖြင့်
လမ်းပေါင်းများစွာ လျောက်မည့်သူ တစ်ဦး။
နားမလည်သော သူတစ်ဦး။ ။
:: Kaung Myat Tun ::
မိမိ ပိုင်ဆိုင်ရပါသော ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားပါသည်။
ကုိုယ့်မှာ ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တာက အကန့်အသတ်ရှိတော့
လက်ခံမိလိုက်တဲ့ ပေးအပ်လာတဲ့ အရာတွေက
ရှိနေပြီးသား ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာတွေရဲ့ နေရာကို
တစ်ပါးသူပေးသော ကိုယ်မကျွမ်းဝင်တဲ့ အရာတွေက
ကိုယ် အကျွမ်းဝင်သော ကုိုယ့်မူလ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို
ပြန်လည် နေရာချထားပေးဖို့ အတွက်က
လက်ခံလိုက်မိပါသော တစ်ပါးသူပေးသော အရာတွေကို
ပြန်လည် အပ်နှင်းရန်နှင့် နောင်များတွင်လည်း
ထို့ထက်ပိုပြီး အရေးကြီးသည်မှာ တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာ
သွားသော ကိုယ့်မူလ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြန်လည်
Leaveacomment	| posted in အတွေးအခေါ်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးတော့မည်။
2013 will be ended soon.
မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်းများနှင့် ခရီးသွားခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးသွားတော့မည် ဖြစ်ပေမယ့် နောက်နှစ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထဲတွင်လည်း ထိုမိတ်ဆွေကောင်းများနှင့်အတူ ခရီးဆက်ပါဦးမည်။ အတူခရီးသွားဖို့သင့်တော်တဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ ခရီးတိုတွေ ခရီးရှည်တွေ ၂၀၁၃ မှာ ခရီးထွက်နိုင်ခဲ့သလို ၂၀၁၄ ကိုလည်း ဖြတ်သန်းချင်ပါတယ်။
I’ll travel 2014 with you all my friends.
ကျွန်တော့်ဘဝက လူအများသက်မှတ်ကြတဲ့ ကြီးကျယ်ခန်းနားမှုတွေ မရှိသလောက်ရှားပေမယ့် မိတ်ဆွေကောင်းတွေအတွက်တော့ ပျော်ရွှင်စွာ နေလောက်ပါတယ်။
I have many spaces for good friends.
ပျံသန်းလိုက်တော့လည်း လေဟုန်စီးနိုင်တာပေါ့။ အမြဲမှန်တယ်ဆိုတဲ့ လူရယ်လို့ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဂျာမန် ဒဿနပညာရှင်ကြီး ဟေဂယ်က ‘အမှားကို ကြောက် ခြင်းဟာ တိုးတက်မှုရဲ့ သေခြင်းပဲ’ Panic of error is the death of progress. လို့ပြောဖူးတယ်။ ၂၀၁၃ မှာလည်း ကျွန်တော် အမှားတွေအများကြီး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မှားတယ်လို့ဝန်ခံရန်ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စတွေလည်း ရှိခဲ့ပေမယ့် I was wrong. ၂၀၁၄ မှာလည်း ကျွန်တော် ဆက်ပြီး အမှားတွေလုပ်မိဦးမှာပါပဲ။
I’ll not afraid doing wrong and error in 2014, too.
ညအချိန်မတော် ရွာထဲကို ဝင်လာတဲ့ အိုးလှည်းကြီးကို ရွာထဲကခွေးတွေက ဟောင်တယ်ဆိုတာ သူတို့ အကျင့်စရိုက်အတိုင်း လုပ်ကြတာပါ၊ အိုးလှည်းကြီးကတော့ သွားရမယ့်ခရီးကို တအိအိနဲ့ ဆက်ပြီး သွားနေတာပါပဲ။ ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားရာဆီကို မှန်မှန်သွားနေဖို့ပဲ လိုတာပါလေ။ ၂၀၁၄ ကိုလည်း ကျွန်တော် တအိအိနဲ့ ဆက်ပြီးသွားနေဦးမှာပါ။
I’m on my way for 2014.
ပန်းတိုင်းကို ပွင့်စေချင်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ မှာကျွန်တော်က ခင်ဗျားတို့အတွက် မိတ်ဆွေကောင်း မဖြစ်ခဲ့ရင်၂၀၁၄ မှာကြိုးစားခွင့် ပြုပေးပါ။
I’ll be good, better and best for you.
Let me try again in 2014.
Happy New Year 2014 and may the good luck returns in your year 2014.
Kaung Myat Tun.
Leaveacomment	| posted in ရောက်တက်ရာရာ
ကျွန်တော်မှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့ အကြုံတွေ အများကြီးရှိတာမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်သိသလောက် မှတ်သားလေ့လာ ထားသလောက်ကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံသား တက်သစ်စ ပညာရှင်များ ပိုမိုဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၀န်ထမ်းသစ် ကျမ်းကို ရေးသားပြုစုပါသည်။ ကျွန်တော်က ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော အလုပ်များသာ လုပ်ကိုင်နေတာများတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ရေးသားမှုများသည် ဂျပန်အယူအဆ အတွေးအခေါ်များ ပါဝင်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။ နားလည် သဘောပေါက်ပေးစေလိုပါသည်။ ယခုကျမ်းကို ဖတ်ရှုရသောသူများအနေဖြင့် အနည်းနဲ့အများ အထောက်အကူဖြစ်တယ် ဆိုလျှင်ပဲ ကျေနပ်ပါသည်။
မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆို ၁၀၀% အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။
သေးငယ်သော အလုပ်ကို ၁၀၀%ပြီးမြောက်အောင် မလုပ်နိုင်သူသည် ကြီးမားသော အလုပ်ကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ ရောက်လာပြီဆိုလျှင် အမျိုးအစား စုံလင်လှပါသော အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြရပေသည်။ အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီးကို လုပ်ရတဲ့အခါရှိသလို သေးငယ်သော အလုပ်ကို လုပ်ရသော အခါမျိုးလည်း ရှိပေမည်။ သေးငယ်သော အလုပ် မဖြစ်စလောက်အလုပ် ကို ဖြစ်သလိုမလုပ်ရန်မှာ အလွန်ပင် အရေးကြီးပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သေးငယ်သော အလုပ်ကို ၁၀၀% ပြီးပြည့်စုံအောင် အကောင်းဆုံး မလုပ်နိုင်သူသည် အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီးကို လုပ်ကိုင်နီုင်စွမ်းရှိသူ ဖြစ်နိုင်ရန် အလွန်ပင် အလားအလာ နည်းပါးသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
မည်သို့သော အလုပ်မျိုးကို မဆို မိမိ၏ စိတ်စေတနာ၊ စွမ်းရည်ကို ၁၀၀% အသုံးချပြီး အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ရန်မှာ အလွန်ပင် အရေးကြီးပေသည်။ အလုပ်ခွင်ထဲသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာသော သင့်ကို ချက်ချင်းလက်ငင်း တာဝန်ကြီးသော အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီးကို တာဝန်ပေးအပ်မည် မဟုတ်ပေ။ သေးငယ်သော အလုပ်၊ တာဝန် ပေါ့ပါးပါသော အလုပ်များကို ဦးစွာပထမ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရမည်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပေးအပ်လာသော လုပ်ငန်းတာဝန်ကို သေးငယ်ပြီး မဖြစ်စလောက်အလုပ်ပင် ဖြစ်စေကာမူ၊ ထိုကဲ့သို့သော အလုပ်ကို မိမိက မည်ကဲ့သို့ အကောင်းမွန်ဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ပြသရန်မှာ မိမိတာဝန်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ခြင်း ဆိုရာတွင် မိမိက အကောင်းဆုံးဟု သက်မှတ်ထားသည်အထိပင်မဟုတ်ပါပဲ၊ စံသက်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အရေးကြီးပေသည်။ သေးငယ်သော အလုပ်များကို ပင် စံသက်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ၁၀၀% ပြီးမြောက်အောင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သူသာလျှင် ကြီးမားသော အလုပ်များကို စံသက်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ၁၀၀% ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ၀န်ထမ်းကောင်း ဖြစ်ပေမည်။
Kaung Myat Tun, 2013 Mar 13
၀န်ထမ်းသစ် ကျမ်း (၃) –
အကောင်းမြင်ပြီး ရှေ့ ဆက်ပါ။
၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အသင်းအဖွဲ့ ထဲတွင် လူအမျိုးမျိုးဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရပေမည်။ အထက်လူကြီး ရှိသလို၊ မိမိနှင့် တန်းတူများလည်း ရှိမည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အကောင်းမြင်ဝါဒ ရှိဖို့ရန်မှာ အထူးပင်လိုအပ်ပေသည်။ အကောင်းမြင်ဝါဒဟု ဆိုရာတွင် အရာရာကို အကောင်းဖက်ကတွေးတော ရှုမြင်ရမည်ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။ ပြဿ နာ၊ အခက်အခဲဖြင့် ကြုံတွေ့ လျင်လည်း အကောင်းမြင်တတ်ရပေမည်။ ပြဿ နာ၊ အခက်အခဲကို အကောင်းမြင်ရမည်ဆိုသည်မှာ ၄င်းတို့ကို ကောင်းသည်ဟု တွေးတောရှုမြင်စေလိုသည် မဟုတ်ပဲ၊ ပြဿ နာ၊ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ ရမှုကို စိတ်ပျက်အားမလျော့ပဲ၊ အနှုတ်သဘော မကောင်းမြင်ခြင်းမရှိပါပဲ၊ ကောင်းသော၊ အပြုသဘောဆောင်သော အမြင်ဖြင့်ရှုမြင်ကာ မည်ကဲ့သို့ ကျော်ဖြတ်ရန် တွေးတောစေလိုရင်းဖြစ်သည်။
လူသားတုို့ရဲ့ သဘောသဘာဝအရ အနှတ်သဘောဆောင်သော မကောင်းမြင်ဝါဒစိုးမိုးလွယ်ပေသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် ဖြစ်စေ၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်သွားလာနေစဉ်ဖြစ်စေ အပေါင်းသဘော အကောင်းမြင်ဝါဒကို မွေမြူတတ်ရန်မှာ အလွန်ပင် အရေးကြီးပေသည်။
သို့ရာတွင် အပေါင်းသဘော အကောင်းမြင်ခြင်းဆိုသော ၀ါဒကို ရှေ့ ဆက်သွားခြင်းဝါဒဖြင့် ပေါင်းဆက်လိုက်ပါက ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား မြင့်မားသော လူ့စွမ်းအားဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပေါ်လာသော အကြောင်းအရာကို အကောင်းမြင်စိတ်ဖြင့် အပေါင်းသဘောအခြေခံကာ ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီး၊ ရှေ့ ဆက်သွားမည့် လမ်းကို သေချာ စဉ်းစားသုံးသပ်ကာ လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက၊ လွန်စွာထူးချွန်သော ၀န်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။
Kaung Myat Tun, 2013 Mar 22
It is April again to say this,
passing through all the whole year around.
While preparing to welcome the new.
Whatacycle of the truth.
It is justasimple another year.
But it is fresh for you, promised year.
A beautiful water festival,
And the culture of Myanmar,
Paying homage to the elders during the new year.
all my friends and my relatives.
Sure, my family, too.
May all you be happy and healthy
Not only this year but forever.
That’s all what I want and desire.
– The ink –
The last words ofaday.
With the mind of pleasure
that you will meet him inside your dream.
With the feel of sorrow,
that you still want to beside him.
With the full of hope
that you will meet him again tomorrow.
Some night and some times,
But you never gonna alone.
2013 April 11@Yokohama
I used to smile…
The only value I can give
Without discrimination in my mind.
I used to forget how to smile
Without love in my mind.
I come to realize how to smile
Every time and everywhere
Without hesitation in my mind.
Just for you, with all my heart
Without pretending in my mind.
Just simply and honestly
Without lying in my mind.
– Kaung Myat Tun –
– A drop of ink –
@Yokohama, 2013 April 13
Start from oneself
ကျွန်တော် လူ့လောကထဲကို ရောက်လာတော့ လောကကြီးထဲမှာ ကျင်လည်နေရင်းနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။ အသိပညာ အတတ်ပညာတွေလည်း အများကြီး တက်မြောက်လာတော့ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာက ဒီလောကကြီးကို ကျွန်တော် ပြောင်းလဲမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလောကကြီးကို ကောင်းသည်ထက် ကောင်းအောင် ပြောင်းလဲလုိုက်ဖို့ တာဝန်က ကျွန်တော့်ရဲ့  တာဝန်ပဲလို့ သက်မှတ်ပြီး ကျွန်တော် လောကကြီးကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အချိန်တွေ ကုန်လာတာနဲ့ အမျှ လောကကြီးက ပြောင်းလဲမလာတော့ ကျွန်တော် စိတ်နည်းနည်းလျော့လိုက်ပြီး ကျွန်တော့် နိုင်ငံကိုပဲ ပြောင်းလဲနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော် ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားပါစေ ကျွန်တော် ဖြစ်ချင်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုက ဖြစ်မလာဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်နေတဲ့ မြို့ လေးကိုပဲ ပြောင်းလဲဖို့ ကျွန်တော် စိတ်လျော့ပြီး ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါလဲပဲ ကျွန်တော် မျှော်လင့်သလို ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်မလာပါဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်နေတဲ့ ရပ်ကွက်၊ ကျွန်တော်နေတဲ့ အိမ်၊ ကျွန်တော့် မိသားစု စသဖြင့် တဖြည်းဖြည်းခြင်း လျော့ချပြီး ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
အခုကျွန်တော် အိပ်ရာပေါ်မှာလဲပြီး နာကျင်မှုဝေဒနာတွေနဲ့ ရောဂါဒဏ်ကို ခံစားရင်း တွေးမိလိုက်တာက ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောင်းလဲဖို့ မကြိုးစားခဲ့တာကို စဉ်းစားလိုက်မိတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းမွန်တဲ့ ကျွန်တော် ဖြစ်ချင်တဲ့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ပြောင်းလဲခဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကျွန်တော့်မိသားစုလည်း ပြောင်းလဲလာမယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကျွန်တော်နေတဲ့ ရပ်ကွက်၊ ကျွန်တော်နေတဲ့ မြို့  စသဖြင့် အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာမှာပဲ။ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲဗျာ ကျွန်တော်ရဲ့ နိုင်ငံကြီးလည်း ပြောင်းလဲသွားပြီး၊ လောကကြီးလည်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်တာပေါ့။ အဲ့ဒီလို ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်ကုိုယ်တိုင်က စပြီးပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် သိတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော် သေဆုံးရတော့မယ်လေ။ နောင်တတွေနဲ့ပဲ ကျွန်တော် သေဆုံးသွားရပါတယ်။
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Chicken Soup for the Soulစာအုပ်ထဲက ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည် စဉ်းစားရေးသားထားတာပါ။ ကျောက်စာတစ်ခုအနေနဲ့ အမည်မသိရှေးစာဆို တစ်ဦးက ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော် ကျွန်တော့်အကြောင်းPresentationတွေထဲမှာ အမြဲ ထည့်ရေးလေ့ရှိတဲ့ Start from oneselfဆိုတာဒီ ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ပြီးတွေးထားတဲ့ Motto ပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ သာမန်လူသားတွေက အမြဲပဲ အကောင်းဆုံးတွေကို မျှော်လင့်တတ်ပြီး၊ မိမိကို အကောင်းဆုံးတွေပဲ ဖြစ်စေချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အကောင်းဆုံးတွေကို ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်တာ၊ ပြောင်းလဲမှုဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စရတာ၊ စသည်တို့က အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။
လူဆိုတာ အမှားတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်။ အမှားမရှိတဲ့သူမရှိလို့ အမှားလုပ်ရမှာကို မကြောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှားလုပ်မိမှာကို လူတိုင်းနီးပါး ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စပြီးဘာမှ မလုပ်ပဲ၊ ဘာမှ မဖြစ်နိုင်တော့လည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စရမည်သာပါ။ Just start from oneself!
၀န်ထမ်းသစ် ကျမ်း(၄) – ကျွမ်းကျင်သူလျောက်သော လမ်းကြောင်းများ (Career Path of Software Engineer) – (1)
– ကျွမ်းကျင်သူလျောက်သော လမ်းကြောင်းများ (Career Path of Software Engineer) – (1)
ကျွန်တော်က Software Development Companyမှာ အလုပ်လုပ်တော့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်တဲ့ အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Companyပြင်ပက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ လူငယ်တွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်တဲ့ အခါတွေမှာ များသောအားဖြင့် မေးမြန်းခြင်းခံရတာကတော့ Programmerတစ်ယောက်၊ Software Engineerတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှင်သန် ရပ်တည်ဖုို့ရန်အတွက် ဘယ်လိုProgramming Languageကို လေ့လာသင့်သလဲ၊ ဘယ်လုိုမျိုးလေ့လာရင် မြန်မြန် အလုပ်ထဲမှာ ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်နဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ ကျွမ်းကျင်သူ လျောက်သော လမ်းကြောင်းများ (Career Path of Software Engineer)က ဘယ်လိုမျိုးပါလဲ။
အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူအနေနဲ့ကလည်း လက်ရှိအလုပ်ထဲမှာ မိမိရဲ့  အရည်အချင်းဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ စာသင်သားတွေအနေနဲ့ကလည်း ဘယ်လိုမျိုး ပြင်ဆင်ထားရင် အလုပ်ထဲကိုဝင် အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါမှာ အဆင်ပြေပြေလုပ်ကိုင်နိုင်မလဲဆိုတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ရှိကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Programmer, Software Engineerစတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်တဲ့ သူတွေသည်လည်းပဲ အထူးပြု လေ့လာခြင်းကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဖြန့်ချဲ့ လေ့လာခြင်းကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ အထူးပြု လေ့လာမှာလား ဖြန့်ချဲ့ လေ့လာမှာလား ဆိုတာမှာ ကိုယ်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်မယ့် လုပ်ငန်းရဲ့  သဘောသဘာဝနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။ IT Software Companyတွေမှာ အကျမ်းဖျင်းအားဖြင့် Productတစ်မျိုးကို အထူးပြု ထုတ်လုပ်တဲ့ R&Dရှိတဲ့ Companyနဲ့ Customerရဲ့  လုိုအပ်ချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီး Customized Productကို ရေးသားထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ Companyဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ Customized Productတွေကို ရေးသား ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ Companyတွေထဲမှာမှ Platformတစ်မျိုးတည်းကို လက်ကိုင်ထားတဲ့Companyနဲ့ ခောတ်အလိုက်၊ လိုအပ်သလို Platformအမျိုးမျိုးကို သုံးစွဲပြီး လုပ်ကိုင်တဲ့ Companyနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ Productတစ်မျိုးတည်းကို အထူးပြု ထုတ်လုပ်တဲ့ R&Dလို Company မှာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် နည်းပညာတစ်ခုကို အထူးပြု လေ့လာနိုင်မယ့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး၊ Customized Productတွေထုတ်တဲ့Companyမှာ လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အမျိုးမျိးသော နည်းပညာတွေကို ဖြန့်ချဲ့  လေ့လာနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
နည်းပညာတွေက တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ Software Developmentမှာ အရေးပါတဲ့ နေရာမှာ ရှိနေတဲ့ Programming Languageနည်းပညာတွေကလည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့  Department Managerတို့ခေတ်က သုံးခဲ့တဲ့ Programming Languageတွေက အခုခေတ်မှာ အသုံးမပြုတော့သလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေက ဘာကြောင့် ဘယ်လို Departmentတစ်ခုလုံးကို ဦးဆောင်နိုင်နေပါသလဲ။ ထို့အတူပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့  Senior Manager/ Manager/ Project Leaderတွေက ဘယ်လိုမျိုးတွေ လေ့လာနေလို့ လုပ်ငန်းတွေ Projectတွေကို လုပ်ကိုင်နိုင်နေပါသလဲ။ မေးခွန်းများစွာ ရှိကြမှာပါ။
ဆေးလိပ်ငွေ့ များနဲ့ ကျွန်တော်
ကျွန်တော် ဆေးလိပ်ကို တွေ့ ရင် ချိုးပစ်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော့် အဖေက ဆေးလိပ်သောက်တတ်တယ်။ ကျွန်တော် နည်းနည်းလေး သိတတ်စအရွယ်ရောက်တော့ ဆေးလိပ်မကောင်းကြောင်းတွေ သိလာပြီး အဖေ၀ယ်ထားတဲ့ ဆေးလိပ်တွေကို ချိုးပစ်တတ်လာတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲလားတော့ မသိဘူး အဖေ ဆေးလိပ်မသောက်တော့ဘူး။ အခုထိပါပဲ။
ဆေးလိပ်သောက်တာကို ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော် တခါမှ မတွေးကြည့်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေ ပြောတဲ့ ဆေးလိပ်အရသာကို ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ နားလည်ပေးလို့မရနိုင်တာပါ။ ဆေးလိပ်ကို ကျွန်တော် ဘာကြောင့် ဒီလောက်အထိ ဖြစ်သလဲ ကျွန်တော် ကို်ယ်တိုင်လည်း မသိပါဘူး။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဆေးလိပ်အနံ့ ကို ကျွန်တော် နည်းနည်းလေးရလိုက်တာနဲ့ ခေါင်းမူးတတ်တာပါပဲ။ ဆေးလိပ်အငွေ့ တွေက ကျွန်တော့်ကို မူးနောက်စေတယ်။ အငွေ့ အတော်များများကို ရှုလိုက်မိရင် တစ်နေကုန် ခေါင်းမူးတော့တာပါပဲ။
သူငယ်ချင်းတွေ ဆေးလိပ်သောက်တတ်တဲ့ အရွယ် ကျွန်တော်လည်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တဲ့ အရွယ် သူတို့တွေ ဆေးလိပ်သောက်ရင် ကျွန်တော်အငွေ့ တွေနဲ့ လွတ်အောင် နေရာယူရတယ်။ သူငယ်ချင်းဆေးလိပ်သောက်တဲ့ သူတွေကလည်း ကျွန်တော့်စီကို ဆေးလိပ်ငွေ့ မရောက်အောင် သောက်ကြပါတယ်။
ဆေးလိပ်ငွေ့ ကို ကြောက်တဲ့ ကျွန်တော် ဆေးလိပ်ငွေ့ ကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ သူတွေကိုလည်း အားမနာတမ်း ကျွန်တော် ပြောတတ်ပါတယ်။
မေလ ၃၁ရက်နေ့က မ္ဘာ့ဆေးလိပ်မသောက်ရေးနေ့ (No Tabacco Day)ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဒီနေ့ ရုံးသွားရင်းနဲ့ ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဆေးလိပ်မသောက်ရေးနေ့တွေ နေ့တိုင်းဖြစ်နေရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။
ဆေးလိပ်ငွေ့ ကင်းစင်သော လောကကြီးမဖြစ်နိုင်ရင်တောင် ဆေးလိပ်ငွေ့ ကင်းတဲ့ သန့်စင်တဲ့ လေကောင်းလေသန့်ကို ရှုရှိုက်နိုင်တဲ့ နေရာလေးတွေ များပြားပါစေ။
က မ္ဘာ့ဆေးလိပ်မသောက်ရေးနေ့ (No Tabacco Day)ကို ဂုဏ်ပြုလျက်။
With all the special,
ကျွန်တော်၅တန်းကျောင်းသား အတန်းတင်စာမေးပွဲ ဖြေပြီးလို့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အောင်ဆန်းအားကစားကွင်းမှာ ကရာတေးဒိုသင်တန်းတက်ဖို့ စာရင်းသွားပေးပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားကြီးစီးပြီး အသွား၊ ကားပေါ်မှာ တစ်လမ်းတည်း အတူနေတဲ့ အိမ်နီးနားချင်း အကိုကြီး တစ်ယောက်နဲ့ ရင်းနှီးသွားပါတယ်။ သူ့နာမည်က ကိုလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ သူက စကားပြောကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်လုို့ ကျွန်တော် သူ့ကို ခင်မင်ရင်းနှီးသွားတာက အချိန်ခဏလေး အတွင်းမှာပါပဲ။
ကိုလင်းက ကျွန်တော့်ကို ညီလေးလုို့ခေါ်ပါတယ်။ အသံကောင်းတဲ့သူမို့လားတော့ မသိပေမယ့် နားဝင်ချိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုလင်းနဲ့အတူ သင်တန်းကအပြန် ကျွန်တော့်အိမ်ရှေ့ ရောက်ရင် သူနှုတ်ဆက်တာက ညီလေး ကျေးဇူးပဲနော် ဆိုပြီးတော့ နှုတ်ဆက်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အဲ့ဒီ အစ်ကို က အတော်လေးကို သုံးတယ်။ စကားလုံးတွေရဲ့  တန်ဖိုးကို ကျွန်တော် အများကြီး နားမလည်သေးပေမယ့်။ စကားလုံးတွေက လူ့လောကမှာ အရေးပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် သိလာတယ်။
ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတာက အရေးပါတယ်ဆိုတာကို နားလည်လာတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောတတ်လာတယ်။ လူတစ်ချို့ ရဲ့  စကားလုံးတွေ အပေါ်မှာ ထားတဲ့ အယူအဆတွေကို ကျွန်တော် လျစ်လျူရှုဖို့ ကြိုးစားနေရဆဲဖြစ်ပေမယ့်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို နှစ်သက်တတ်မှုကိုတော့ ကျွန်တော် မလျော့ပါးချင်ပါဘူး။
သာမန်ကိစ္စလေးတစ်ခုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ လို့ ပြောလိုက်တာလေးတစ်ခုက နှလုံးသား အာဟာရကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှလုံးသားကိုလည်း အာဟာရဖြစ်စေတဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျွန်တော် ပြောနေဦးမှာပါ။
ကျောင်းလွယ်အိတ်ကို ဘေးတစ်စောင်းလွယ်တာ ပဲများတာ၊ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ တစ်ကျောင်းလုံးက ကျောင်းသားတွေရော ကျောင်းသူတွေရော လွယ်အိတ်ကို ဘေးတစ်စောင်းမလွဲပဲ၊ စလွယ်သိုင်းပြီးတော့ပဲ လွယ်တယ်။ တောင်ကြီးမြို့  အထက(၄) ကျောင်းကို စတတ်ဖို့သွားတဲ့ ကျောင်းကားပေါ်မှာ ဘေးကထိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောပြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မှာတော့ ယောက်ျားလေး မိန်းကလေး အတော်များများ လွယ်အိတ်ကို ဘေးစောင်းပဲ လွယ်လေ့လွယ်ထ ရှိတာပဲလို့ စဉ်းစားမိလိုက်ပေမယ့် တောင်ကြီးရောက်တော့ တောင်ကြီးလိုကျင့်ရတော့တာပါပဲ။
ကျွန်တော် တောင်ကြီးမှာ ၇တန်းကျောင်းသားဘ၀နဲ့ နေထိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ တောင်ကြီးဆိုတာ ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့  မြို့ တော်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ကနေ လေယာဉ်နဲ့သွားတော့ ဟဲဟိုးလေဆိပ်ကနေ ကားနဲ့သွားရပါတယ်။ အေးသာယာမြို့ ကနေ လှမ်းပြီး မြင်ရတဲ့ တောင်ကြီးမြို့ ကို ကျွန်တော် မြင်မြင်ချင်းပဲ နှစ်သက်သဘောကျသွားပါတယ်။
သန့်ရှင်းတဲ့ လမ်းတွေ ကုန်းမြေမြင့်လေးတွေပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးတွေနဲ့ ကျွန်တော် တောင်ကြီးမြို့ မှာ ပျော်နေခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
တောင်ကြီးမြို့ နေ တောင်ကြီးသား၊တောင်ကြီးသူတွေ စီကနေ ကျွန်တော် အတုခိုးခဲ့တာလေးတစ်ခု ရှိတယ်။ ကျွန်တော် အရမ်းသဘောကျပြီးတော့ အတုခိုးဖြစ်သွားတာပါ။ ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှာ အနေများတာဆိုတော့ စကားပြောရင် ဟုတ်ကဲ့၊ ဆိုပြီးတော့ ပြောလေ့ ပြောထရှိပါတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမနဲ့ဆိုရင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ၊ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ စသဖြင့် ပြောလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကြီးသား၊ တောင်ကြီးသူတွေကတော့ ယောက်ျားလေးတွေက ဟုတ်ကဲ့ဗျ လို့ပြောပြီး၊ မိန်းကလေးတွေက ဟုတ်ကဲ့ရှင့်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ကျွန်တော် ပထမဆုံး ကြားကြားချင်းပဲ အတော်လေးကို နားဝင်ချိုတဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုံးဆိုတာကို သဘောပေါက်လိုက်ပြီး အတုယူဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆိုတဲ့ စကားထက် ဟုတ်ကဲ့ဗျ၊ ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဆိုတာက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ပိုပြီး နားထောင်လို့ကောင်း နားဝင်ချိုတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
ဗျ၊ နဲ့ ရှင့် ကိုတောင်ကြီးမှာ စကားအဆုံးသက်မှာလည်း ယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့ သုံးလေ့ရှိတယ်။ စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာ၊ ဆရာမကို နှုတ်ဆက်တာတောင်မှ မင်္ဂလာပါ ဆရာမ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမဗျ ဆိုပြီးတော့ ဗျ ကိုသုံးပြီး နှုတ်ဆက်ကြတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဟုတ်ကဲ့ဗျ လို့ ပြောနေဖြစ်ဦးမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာအချို့ 
ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်နေသော မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန် လာရောက်နေကြပါသည်။ အနာဂတ်မှာ တောက်ပလာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲတွင် ဂျပန်နိုင်ငံလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို စိတ်ဝင်စားမှုများလာသည်နှင့်အမျှ ပြဿနာများလည်း ရှိလာပါသည်။ ထိုအထဲတွင် Non-Public Stock ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြဿနာသည်လည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံကို လေ့လာရေးခရီးစဉ်ဖြင့် ဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်လည်ပို့ဆောင်ပေးသော အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းများစွာရှိပါသည်။ ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းများစွာရှိသလို မကောင်းသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းများလည်း ရှိပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မရွှေ့ ပြောင်းနိုင်သော အိမ်ခြံမြေနှင့် စတော့ရှယ်ယာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ Seminarများကျင်းပပြီး မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးသော ပွဲများတွင် လူပေါင်းရာချီပြီး တက်ရောက်နားထောင်လေ့ရှိကြပါသည်။ ထိုသို့သော ပွဲမျိုးတွင် မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှ စတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဆိုသူ၏ စကားကို နားယောင်ကာ ထိုသူက ပြုလုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံလေ့လာရေးခရီးကို ဂျပန်လူမျိုး ၂၀ ဦးနီးပါးက ၃ညအိပ်၎ရက်ခရီး လုိုက်ပါကြည့်ရှုကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုလိုက်ပါလာသူများကို အနာဂတ်တွင် ရရှိလာမည့် အကျိုးအမြတ်များကို ထည့်သွင်းနိုင်ရန်ဟုဆိုကာ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခိုင်းပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာမည်ကြီးနေသော စက်ရုံများကို လိုက်ပြပြီး နောက်ဆုံးနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာမည့် လုပ်ငန်းများတွင် စတော့ရှယ်ယာ ပါဝင်နိုင်ရန် စာချုပ်များကို အစည်အဝေးခန်းထဲတွင် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် လှည့်လည်ကြည့်ရှုလာသော ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်များမှာ လက်မှတ်ထိုးရန် ငြင်းဆန်မည့်သူပင်မရှိပဲ၊ တ၀က်ကျော်သည် ထို အစည်းအဝေးခန်းထဲတွင်ပင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
ဂျပန်ပြန်ရောက်ပြီး လက်မှတ်ထိုးသည့်သူများ ငွေလွှဲသောအခါ သတိထားမိလိုက်ကြသည်က ငွေလွှဲလုိုက်ရသည့် ဘဏ်အကောင့်သည် ထုိုင်းနိုင်ငံဘဏ်အကောင့် ပြီးတော့ ဘဏ်အကောင့်အမည်က လုပ်ငန်းနာမည်မဟုတ်ပဲ လူနာမည်ဖြစ်နေသည်။ အာရှစတော့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဆိုသူကို စုံစမ်းမေးမြန်းသည့်အခါတွင် ယုံကြည်ပေးပါ၊ ရှင်းပြဖုို့ အချိန်ပေးပါဟုဆိုကာ စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ပြောပြီးကတည်းက အဆက်အသွယ်မရတော့ဟု ပြောပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတော့ ရှယ်ယာဈေးကွက်(Public Stock)သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်အထိ ၄င်းတို့ပေးပို့ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် စာချုပ်ဖျက်သိမ်းမရသည်သာမက အမှန်တကယ် ရောက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားသလော မသိရပါဟု ပြောပါသည်။ ထို့အပြင် စာချုပ်စာတမ်းများအားလုံးသည် ဂျပန်စာဖြင့်ရေးထားသည်ကို တွေ့ ရှိရပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  တရားဝင် ရုံးသုံးဘာသာစကားသည် မြန်မာစာ ဖြစ်သည့်အတွက် စာချုပ်စာတမ်းများသည် မြန်မာစာ ဖြင့်ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာပြန် ပူးတွဲပါဝင်မှသာလျှင် တရားဝင်ဖြစ်ပါသည်ဟု မြန်မာပညာရှင်တစ်ဦးက ဆုိုပါသည်။
ထုို့ကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ပတ်သက်ပြီး လိမ်ညာမှုများရှိနေသည် ဖြစ်သဖြင့် ဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လောကတွင် အထူးဂရုစိုက်မှုများ လိုအပ်နေကြောင်း Sankei Bizကရေးသား ဖော်ပြသွားပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ သော မကောင်းသော အကြံအစည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွင့်ဖြိုးမှု အလားအလာကို မကောင်းသော အသုံးချမှုများလုပ်ဆောင်မည့် ဂျပန်လူမျိုးများလည်း ရှိသည်ကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ လုပ်သားများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ သိရှိထားပြီး ကိုယ်တိုင် ပါဝင် မပတ်သက်မိစေဖို့ အထူးသတိပြုနိုင်ကြပါစေရန် ရေးသား တင်ပြလိုက်ပါသည်။
မှန်ကန်စွာ ဆင်ခြင်သိရှိ ပြုမူ ပြောဆိုခြင်းသာဟု။
:: အိပ်ရာဝင် အတွေးများ
၀န်ထမ်းသစ် ကျမ်း (၁) –
အစီရင်ခံခြင်း၊ အကြောင်းကြားခြင်း၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း
၀န်ထမ်းသစ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ပထမဆုံးသိထားသင့်၊ လိုက်နာရမယ့် အချက်သုံးချက်က ဂျပန်လိုဆိုရင် ဟိုးရန်းဆိုး(報連相)လို့ခေါ်တဲ့ အချက်သုံးချက်ဖြစ်သည်။ ၄င်း အချက်သုံးချက်ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
မည်သည့်အလုပ်မဆို အဖွဲ့ အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ ဖြင့်လုပ်ဆောင်ရသော အလုပ်များပင်ဖြစ်သည်။ ၀န်ထမ်းသစ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၀န်းထမ်းဟောင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်အထက်ပါ အချက်သုံးချက်ကို ထာဝစဉ်လုိုက်နာကျင့်သုံး လုပ်ဆောင်ရပေမည်။ အထက်ပါ အချက်များကို အနည်းငယ် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းပြပါမည်။
မိမိလုပ်ဆောင်သော အလုပ်များကို အထက်လူကြီး သို့မဟုတ် မိမိနှင့် အတူတူလုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ၄င်းတို့ နားလည် သဘောပေါက်အောင် ရှင်းလင်းပြောပြခြင်းကို အစီရင်ခံခြင်းဟု ခေါ်သည်။ အစီရင်ခံခြင်းတွင် နှစ်မျိုးရှိပေသည်။ နှုတ်ဖြင့် အစီရင်ခံခြင်းနှင့် စာဖြင့်ရေးသား အစီရင်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံခြင်းသည် မိမိလုပ်ဆောင်ချက်များကို အချိန်တိုအတွင်း တစ်ဖက်လူ နားလည် သဘောပေါက်အောင် ပြောပြခြင်း၊ ရေးသားရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ၀န်ထမ်းသစ်များအတွက် အလွန်ပင် ခက်ခဲမှုကို ကြုံတွေ့ တတ်ပေသည်။ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်ရန်၊ လိုအပ်ချက် အကြောင်းအရာ အဓိကအချက်ကို ပေါ်လွင်စေရန် အလွန်ပင် အရေးကြီးပေသည်။ သို့မှသာ မိမိအစီရင်ခံသောအချက်ကို အသိအမှတ်ပြုခံရပေမည်။ ၀န်ထမ်းသစ်များအနေဖြင့် အစီရင်ခံရာတွင် လိုအပ်ချက်များ ရှိနိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း ထိုကဲ့သို့ လုိုအပ်ချက်များရှိမည်ကို သိရှိသဘောပေါက်ပြီး၊ မိမိ၏ အစီရင်ခံခြင်း စွမ်းရည်ကို တိုးတက်လာအောင် ကြိုးစားရပေမည်။ အရေးကြီးဆုံးမှာ အစီရင်ခံရန် မမေ့ဖို့ပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အစီရင်ခံသင့်သည့်အချိန်တွင် အစီရင်ခံသင့်ပေသည်။
မိမိလုပ်ဆောင်နေသော အလုပ်၏ အခြေအနေသည် မည်သို့သော အခြေအနေတွင်ရှိသည်၊ မည်သို့သော အခက်အခဲရှိသည်၊ စသည်တို့ကို အကြောင်းကြားရန်မှာ အရေးကြီးပေသည်။ မိမိ အထက်လူကြီး၊ ပြီးတော့ မိမိနှင့် အတူလုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို မိမိအလုပ် အခြေအနေကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် အကြောင်းကြားဖုို့လိုပေမည်။ မည်သို့သော အခက်အခဲမျိုးကို ကြုံတွေ့ပါစေ၊ ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်ရမည်မှာ အကြောင်းကြားရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ၀န်ထမ်းသစ်များ အနေဖြင့် မှားယွင်းတတ်သည်မှာ၊ မိမိအလုပ်တွင် အခက်အခဲ ဒုက္ခတစ်ခု ကြုံတွေ့ လာပါက မည်သူ့ကိုမျှ အကြောင်းမကြားပဲ မိမိကိုယ်တိုင် တစ်ကိုယ်တည်း ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
မည်သို့သော အလုပ်မဆို အသင်းအဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့ အစည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့် မိမိကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ၊ အခြေအနေကို မိမိပတ်ဝန်းကျင် (အထက်လူကြီး)မှ သိရှိရန် အကြောင်းကြားရမည် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ မိမိထက် အတွေ့ အကြုံပိုမို ရှိသော ၀န်ထမ်းမှ အကြံဥာဏ်ကို ရယူကာ မှန်ကန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ပေမည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ အကြောင်းကြားဖုို့ မမေ့ဖုို့ပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အချိန်နှင့် တပြေးညီ အကြောင်းကြားရန်လိုပေသည်။
မိမိလုပ်ဆောင်နေသော အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း၊ သံသယရှိသော အချက်၊ မရှင်းလင်းသော အချက်များရှိပါက တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းကို ပြုလုပ်ရပေမည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရာတွင် မိမိအထက်လူကြီးကိုမှမဟုတ်ပါ၊ မိမိနှင့် အတူတူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပေမည်။
မည်သို့သော အလုပ်မဆို အသင်းအဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့ အစည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့် မိမိကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ၊ အခြေအနေကို မိမိပတ်ဝန်းကျင် (အထက်လူကြီး)မှ အကူအညီရရှိနိုင်ရန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပေမည်။ ၀န်ထမ်းသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အတွေ့ အကြုံရှိဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်လုပ်ရာတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှသာ အကောင်အထည်ဖော်သင့်ပေသည်။ မိမိတစ်ဦး ဦနှောက်ထဲနဲ့ အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပဲ၊ အသင်းအဖွဲ့  အနည်းဆုံး နှစ်ယောက်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် အမှားနည်းသော လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အောင်မြင်နိုင်ပေမည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖုို့ မမေ့ဖုို့ပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ တစ်ဖက်လူရဲ့ အချိန်ကို တန်ဖိုးထားပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်လည်း လိုအပ်ပေသည်။
အထက်တွင်ရေးသားခဲ့သော အချက်သုံးချက်သည် လုပ်ငန်းခွင် ၀င်တော့မည့် ၀န်ထမ်းသစ်များသာမက၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသော ၀န်ထမ်းများပါ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် အခြေခံ ၀န်ထမ်းအရည်အချင်းပင်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုသည်မှာ လူအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုပင်ဖြစ်ပြီး၊ လူလူခြင်း ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းဖြင့် လည်ပတ်နေပေသည်။ လူတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဆက်သွယ်မှုသည် အလွန်ပင် အရေးကြီးပြီး၊ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရန်နှင့် လူ့ဘ၀ ပညာရှင်ဘ၀ အောင်မြင်တိုးတက်ရန် အရေးကြီးသော အချက်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
၀န်ထမ်းသစ်များသည် အကောင်းမြင်စိတ်ထားဖြင့် ရှေ့ ဆက်သွားမည့် စိတ်နှလုံးကို သွင်းကာ လုပ်ငန်းခွင်တွင် (၁) အစီရင်ခံခြင်း (၂) အကြောင်းကြားခြင်း (၃) တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း များကို လုပ်ဆောင်သွားရပေမည်။ သို့မှသာ ပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်စွာ လျောက်လှမ်းနိုင်ပေမည် ဖြစ်သည်။
Kaung Myat Tun, 2013 Mar 12
ပန်းပွင့်တွေကို ကျွန်တော် အလွန်ပဲ နှစ်သက်ပါတယ်။ သစ်ပင်တွေကို ကြည့်ပြီး ပန်းပွင့်တွေရဲ့  ရနံ့ကို ရှုရှိုက်ရင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပက်လက်ကထုိုင်မှာ ဇိမ်ကျကျထိုင်ပြီး ဖတ်ရှုရတာကို အလွန်ပဲ နှစ်သက်တာပေါ့။ ဒီလိုမျိုး သစ်ပင် ပန်းမန်တွေကို နှစ်ခြိုက်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်ကို ဘာ့ကြောင့်များ ပန်းဝတ်မှုံကျိန်စာက သက်ရောက်ရသလဲ ကျွန်တော်လည်း အများကြီးနားမလည်ပေမယ့် နည်းနည်း ရှာဖွေဖတ်ရှုပြီးရေးလိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်က အလွန်ပဲ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ရင်ခုံစရာတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်စကားနဲ့ စာကိုတော့ နားလည်ထားမှ အပြည့်အ၀ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ခံစားနိုင်မှာပေါ့။ ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံမှာ ပန်းဝတ်မှုန်ကျိန်စာသင့်နေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ အဲ့ဒီ ကျိန်စာရဲ့  အဖျားခတ်မှုကို ကိုယ်တိုင် ခံစားရပါမှပဲ အနည်းငယ် လေ့လာမိပါတယ်။
ဆောင်းအကုန် နွေအကူး နွေဦးရာသီ(Spring)ကို ပန်းဝတ်မှုံကျိန်စာ(Pollen Allergy, Kafunsho)သင့်ရာသီလို့ ဂျပန်မှာ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ ဒီကျိန်စာက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဂျပန်မှာ နေတဲ့ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးမှရယ် မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံခြားကနေ လာရောက်နေထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့လို နိုင်ငံခြားသားတွေမှာလည်း သက်ရောက်မှုရှိတတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဖေဖော်ဝါရီလကနေ ဧပြီလလောက်အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒီပန်းဝတ်မှုန်ကျိန်စာရဲ့  အစကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကာလမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့  သစ်တောစိမ်းလန်းဆိုပြေရေးအတွက် သစ်ပင်တွေ အများကြီး စိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ သစ်ပင်တွေထဲမှာ Cryptomeria(スギ)လို့ခေါ်တဲ့ အပင်တွေအများကြီး စိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအပင်က ပန်းဝတ်မှုံတွေက နွေဦးလေပြေနဲ့အတူ ပြန့်လွင့်ရာကနေ ၀တ်မှုန်ကျိန်စာကို ခေါ်ဆောင်လာတာပေါ့။ ကျိန်စာရဲ့  သက်ရောက်မှုက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နွေရာသီရဲ့  နေအလင်းရရှိခဲ့မှုအပေါ်မူတည်ပြီး သက်ရောက်မှု ပမာဏ ကွာခြားတတ်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နွေက များများပူလေ၊ နောက်နှစ်ရဲ့  ၀တ်မှုံကျိန်စာက ဆိုးဝါးလေပဲပေါ့။
ပန်းဝတ်မှုံ ကျိန်စာ(Pollen Allergy)သင့်ခံရတဲ့သူက (၁)မျက်လုံးယားယံခြင်း၊ (၂) နှာရည်ယိုခြင်း၊ (၃)နှာချေခြင်း ဖြစ်တော့တာပေါ့။ မျက်လုံးထဲကို ပန်းဝတ်မှုံတွေဝင်ပြီးတော့ ဓာတ်မတည့်ခြင်း(Allergy)ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ခံအားက မျက်ရည်ကို ကျစေတယ်။ မျက်လုံးယားယံတော့ မျက်လုံးနီလာတတ်တယ်။ နှာရည်ယိုပြီး နှာခေါင်းပိတ်တော့ အသက်ရှုရခက်ခဲပြီး ပါးစပ်နဲ့ အသက်ရှုရတယ်။ ပြီးတော့ အခြေအနေဆိုးတဲ့ သူအချို့ ဆိုရင် နှာရည် အဆက်မပျက်ကျနေတတ်တယ်။ နှာခေါင်းထဲကို ပန်းဝတ်မှုံတွေဝင်တော့ နှာခေါင်းယားယံခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေတာပေါ့။ ကြုံတွေ့ ခံစားဖူးမှ နားလည်နိုင်မယ့် အတော်ကို ခံစားရခက်တဲ့ ဝေဒနာတစ်ခုပါပဲ။
ဒီရာသီရောက်ရင် ဂျပန်က ဆေးဆိုင်တွေမှာ ဒီပန်းဝတ်မှုံကျိန်စာကို ကာကွယ်ဖို့ ဆေးတွေရောင်းတော့တာပေါ့။ သက်ရောက်မှု အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆေးဆိုင်ကဆေးနဲ့ ပျောက်တဲ့သူရှိသလို ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံကိုသွားပြီး ဆေးစစ်ကြည့်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရတဲ့ အခြေအနေအထိ ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူ့အခြေအနေနဲ့ သူပေါ့။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ဆေးစစ်ပြီးတော့ ဆေးသောက်တာက ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဆေးက နှာခေါင်းအတွက် သောက်ဆေး လိမ်းဆေးတွေရှိသလို၊ မျက်လုံးအတွက်က မျက်စဉ်းဆေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ပြရမှာ အလုပ်များနေရင်လည်း ဆေးဆိုင်မှာ အလွယ်တကူ မေးမြန်းပြီး ၀ယ်နိုင်ပါတယ်။
ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက်ပိုပြီး ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲပေါ့။ ဒီပန်းဝတ်မှုံကျိန်စာကို ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲလို့ ဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်မိတယ်။ ဒီရာသီမှာ ပန်းဝတ်မှုံတွေက နေရာအနှံပြန့်နှံနေတယ်၊ နေ့လည် ၁နာရီကနေ ၃နာရီအတွင်း နေရာအပေါ်မှာလည်း မူတည်ပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာ ပိုပြီးတော့ ပြန်နှံလေ့ရှိလို့ အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာ အပြင်ထွက်တာမလုပ်တာကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်း မျက်နှာဖုံးကာဗာလေး(Mask)နဲ့ ထွက်ရတာပေါ့။
ပြီးတော့ မိမိအိမ်ကို သန့်ရှင်းရေး ကောင်းကောင်းလုပ်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဖုန်စုပ်စက်နဲ့ အသေအချာ အိမ်ထောင့်စေ့ကို သန့်အောင်လုပ်ပြီး၊ ရေဆိုအ၀တ်နဲ့ ကြမ်းမျက်နှာပြင်ကို ပြောင်လက်နေအောင် တိုက်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ အမှုန်အမွှားတွေ ကပ်မနေမှာပါ။
အိမ်ကိုပြန်ရောက်တိုင်း လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့ဆေး၊ ပါးစပ်ကို ပါးလုပ်ကျင်း၊ မျက်နှာသစ်တာကို လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အပြင်မှာ ၀တ်လာတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကိုလည်း ၀တ်မှုန်တွေကပ်လာမှာဖြစ်လို့ ၀တ်မှုံတွဖယ်ထုတ်ဖို့ ခါခပ်ပြီး လှမ်းထားသင့်ပါတယ်။ ပြတင်းပေါက်နဲ့ တံခါးတွေကို ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အ၀တ်ကိုလည်း အပြင်မှာ မလှန်းပဲ အိမ်ထဲမှာပဲလှမ်းသင့်တယ်။ အပြင်မှာလှန်းရင် လေထဲက ပါလာမယ့် ၀တ်မှုံကျိန်စာတွေ ကပ်ငြိနိုင်တာကိုး။
ပရိုတိန်းအများကြီးပါတဲ့ အစားအစာ၊ အယ်ကိုဟော၊ စပ်တဲ့အစားအစာနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တာကို အလွန်အကျွန်လုပ်ခြင်းကနေ ရှောင်ကျင်သင့်တယ်လို့လည်း ပြောကြတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုလည်း မများအောင်နေသင့်ပါတယ်တဲ့။
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီနှစ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ အားနည်းပြီး ပန်းဝတ်မှုံကျိန်စာကို လှလှပပကြီးကို ခံစားနေရတာပေါ့။ နောက်နှစ်များမှာတော့ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းတွေနဲ့ ရှောင်လွှဲနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ ပန်းဝတ်မှုံကျိန်စာ(Pollen Allergy, Kafunsho)ကနေ ကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေ။
၂၀၁၃နှစ်၊ ၃လ၊ ၁၁ရက်
လူ့ဘ၀ရဲ့  ဖြတ်ကျော်လာတဲ့
ဒီဝတ္ထုက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရေးခဲ့တာလား
ကြည့်ရှုနေပြီး လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ
မထူးစမ်းတော့တာ ရင့်ကျက်လာတယ် ခေါ်တယ်လား။
သူမနဲ့ ကျွန်တော် အဲ့ဒီ နေ့တစ်နေ့က တွေ့ဖြစ်ကြသည်။ ပထမဆုံးတွေ့ဖူးခြင်း မဟုတ်ပေမယ့်၊ ပထမဆုံး အနီးကပ်တွေ့ဆုံဖူးခြင်းဟု ပြောရမည်။ သူမက တူညီဝတ်စုံတစ်စုံကို ၀တ်ထားပြီး မတူညီသော အလှတရားများနှင့် တင့်တယ်နေသည်။ ငေးမောကြည့်ခြင်းကို ၀ါသနာပါသောကြောင့်မဟုတ်ပေမယ့် ငေးမောကြည့်မိသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါကလည်း ပထမဆုံးတော့ မဟုတ်ပါ။
ထိုအချိန်မတိုင်ခင်က ကျွန်တော်စာအုပ်တစ်ချို့ ကို လှန်လောဖတ်ရှုကြည့်ရင်း သင့်တော်သော စာအုပ်ကို ရှာနေမိသည်။ စာအုပ်ထိန်းသိမ်းသူ အမျိုးသမီးကြီးကို မေးမြန်းစုံစမ်းမိသည်။ သူလည်း ပြောချင်ရာပြောသည်။ ကျွန်တော်လည်း နားထောင်ပေးလိုက်သည်။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်တစ်အုပ်တော့ ရွေးရမည်။ တွေဝေမှုမရှိတတ်ပေမယ့် ရွေးချယ်နေမိသည်။
စကားမရှိစကားရှာခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် စကားတစ်ချို့ ကို မေးခွန်းပုံစံဖြင့် သူမကို ပြောဖြစ်သည်။ အဖြေအချို့ ပြန်ရပေမယ့်။ လိုချင်သော အဖြေအတိအကျရယ်တော့ မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် စကားတစ်ခွန်းစ နှစ်ခွန်းစ ပြောဖြစ်သွားသည်။ တွန့်ဆုတ်နေသော ဟန်ပန်ကို သတိထားမိပေမယ့်၊ နားလည်ပေးတတ်လိုက်သည်။ ဒါပေမယ့် သူမထွက်ခွာသွားသည်။
စာအုပ်များ စုစည်းရာ အခန်းထောင့်တစ်နေရာတွင် စာအုပ်များကို တွေဝေရင်း ကျွန်တော် ငေးမောနေမိသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ သူမကို မဟုတ်ပါ၊ ဟိုးတစ်နေရာက တိုက်နံရံကြားမှာ တိုးထွက်ပေါက်နေသော ညောင်ပင်သေးငယ်လေးကိုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒါကလည်း ပထမဆုံးတော့ မဟုတ်ပါ။
တိုက်နံရံကြားက ညောင်ပင်လေးကို ရှင်သန်ခွင့်ပေးပြီး သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်မလား။ နှုတ်ပစ်ပြီးတော့ တိုက်နံရံ ခိုင်ခံ့ရေးကို ကာကွယ်မလား။ သင့်တော်သောနေရာတစ်ခု ညောင်ပင်ငယ်ကို ရှာပေးလုိုက်ပြီး ရှင်သန်စေပြီး၊ တိုက်နံရံကိုလည်း ခိုင်ခံ့စေခဲ့ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ တိုက်နံရံမှာ ညောင်ပင် မစိုက်သင့်ဘူးလေ။
သူ့ကို မြင်မြင်ခြင်း ချစ်မိသည်တော့ မဟုတ်ပေမယ့်၊ သူ့ရဲ့  ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ မျက်လုံးများကို သဘောကျမိသည်။ တည်ကြည်သော သူ့ဟန်ပန်က သေချာမကြည့်မိလျှင် ဒေါသထွက်နေသော မျက်နှာဟန်ပန်ဖြစ်ပေမယ့် အသေအချာကြည့်မိသော ကျွန်မအတွက်တော့ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုကို သူ့မျက်လုံးတွင် တွေ့ ရသည်။ ကျွန်မဘာကြောင့် သူ့မျက်ဝန်းကို ကြည့်မိနေမိသလဲဆိုတာ ကျွန်မကိုယ်တိုင် အသေအချာ မသိသည်ကတော့ အမှန်ပင်။ မေမေကပြောခဲ့ဖူးသည့် ယောက်ျားလေးများ မျက်လုံးကို မကြည့်မိစေနဲ့နော် သမီး ဆိုသော မှာကြားချက်ကို ကျွန်မမေ့လျော့နေမိသည်။
သူ့အလုပ်ကို သူအာရုံစိုက်လေ့ရှိသော သူသည်ကျွန်မသူ့ကို ကြည့်မိနေသော အကြည့်များအား သတိပင် ထားမိပါလေသလား။ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ မေးမိသော စကားလုံးများစွာက ညစဉ်ရက်ဆက် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ သူ၏ စကားပြောသော ပုံစံအနေအထားကို ပထမဆုံးမြင်တုန်းက ဘာရယ်မဟုတ် သေချာနားထောင်တတ်သော ကျွန်မ သေချာနားထောင်နေမိသည်။ သူ၏ ယုံကြည်ချက်အပြည့်ဖြင့် ပြောနေသော ဟန်ပန်သည် မျက်နှာထားတည်သောကြောင့် မာနကြီးသူဟုမြင်ကြသူများ ရှိကြလေသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်မကပဲ အကောင်းမြင်တတ်နေသလားမသိ သူ၏ စကားလုံး တစ်လုံးတိုင်းကို မှတ်မိနေမိသည်။ ဒါပေမယ့် အလွတ်ကျက်ထားသည်တော့ မဟုတ်။
ကျွန်မရင်ကို လှုပ်ခတ်စေသည်မှာ သူ၏ အပြုံးပင်ဖြစ်သည်ဟုပြောရလျှင် ပိုမည်မဟုတ်ပေ။ သူ၏ ဖြူစင်စွာ ပြုံးတတ်သော နှုပ်ခမ်းအစုံသည် ကျယ်ပြန်သော ကောင်းကင်က တိမ်တိုက် ကင်းစင်သော လမင်းတစ်စင်းကို ကြည့်နေရသလို သာယာလှပနေသည်။ ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့ သူ့အပြုံးများကို လူတိုင်း ခင်မင်မိမည်ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်မအတွက်တော့ ရင်ခုံမိသည်။ နေ့သစ်များစွာ ဖြတ်သန်းသွားမိသည်။
နှစ်သစ်တစ်ခု ကူးပြောင်းတော့မည်။ သူ့ကို ကျွန်မ မုန်းသည်။ အဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းပြောဖို့ ကျွန်မ အတော်ပင် ကြိုးစားခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ချစ်တယ်ပြောခဲ့တုန်းက ရှက်ပြီး ပျော်ရွှင်နေသော ခံစားချက်က အခုတော့ ၀မ်းနည်းပြီး တုန်လှုပ်နေမိသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သူ့ကို မချစ်ဘူးဟု ပြောလိုက်သည်။ သူငိုနေမည်ကိုသိသော်လည်း အချိန်တွေက ကုစားပေးသွားမှာပါဟု ပြောခဲ့သည်။ ရင်ထဲတွင် နာကျင်နေသော်လည်း ပြောခဲ့မိသည်။ အိမ်ရှေ့ က မြက်ခင်းလေးထဲက စူးပင်များနှင့်ပွင့်သော ပန်းပင်များကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ ဒါပေမယ့် နှင်းဆီပန်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ယုယစွာ ထွေးပွေ့ ထားစေချင်ပေမယ့် ပန်းအိုးထဲမှာပဲ နေရတာ ဆူးပင်မှာပွင့်သော ပန်းတို့ရဲ့  သဘာဝပဲလေ။
ရှေ့ ဆက်လို့ မဖြစ်တော့ သော ပစ္စုပ္ဗန်
ကျွန်တော်နှင့် ကုိုယ်ကျင့်တရား ပညာ
ကျွန်တော် ၁၀ နှစ်သား အရွယ်က ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့ အိမ်က စာအုပ်စင်မှာ ကပ်ထားသော မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးပုံကို သေချာ ကြည့်ဖြစ်သည်။ ပုံအောက်ခြေတွင် ရေးထားသော စာကို စိတ်ဝင်စားမိသည်။ “မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်” ဆိုသော မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ဆုံးမစာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ငယ်ရွယ်သော စိတ်ဖြင့် စဥ်းစားမိခဲ့သည်။ လူကြီးတွေက ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေကို ဆုံးမနေကြသည်။ ဆရာတော်၏ ဆုံးမစကား အရာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမဖို့ အားပေးသည် သူတပါးဆုံးမတာကို ခံယူစရာ မလိုဟု လွယ်လွယ် ကလေးအတွေး တွေးမိသည်။
ကျွန်တော့်အဖေရုံးက ပြန်လာတော့ ထုံးစံအတိုင်း စကားပြောဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ပြောလုိုက်သည်က “ဖေဖေ ဒီနေ့ကနေစပြီး သားကို ဆုံးမစရာ မလိုတော့ဘူး၊ သားလည်း သားကိုသား ဆုံးမမယ်။ ဖေဖေလည်း ဖေဖေ့ကို ဖေဖေ ဆုံးမပါ”။ အဖေက ဘာ့ကြောင့်လည်း သားရဲ့ လို့ မေးတော့၊ ကျွန်တော်က စာအုပ်စင်က မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးပုံအောက်ခြေက စာကို လက်ညှိုးထုိုးပြလိုက်တာပေါ့။
အဖေက ခဏလေး စဉ်းစားလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြောတာက သား နေ့တိုင်းရွတ်တဲ့ မင်္ဂလာ့သုတ်ထဲမှာ “အတ္တသမ္မာမဏီဓိ” မိမိ ကိုယ်ကို ကောင်းစွာ ထားခြင်း မင်္ဂလာတရားတော်ဆုိုတာရှိသည်။ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာ ဆုံးမတတ်ခြင်းဟု ဆိုနိုင်သည်။ ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးသူ၊ အတွေ့အကြုံများသူ၊ ပညာတတ်သူတို့ရဲ့  ဆုံးမစကားကို နားထောင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမနိုင်ကြောင်း ပြောပြသည်။ ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း သားသမီးကို ဆုံးမရမည့် တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမရကြောင်းပြောသည်။ သားသမီးများကလည်း မိဘရဲ့  ကောင်းမွန်တဲ့ လမ်းညွှန်စကား ဆုံးမမှုကို လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့် တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကို်ယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမသင့်ကြောင်း ပြောပြသည်။
ကျွန်တော် နားလည် သဘောပေါက်သလိုလို ရှိခဲ့သည်။ ထုို့အတွက်ကြောင့်လည်း လူကြီးများ စကားပြောလျှင် နားထောင်ပေးတတ်သော အတတ်ပညာတစ်ခု ရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်ကို လက်ခံထားသည်။
ကျွန်တော် စာအုပ်တွေ ဖတ်သည်။ အဖေက တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းက ကျွန်တော့်ကို စာအုပ်အများကြီး ဖတ်ဖြစ်စေသည်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အိမ်မှာ စာအုပ်ကို မမြင်နိုင်သော နေရာ မရှိဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
စာတစ်အုပ်တွင်ရေးထားသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရား ပညာ(ethic)ဆိုသည်မှာ လူတို့ရဲ့  အပြုအမူကို နှုန်းစံချမှတ် တန်ဖိုးဖြတ် လေ့လာသည့် ပညာရပ်ဖြစ်သည်။ ကုိုယ်ကျင့်တရား ပြဿနာရပ်များကို လေ့လာသည့် ပညာရပ်ဟုလည်း ဆိုပါသည်။ လုပ်သင့်သည်ကို လေ့လာသည့် ဘာသာရပ်(a study of ought)ဟုလည်း ဆိုကြသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရား ပညာရပ်သည် ကိုယ်ကျင့်တရားကိုလေ့လာခြင်း၊ လူတို့ရဲ့  အပြုအမူ အနေအထိုင် အပြောအဆို လုပ်ပုံကိုင်ပုံကို လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းလာတဲ့ တစ်လျောက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လူ့လောကကြီးထဲတွင် ပြုမူနေထိုင် ပြောဆို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင် ကုိုယ်ကျင့်တရား ရှိသည်။ ကောင်းတာများလည်း ရှိသည်၊ ဆိုးတာ အချို့  ရှိခဲ့မည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမတတ်သည်။ ထုို့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမသည်။
ကျောင်းသား ဘ၀ ဖြတ်သန်းစဉ်က ကျောင်းသားနှင့် သက်ဆိုင်သော ကိုယ်ကျင့်တရားရှိသည်။ အလုပ်ခွင်ထဲရောက်တော့ အလုပ်ခွင်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကိုယ်ကျင့်တရားရှိသည်။ မိမိ ကိုယ်ကျင့်တရားစံကို တိုင်းတာရာတွင် စနစ်ကျသော စံသက်မှတ်ချက်များကို အခြေပြုပြီး တိုင်းတာနိုင်သည်။ ထိုစံဆိုသည်များကို မသိလျင် မိမိ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားကို တန်ဖိုးသက်မှတ်လို့ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲတွင် ဂျာမန် ဒဿနပညာရှင် ကန့်က ဆင်ခြင်တုံတရား အခြေခံသော တာဝန်သိစိတ် သည် ကုိုယ်ကျင့်တရားနှုန်းစံတစ်ခု အဖြစ် ယူဆထားသည်။ လူသားများအပေါ် စိတ်စေတနာ ကောင်းထားခြင်းသည် တာဝန်သိစိတ်ရှိခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။ လူသားဆိုသော ဆိုလိုရင်းတွင် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်သည်ဟု ကျွန်တော်က ခံယူသည်။ မိမိကိုယ်ကို တာဝန်သိစိတ်ရှိရမည်၊ ထုို့အတူ သူတပါးအပေါ်ကိုလည်း တာဝန်သိစိတ်ရှိရမည်။ မိမိကိုယ်ကိုလည်း စိတ်စေတနာကောင်းထားပြီး သူတပါးကိုလည်း စိတ်စေတနာကောင်းထားရမည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားသည် လူ့အဖွဲ့ အစည်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်က အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်လို့ အလုပ်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စဉ်းစားမိသည်။ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်လျှင် ကိုယ်ထမ်းဆောင်ရသော နေရာတစ်ခုရှိမည်။ မိမိနေရာကို မိမိ တာဝန်သိစိတ်ရှိရမည်၊ ထို့အတူ အဖွဲ့ အစည်းနှင့်ဆက်စပ်နေသူများအပေါ်လည်း တာဝန်သိစိတ်ရှိရမည်။ စိတ်စေတနာကောင်းထားရမည်။ သို့သော် နှုန်းစံကို မှီသော တာဝန်သိစိတ်နှင့် စိတ်စေတနာဖြစ်ရမည်။ သို့မဟုတ်ပါက ကျွန်တော် ၁၀နှစ်သားက လွယ်လွယ်တွေးသော ကလေးအတွေးလို မပြည့်ဝသော အတွေ့အကြုံများဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမရန် ကြိုးစားသကဲ့သို့ ဖြစ်မည်။
မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီဆုံးမစကားသည် ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိသူအတွက် ဆင်ခြင်ပေးစရာ စကားတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး၊ မိမိကိုယ်ကို လိမ်လည်ဖုို့အတွက် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ဆုံးမတတ်ရန် အရေးကြီးပေသည်။
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယုံကြည်စိတ်ချမှု(Trust)သည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ခံယူချက်ဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ လူမှုအရင်းအနှီး(Social capital)ကို မြင့်မားစေသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် လူ့စွမ်းအားဖြစ်ပြီး လူမှုအရင်းအနှီးဖြစ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို ဖြစ်စေသည်။
နည်းစနစ်ကျလေ့လာခြင်းသည် မှန်ကန်သော အမြင်ကို ဖြစ်စေသည်။ စံသက်မှတ်ချက်မရှိခြင်းသည် လမ်းမှားကို ရောက်စေနိုင်သည်။ တုိုးတက်မှုကို ဆုတ်ယုတ်စေသည်။ မိမိ ကိုယ်ကျင့်တရားကို တိုင်းတာတတ်ပြီး မိမိကို်ယ်ကို ဆုံးမတတ်ဖို့ ထိုစံသက်မှတ်ချက်များကို လေ့လာရမည်။ သို့မှသာ မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းသည် မှန်ကန်ပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားရှိသော ဆုံးမခြင်းဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာတရားတော်နှင့် ညီညွတ်ပေမည်။
(မှီငြမ်း။ ။ ကိုယ့်ဆီကို ရေးတဲ့စာနှင့် ဒဿနစာစုများ၊ ဆန်းထွန်းသောင်၊ ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီ။ ကိုယ်ကျင့်တရား ပညာနှင့် ဒဿနိကဗေဒ၊ Bi-Weekly Eleven Dec 19, 2008)
ကျွန်တော့် အဖေရေးသော ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပြီး ပြန်လည် ခံစား ရေးသားသည်။
My dear sunshine.
I wish I could see the sunshine
rising from the east.
every day I go to work,
every evening I come back home,
I wish I could say goodbye to the sunshine
waving my hand.
Even though the sunshine
sometime hiding behind the clouds
it always make me warm and
show the ways forward.
So as you, my dear.
written by Kaung Myat Tun.
အချိန်တွေကို နောက်ကို ပြန်ဆုတ်ချင်လည်း
နောက်ကို ပြန်ပြီး တွေ့ရမှာပဲဆိုပေမယ့်လည်း
ဂရုစိုက်မှုတွေ အများကြီးရပေမယ့် ပေးဆပ်ပေမယ့်လည်း
၀မ်းနည်းမှု၊ အထီးကျန်မှုနဲ့ မှားယွင်းမှုတွေကို
ဒါတွေက တနေ့နေ့မှာ မိမိအတွက်
ဒါကြောင့် ခွဲခွာခြင်းကို တန်ဖိုးထားတတ်ပါစေ။
ပြီးတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်သော ဘ၀ကို
ကောင်းမြတ်ထွန်းKaung Myat Tun 2013 Mar 6(ဂျပန်ကဗျာအား မှီငြမ်းဘာသာပြန် ရေးသားသည်)
အိုမင်းခြင်း အနုပညာကို ကြုံတွေ့ရင်း
နာကျင်ခြင်း အနုပညာကို ခံစားရင်း
သေဆုံးခြင်း အနုပညာကို မျှော်တွေးရင်း
အိုမင်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း
ကြုံတွေ့၊ ခံစား၊ မျှော်လင့်တွေးတောရင်းပဲ
ဖြစ်ပြီးပြန်တော့ ပျက်၊ ပျက်ပြီးပြန်တော့ ဖြစ်၊
မသိသား ဆိုးဝါးသော အမိုက်မှောင်ဖုံးလွှမ်းလျက်
မမြင်နိုင်သော ရှေ့ ခရီးအတွက်
အနုပညာကို ဓမ္မဥာဏ်ဖြင့် ဆင်ခြင်ပြီးအိုမင်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းစတဲ့
အနုပညာရဲ့ အနှစ်သာရကို တူးဖော်ရင်း
နာကျင်နေသူများစီ ပို့ပေးဖြစ်ခဲ့သော အပြုံးများ
အပြုံးများလိုအပ်နေသည်။ လုပ်အားများ လုိုအပ်နေသည်။ အပြုံးများစွာနဲ့ လုပ်အားများကို ပို့ပေးမည်။ ကျွန်တော် အိပ်မက်မက်တတ်သည်။
လုပ်အားပေးလုပ်ဖို့ အလုပ်တွေများရသည်။ တစ်ပတ်တစ်ခါ အစည်းအဝေးသွားရသည်။ ရုံးကစောစောပြန်တတ်တဲ့ ကျွန်တော် အစည်းအဝေးမစခင် ၁နာရီအမြဲကြိုရောက်သည်။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အလုပ်များကြတော့ နောက်ကြကြပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် စောင့်စားတတ်သည်။ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ လုပ်အားပေးအတွက် အလုပ်လုပ်ရတာလည်း အလွန် ပင်ပန်းသည်။ ဒါပေမယ့် ပင်ပန်းတယ်လို့ မထင်ပါ။ ဘာ့ကြောင့်ရယ်တော့ မသိ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပျော်ပါသည်။ ဂျပန်ရောက် မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ မြန်မာ ပညာရှင်တွေအတူတူ လုပ်အားပေးသွားနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးရတာကို ပျော်သည်။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ရုံးကအပြန် အစည်းအဝေးကစောင့်ကြိုနေသည်။ စောစောအိပ်တတ်သော ကျွန်တော် ကွန်ပြူတာကပြောသော ၁နာရီထိုးပြီဆိုသော စကားကို ကြားဖူးခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် ပျော်ပါသည်။ ပျော်ပါသည်ဆိုလို့ စိတ်ညစ်တတ်သလားဆိုတော့လည်း စိတ်ကလည်း မညစ်တတ်ပါ။ တစ်ခုသဘောကြတာက အစည်းအဝေးလုပ်ကြသော သူငယ်ချင်းများ အချင်းချင်း ရန်မဖြစ်ကြပါ။ အလွန်ခင်ဖုို့ကောင်းပါသည်။ ကျွန်တော်က ရန်ဖြစ်ကြည့်ချင်လိုက်သေးပေမယ့် မဖြစ်လိုက်ရပါ။ (စနောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်)
စုစုပေါင်း မြန်မာလူငယ် ၄၃ယောက်၊ အဖွဲ့တွေခွဲလုိုက်တော့ ၄ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်တွေကိုရွေးပြီး တာဝန်ခွဲဝေရေးလုပ်သည်။ အားလုံးကို ခေါင်းဆောင်များက အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးသည်။ ကျွန်တော် ပီတိဖြစ်မိသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ပျော်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း မိန်းကလေး အင်အားကများသည်၊ ယောက်ျားလေးက ၁၀ယောက်နီးနီးပင် မနည်းထိန်းထားရသည်။ ဒါပေမယ့် အဆင်ပြေသည်။ အားလုံးရဲ့နှလုံးသားက ပွင့်လင်းသည်။
စနေနေ့မနက် ခရီးသွားဖို့ အိပ်ရာထသည်။ နှိုးရမည့် သူများကို နှိုးသည်။ နှိုးမရသည့်သူများကို ထပ်ထပ်နှိုးရသည်။ အစောကြီးထရသည်၊ ဒါပေမယ့် လန်းဆန်းနေသည်။ ပထမဆုံး ထွက်ခွာလာသော ရထားကို စီးသည်။ ပြီးတော့ မသိသောလမ်းကိုသွားသည်။ ဒါပေမယ့် လမ်းမပျောက်သော လမ်းညွန်ရှိသည်။ အစောဆုံးရောက်နေသည်။ ပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေသယ်သည်။ သူငယ်ချင်းများ စုရပ်ကို သွားသည်။ အားလုံး ရောက်နေကြသည်။ နောက်ကျသူမရှိ၊ သာမာန်ကိစ္စတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ဂုဏ်ယူမိသည်။ ပြီးတော့ ကျေးဇူးတင်မိသည်။
စကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်သည်။ အပြုံးတွေအများကြီး တွေ့ ရသည်။ နာမည်လွယ်လွယ် မမှတ်မိသော ကျွန်တော် နာမည်အများကြီး မှတ်ရသည်။ အလွန်ပင် ခက်ခဲသည်။ အခက်ခဲဆုံး အလုပ်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အပြုံးတွေ အများကြီး တွေ့ ရသည်။ အပြုံးများပေးဝေမိသည်။ ကားပေါ်မှာ အနားယူဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ရှုခင်းများလည်း အတော်လှသည်။
နေ့လည်စာ စားကြတော့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ၀င်သည်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းက အသံမာမာနဲ့ပြောသည်။ မခံစားနိုင်သော သူငယ်ချင်းများ ထွက်သွားကြသည်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ထမင်းဝအောင်စားသည်။ ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ လမ်းလျောက်သည်။ သူငယ်ချင်းများကို ပြုံးပြသည်။
တိုးဟုိုခုသွားမယ် သာပြောတယ်။ ကိုယ်သွားမယ့် မြို့ နာမည်ကို အတော်နဲ့ မမှတ်မိခဲ့ပါ။ နတိုရီမြို့  လို့ခေါ်တဲ့ မြို့ ရောက်တော့ နယ်မြို့ တို့ထုံးစံအတိုင်း ကားအရောင်းပြခန်းများ အများအပြားတွေ့ ရသည်။ မြို့ နယ်ရုံးကို ရောက်တော့ လူတစ်ဦးတက်လာသည်။ ကလေးတစ်ဦးလည်းပါသည်။ ဆာကူရအိ အမည်ရ မြို့ ခံ တံငါသည် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းများ ပြောပြသည်။ ကြေကွဲဝမ်းနည်းတတ်သော ကျွန်တော် ရင်ဘက်ထဲမှာ ငိုမိသည်။ ဒီလူ စကားပြောတတ်သည်ဟုလည်း ထင်မိသည်။ ဒါပေမယ့် ကလေးကတော့ အတော်ဆော့သည်။ ဒါပေမယ့် အားလုံး ပြုံးနေသည်။
လယ်ကွင်းတစ်ခုစီသို့ရောက်သည်။ ဂျပန်လယ်ကွင်းထဲက စပါးနှံများကို စားကြည့်မိသည်။ ချိုမွေးသော ရနံ့ကို နှစ်ခြိုက်မိသည်။ လယ်ကွင်းတည်ဆောက်ပုံကို သဘောကြသည်။ စည်းစနစ်ကြသည်။ နည်းပညာ ရှိသည်။ ကျွန်တော် အားကြသည်။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ကိုလည်း ဖြစ်စေချင်သည်။
ဆူနာမီဒဏ်ခံမြို့  အရှေ့ ခြမ်းကို သွားသည်။ အဝေးပြေးလမ်းမတစ်ဖက်ခြမ်းမှာ ရှိသည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကို ကျော်တော့ ဟင်းလင်းပြင်ကြီးကို တွေ့ ရသည်။ ဒီနေရာမှာ အရင်က လူနေအိမ်တွေ ရှိသည်။ ကြေကွဲစရာ ဇာတ်လမ်းများ ရှိခဲ့ပြီ။ နှလုံးသားတစ်ခြမ်းနဲ့ ငိုမိသည်။ တောင်ကုန်းလေးပေါ်က ဘုရားကျောင်း ပျက်ကလေးမှာတော့ ဆုမွန်ကောင်းတွေ တောင်းခဲ့သည်။ ပင်လယ်ကြီးလည်း မြင်ရသည်။ ကျွန်တော် ပင်လယ်ကို မမုန်းနိုင်သေးဘူး။
ညနေစောင်းတော့ ရေချိုးသည်။ ဂျပန်ရေချိုးခန်းဖြစ်သည်။ အညောင်းအညာပြေသည်။ စကားအချို့ ပြောဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် မျက်စိမှုန်နေသည်။ ပင်ပန်းမှုတွေတော့ ပြေပျောက်သွားသည်။ အပြန်လမ်းကို ကြည့်မိသည်။ နေ၀င်နေပြီ။
ညစာထမင်းစားပွဲရှိသည်။ အလုပ်ရှုပ်သူတွေ ရှုပ်ကြသည်။ အလုပ်လုပ်သူတွေ လုပ်ကြသည်။ ပြီးတော့ စားကြသည်။ သောက်ကြသည်။ ပျော်ကြသည်။ ပြုံးပန်းဝေကြသည်။ အချိန်တွေလည်း အကုန်မြန်လှသည်။ ကျွန်တော်လည်း သနပ်ခါးလိမ်းဖြစ်သည်။ အားလုံး ပြုံးနေသည်။
မနက်ဖြန်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရမည်။ ချက်မယ်ပြုတ်မယ်။ လှီးမယ် ခုတ်မယ်။ ဆေးမယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အခက်အခဲများရှိသည်။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်းပဲ ကျော်လွှားလိုက်သည်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာကို လုပ်လုပ် အမြဲပြုံးထားသည်။ သို့သောလည်း အိပ်ချင်သည်။ မနက်၂နာရီထိုးသွားသည်။ အိပ်လိုက်သည်။ အိပ်စရာနေရာ အတော်ရှာလိုက်ရသည်။ ဒါပေမယ့် အိပ်ပျော်သွားသည်။
မနက်၎နာရီထိုးတော့ နိုးပြန်သည်။ နှိုးသင့်သူများကို နှိုးသည်။ လုပ်သင့်သည်များကို လုပ်သည်။ ပြင်ဆင်စရာရှိတာ ပြင်ဆင်သည်။ ပွဲနေရာသွားကြည့်သည်။ အချိန်ကိုက် မဖြစ်နိုင်အောင် မိုးရွာနေသည်။ ကြိုသိခဲ့ပေမယ့် မျှော်လင့်မိသည်။ အဲဒီအတွက် မိုးတိတ်သွားသည်။
ချက်ကြ၊ ပြုတ်ကြပြန်သည်။ ပြင်ကြ ဆင်ကြပြန်သည်။ အချက်အပြုတ်အသင်းဝင်တွေ မမောမပန်းချက်နိုင်ကြသည်။ ပြီးတော့ လှူဒါန်းကြမည်။ စားကြသူတွေကို ကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်သည်။ အမောများလည်း ပြေသည်။ ကတဲ့သူတွေကလည်း ကကြသည်။ ဆိုတဲ့သူတွေကလည်း ဆိုကြသည်။ တီးတဲ့သူတွေကလည်း တီးကြသည်။ စားတဲ့သူတွေက စားလည်းစားသည် ကြည့်လည်းကြည့်သည် ပြီးတော့ နားလည်းထောင်သည်။ အလှူဒါနမြောက်အောင် အားပေးသူ ၂၀၀၀နီးပါးရှိမည်။ ပျော်ပါသည်။ အပြုံးများလည်း တွေ့ ရသည်။
ပွဲပြီတော့ သိမ်းဆည်းပြီး လုပ်အားပေးရန် သွားရမည်။ ထမင်းဘူးကို လမ်းပေါ်မှာ ကားပေါ်မှာ စားကြသည်။ ပင်ပန်းနေကြသည်။ ဒါပေမယ့် တက်ကြွနေကြသည်။ ဇွဲရှိကြသည်။ ပီတိဖြစ်သည်။ လုပ်အားပေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လာသည်။ ရှင်းလင်းပြောကြားစရာများကို ပြောသည်။ နားထောင်ကြသည်။ ပြီးတော့ လမ်းလျောက်ပြီး မြို့ ပျက်ထဲကိုသွားသည်။ ကွင်းတစ်ကွင်းကို ရောက်သည်။ မြက်ပင်များကို တွေ့ ရသည်။ ထိုမြက်များကို နှုတ်ရမည်။ အားလုံးတန်းစီ။ အားလုံးပြုံးနေသည်။
မြက်ပင်များကို နင်းသူကနင်းသည်။ နှုတ်သူကနှုတ်သည်။ ထိုးသူကထိုးသည်။ ဆွဲသူကဆွဲသည်။ ခဏနားကြသည်။ ဆက်လုပ်ကြသည်။ ပြီးတော့ အားလုံးရှင်းသွားသည်။ ပျော်ကြသည်။ ဓာတ်ပုံများလည်း ရိုက်ကြသည်။ ပြီးတော့ ပြန်ဖို့ ကားစီကိုသွားသည်။ အမှတ်တရ ပစ္စည်းများလည်း ၀ယ်ကြသည်။
ရေချိုးခန်းတစ်ခေါက်သွားသည်။ ရေစိပ်သည်။ အနှိပ်ခံသည်။ အပြန် နောက်ကြသည်။ တောင်းပန်သည်။ ထမင်းစားသည်။ ထို့ကြောင့် အားရှိသည်။ လူပျောက်သည်။ ဒါပေမယ့် အဆင်ပြေသည်။ ပြန်တဲ့သူတွေ ပြန်သည်၊ ကျန်တဲ့သူတွေ ကျန်သည်။ ပြီးတော့ အားလုံး အိပ်ကြသည်။ မအိပ်ခင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြသည်။ အားလုံး ပြုံးနေသည်။
မနက်မုိုးလင်းတော့ မျက်နှာသစ်သည်။ ပြီးတော့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြသည်။ အထုပ်အပိုးပြင်သည်။ ပြန်ကြမည်။ နှုတ်ဆက်ပါသည်။ လမ်းမှာ ရဲတိုက်တစ်ခုနဲ့ ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ၀င်သည်။ လက်ခုပ်တီးကြည့်သူ တီးသည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်သူ ရိုက်သည်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်သည်။ ပြီးတော့ ပြန်ကြသည်။ လမ်းတစ်လျောက်လုံး အိပ်သည်။ ဆူနာမီ ကာတွန်းကားကြည့်သည်။ ပြန်အိပ်သည်။
တစ်ရေးနိုးတော့ ကျွန်တော်အိပ်မက်မက်နေသည်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်သည်။
သူ့ကို မြင်မြင်ခြင်း ချစ်မိသည်တော့ မဟုတ်ပေမယ့်၊ သူ့ရဲ့  ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ မျက်လုံးများကို သဘောကျမိသည်။ ရင်နာစရာ အတိတ်အကြောင်းတွေရှိတော့ စိုးထိတ်မှုအချို့ က ရှိနေမိသည်။ တည်ကြည်သော သူ့ဟန်ပန်က သေချာမကြည့်မိလျှင် ဒေါသထွက်နေသော မျက်နှာဟန်ပန်ဖြစ်ပေမယ့် အသေအချာကြည့်မိသော ကျွန်မအတွက်တော့ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုကို သူ့မျက်လုံးတွင် တွေ့ ရသည်။ ကျွန်မဘာကြောင့် သူ့မျက်ဝန်းကို ကြည့်မိနေမိသလဲဆိုတာ ကျွန်မကိုယ်တိုင် အသေအချာ မသိသည်ကတော့ အမှန်ပင်။ မေမေကပြောခဲ့ဖူးသည့် ယောက်ျားလေးများ မျက်လုံးကို မကြည့်မိစေနဲ့နော် သမီး ဆိုသော မှာကြားချက်ကို ကျွန်မမေ့လျော့နေမိသည်။
နှစ်သစ်တစ်ခု ကူးပြောင်းတော့မည်။ သူ့ကို ကျွန်မ မုန်းသည်။ အဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းပြောဖို့ ကျွန်မ အတော်ပင် ကြိုးစားခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ချစ်တယ်ပြောခဲ့တုန်းက ရှက်ပြီး ပျော်ရွှင်နေသော ခံစားချက်က အခုတော့ ၀မ်းနည်းပြီး တုန်လှုပ်နေမိသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သူ့ကို မချစ်ဘူးဟု ပြောလိုက်သည်။ သူငိုနေမည်ကိုသိသော်လည်း အချိန်တွေက ကုစားပေးသွားမှာပါဟု ပြောခဲ့သည်။ ရင်ထဲတွင် နာကျင်နေသော်လည်း ပြောခဲ့မိသည်။ အိမ်ရှေ့ က မြက်ခင်းလေးထဲက စူးပင်များနှင့်ပွင့်သော ပန်းပင်များကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ ဒါပေမယ့် နှင်းဆီပန်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ယုယစွာ ထွေးပွေ့ ထားချင်ပေမယ့် ပန်းအိုးထဲမှာပဲ ထားရတာ ဆူးပင်မှာပွင့်သော ပန်းတို့ရဲ့  သဘာဝပဲလေ။
ဟိုယိမ်း ဒီယိမ်း ရွေးနေမယ့်အစား